ပြျောနလေရေဲ့ – My Blog
“အျော………သူ့အကောငျ့လေးမီးစိမျးနပေါလား” ဖုနျးလေးကိုကိုငျပွီးfbလေးကို ဖှငျ့လိုကျတော့ သီရီအကောငျ့လေး မီးလေးစိမျးနတေယျလေ။ ဒါပမေယျ့ တဈခါမှလညျး နှုတျမဆကျရဲတဲ့ဘဝ။ သီရိရေ ကိုယျ့မှာသာ ကိုယျ့အပွဈနှငျ့ ကိုယျဖွဈခဲ့ရပွီ။ တို့နှဈယောကျခဈြခွငျးကို ကိုယျ့ရဲ့ဇီဇာကွောငျမှုကွောငျ့ တို့တှဝေေးခဲ့ကွရတာ မဟုတျလားလေ။ အားလုံးကိုယျ့အပွဈတှပေါကှာ” လို့ ဆှေးဆှေးမွမွေ့လေ့ေးတှေးရငျး အတိတျကို ဇျောမိုးတဈယောကျ တမျးတပွီးမဆုံနိုငျတဲ့ဘဝမို့ ဆှေးနရေတယျလေ။ ‘”အျောသီရိရယျ” ကနြျော..ရနျကုနျအရှပေို့ငျးတက်ကလိုလျ lecture therater တညျဆောကျရေးမှာ အနျဂငျြနီယာကနျထရိုကျတာ အဖွဈတာဝနျယူခဲ့တယျ။ ရနျကုနျကနပွေီး အလုပျသှားရတာလေ။ ကားမောငျးပွီးပေါ့။ ဖောငျဒေးရှငျးလေးစတငျနခေဲ့တဲ့အခြိနျမှာ ပုံစံတှကေ မတညျမငွိမျ၊ အခုတဈမြိုး တျောကွာတဈမြိုး ဖွဈနတောကွောငျ့ မူလဒီဇိုငျးအတိုငျး လုပျထားရကနေ ပုံစံပွောငျးတဲ့အတှကျ ပေါကျကှဲနတောအခြိနျ ကားကိုမွနျမွနျလေးမောငျးလာခဲ့တယျ။
သံလြှငျဘကျကမျးရောကျတော့ လမျးရှငျးပါတယျဆိုပွီး အရှိနျတငျလိုကျတယျ။ လူက ကိုယျ့အတှေးနှငျ့ ကိုယျဆိုတော့ ပတျဝနျးကငျြကို ကရုမစိုကျအားဘူးဗြ။ လမျးသှယျလေးကနေ ဆိုငျကယျတဈစီး အတငျးထှကျလာတယျ။ ကားရှအေ့ထိရောကျလာတာကွောငျ့ “ကြှီ..ဟီ..ဟီ..ကြှီ” ကားဘရိတျကိုအတငျးဖမျးနငျးရငျး ဒေါသထောငျးကနဲ ထှကျသှားတယျ။ မတိုကျမိပမေယျ့ ဆိုငျကယျကလဲတယျ။ လဲသာလဲသာ သောကျခလေးမက လကျထဲက ရခေဲခြောငျးကို မလှတျဘူး။ သိတဲ့အတိုငျး အလုပျထဲမှာဆဲနကေပြုံစံအတိုငျး အယုတျတအနတ်တတှေ ထှကျသှားတယျ။ ကားပျေါကဆငျးပွီး ဆိုငျကယျကိုထူရငျး ကွညျ့လိုကျကာ “ဟကေ့ောငျမလေး..ဒါကာကား ဟဲ့ကားတိုကျရငျ သတေတျတယျ နားလညျလား၊ နငျလငျမလိုခငျြတော့ဘူးလား” “အံမာ တိုကျခငျြတိုကျပလိုကျ၊ လငျမလိုခငျြတော့ဘူးလား ဘာလာနဲ့” ကနြျောလညျး အဲဒီအခါမှ သတိထားမိတယျ၊ ကောငျမလေးက မကျြကွောတငျးလေး ဆေးဆိုးဆံပငျလေးနှငျ့။ ရုပျလေးက ခဈြစရာလေးပါ။
တျောတျောလေးလညျး လှတယျ။ သူ့အရပျနှငျ့လိုကျဖကျတဲ့ အလှအပ အဖုအထဈတှကေ ရငျခုနျစရကွီးပေါ့။ ရငျထဲမှာ ရခေဲမွဈလေးစီးဆငျးသှားတယျ။ သိပျခဈြသှားပွီခေးရယျ။ “အဲဒီလိုပါ လငျယူမယျဆို ငါ့ကိုစဉျးစားပေးပါလို့” “အမျမသာကွီး..ရုပျကဖွငျ့ သငျးခြိုငျးကို ခွတေလှမျးနပွေီ ငါခဲနှငျ့ကောကျထုလိုကျရ” ကောငျမလေးက ပါးစပျကလညျးပွောရငျး ခဲကောကျကိုငျလို့ ကနြျောကားပျေါတကျပွီး အတငျးမောငျးပွေးရတော့တယျ။ “ဟိုကျ မလှယျကွောဇတျဇတျကွဲလေး” ကနြျော..အဲဇတျဇတျကွဲလေးကိုခိုကျသှားတယျ။ အငျး..အသကျကလညျး ခွောကျနှဈလောကျကှာမယျ့ သဘောရှိတယျ။ ဒီလိုအလနျးလေးက ငါလိုလူကို ဘယျကွိုကျမလဲကှာ.. ဘာဖွဈဖွဈသူ့အခဈြကို ရဖို့ငါ့သိက်ခာတှမောနတှကေို ခဝါခရြမှာပဲလေ။ ခဈြတော့လညျး လူငယျစတို၈ျဖမျးရမှာပေါ့။ နောကျနေ့ အဲဆျောကို အဲဒီနရောလေးမှာပဲ ကွိုစောငျ့ဖို့ စဉျးစားလိုကျတယျ။ အဟဲနဖူးစာရှာလယျပွီ။ ရနျကုနသားနှငျ့ သံလြှငျသူ၊ အဟီး..မိုကျတယျ။ အျော..ငါတော့ ရှငျမှလှေ့နျးနှငျ့တော့ တှပွေီ့။ အငျး..အဆငျပွအေောငျပဲ လုပျရမယျ၊ ငါ့အသကျက မိနျးမယူရမယျ့အရှယျရောကျနပွေီပဲ။ စိတျကူးနှငျ့ရူးပေါ့ဗြာ သီရိတဈယောကျပေါကျကှဲနတေယျ။
မနကျက ရခေဲခြောငျးလေးဝယျပွီး ဆိုငျကယျလကျတဖကျနှငျ့ ထိနျးစီးပွီး လမျးသှယျက လမျးမကွီးပျေါတကျတော့ အရှိနျနညျးနညျးလှနျပွီး သူမြားလမျးကွောပျေါ ရောကျသှားတာ။ ရနျကုနျဘကျကလာတဲ့ ကားနှငျ့တိုကျမိတော့မလို့။ လဲသှားတာ လူကို မထူပဲဆိုငျကယျကိုထူတယျ။ ပွီးတော့ သောကျအားမနာလညျး ပွောသေးတယျ။ ဘာတဲ့ လငျမလိုခငျြဘူးလားတဲ့။ သူ့အပူကနြတောပဲ။ ပွီးတော့လညျး ရိသဲ့သဲ့ရညျးစား စကားပွောသေးတယျ။ လူကဘဲ အိုဘဲနာကွီးဖွဈနပွေီ။ ဒီကမှ ဆယျ့ရှဈနှဈပဲ ရှိသေးတာ။ အားမနာလြှာမကြိုးပွောတယျ။ စိတျတိုပွီးခဲနှငျ့ထုမလို့။ “ခှေးသားကွီးတှရေ့ငျတော့.ဟငျးးးဟငျးး” ဒေါသစိတျလေးလြော့လိုကျပွီးမှ ပွနျတှေးကွညျ့လိုကျတယျ။ အသကျသာကွီးတာပါ။ ရုပျကမဆိုးဘူးပဲ “အမယျသူ့တဈကိုယျလုံးလဲ ရမှေေးနံတှနှေငျ့ မှေးနတောပဲ။ ရမှေေးပုလငျးမြား ဖိတျကလြာခဲ့သလားမသိဘူး” “အာ..ငါဘာတှတှေေးမိနတောလဲ” ဆတျဆတျကွဲလေး သီရိရငျထဲ အတှေးတခကျြ ခဏတာလေးဝငျသှားတော့။ သီရိတဈယောကျ ရှကျပွုံးလေး ပွုံးမိသှားတယျ။ သီရိလညျး ကြောငျးဘကျတကျဖို့အတှကျ ဆိုငျကယျကို ကြောငျးဘကျဦးတညျထှကျလိုကျတယျ။
ကြောငျးဘကျရောကျပွီး ကနြျောလညျး အလုပျမြားနတောကွောငျ့ ဘယျမှမထှကျပဲ အလုပျအတှကျ စီစဉျပေးနရေပမေယျ့ ခုနတုနျးက လမျးမှာတှတေဲ့ ကောငျမလေးက အတှေးထဲမှာ စိုးမိုးနတောကွောငျ့ ကိုယျ့ဟာကိုယျပွုံးမိတယျ။ ဆယျလီနာဂိုမကျလို လှတဲ့ကောငျမလေးရယျ မငျးဆီမှာလဲလေ။ နလေ့ညျထမငျးစားခြိနျရောကျတော့ ကငျတငျးဘကျကို သှားလိုကျတယျ။ ဆိုငျကလညျး ရငျနီးနပွေီ။ ဆိုငျရှငျမခယျြရီက အခါတိုငျးဆို ကနြျောကနောကျကပြွီးမှ လာလရှေိ့တော့ အံဩနတေယျ။ ဆိုငျမှာ ကြောငျးသားကြောငျးသူတှေ မြားနလေို့ လကျမလယျဘူး။ ကနြျောလညျး ဆိုငျထဲကိုကွညျ့လိုကျတော့ ဟားးးး ဟိုကောငျမလေး၊ ကွညျ့စမျး ဝေးဝေးရှာစရာမလိုဘူး ဒီကြောငျးကပဲ. နဖူးစာမှနျတော့တှရေ့ပွီပေါ့။ “ထမငျးပေါငျးတဈပှဲလာခြ၊ ပွီးတော့ သံပုရညျတဈခှကျ” အောသူမှာပွီငါခှငျဖနျပွီးအနားကပျလိုကျဦးမယျ။
“အကွျောဆရာ ထမငျးပေါငျးမွနျမွနျလုပျကှာ” “ဆရာစားမလို့လား၊” “မဟုတျဘူး ဟိုဆျောလေးလသေူမှာတာ” “အျောမသီရိလား.” “မငျးသိလို့လား.သိတယျ ဂဈြတူးမ” “ဟေ..သီရိတဲ့လား” “သီရိရတနာတဲ့ ဆရာ” “အေးးးရပွီလား၊ထမငျပေါငျး” “ရပွီဆရာ” “ပေး..ငါ့ကိုပေး” “ဆရာပို့ပေးမလို့လား” “အငျးးးးး” ကနြျောလညျး ထမငျးပေါငျးပနျးကနျယူကာ သီရိအနားကိုသှားပွီး “ရပါပွီ.ထမငျးပေါငျး” သီရိမော့ကွညျ့တော့ ရငျတောငျခုနျသှားတယျ။ “ဟာ. ဘဲရီးစားပှဲထိုးလား” “ဟုတျကဲ့” သီရီသဘောကသြှားတယျ လကျစားခခြှေငျ့ရပွီ။ “အော.ရနှေေးပေးဦး” “ရမယျ.” ကနြျောရနှေေးအိုးခပြေးလိုကျတယျ။ “တဈရှူးဘူးပေးအုံး” “ရမယျ” တဈရှူးဘူးခပြေးလိုကျတယျ။ “ဟငျ..ဇှနျးတှကေမသနျ့ဘူး” “ပေးပါ.ကနြျောရနှေေးစိမျပေးမယျ” ရနှေေးစိမျပေးပွီးဇှနျးခကျရငျး ဆေးပေးလိုကျတယျ။
စားပှဲခုံက ညဈပတျနတေယျ။ သုတျပေးလိုကျတယျ။ သူ့အနားမထိတထိလေးကပျပွီး သုတျပေးလိုကျတာ။ “ဟလေူ့..ဘာလို့အနားကပျတာတုနျး” “အဲသသေခြောခြာကွညျ့ခငျြလို့ပါ” “ဘာရှငျ့..” “အျော မောငျလေးဇျောမိုး.. အားနာလိုကျတာကှယျ၊ သီရိညီမလေး သံပုရာရညျသောကျဦးမလား” ကနြျောလညျး မခယျြရီအနားရောကျာလို့ ဆကျစကားမပွောပဲ ခှာလိုကျတယျ။ မခယျြရီနှငျ့ သီရိတို့စကားပွောနတေယျ။ မခယျြရီက ကနြေျာ့ဘကျလှညျ့ကွညျ့ပွီး အားတုံ့အားနာ ဖွဈနပေုံပဲ။ သူကတော့ ပွုံးစိစိနှငျ့… အငျးးသီရိရယျ မငျးငါ့ကိုပွုစားနိုငျတယျကှယျ။ ညနသေဲုးနာရီလောကျအလုပျကနပွေနခဲ့တယျ။ ဘုရားကုနျးကြျောပွီး ကြိုကျခေါကျအလှနျမှာ သီရိကိုဆိုငျကယျတှနျးရငျး လမျးမှာတှတေ့ယျ။
“ဟေ့…သီရီ” “ဟငျ..ဘဲရီး” “ဟာတဈခါတညျးဘဲ အဖွဈချေါလိုကျတာလား” “ဘာရှငျ့.နာခငျြပွနျပွီ” “အာကူညီမလို့ပါကှာ” “မလိုဘူး..ကိုယျ့အားကိုယျကိုးပဲ၊ ရှငျတို့ယောကျြားလေးတှကေ နညျးနညျးကူညီမယျ၊ ခငျခငျြတယျပွောမယျ၊ ပွီးရညျးစားစကားပွောမယျမ သိတာကလြို့” “အောသီရိကကွိုသိပွီးပွီပဲ.. အဖွပေေးဖို့ စဉျးစားတော့” “ဘာရှငျ့..” “ပေးပါ.ဆိုငျကယျ၊ ရော့ကားသော့ကားပျေါနခေဲ့ ဆိုငျကယျသှားပွငျလာခဲ့မယျ” ကနြျောကားသော့အတငျးပေးပွီး ဆိုငျကယျကို တှနျးလာခဲ့တယျ။ ဆယျ့ရှဈကုနျးမှာ ဆိုငျကယျပွငျဆိုငျမရှိတော့ အောငျခမျြးသာအထိ တှနျးလာခဲ့တယျ။ မောမှနျးတောငျမသိဘူး၊ အခဈြစိတျတှေ တဖှားဖှားပေါကျဖှားနလေို့ပေါဗြာ။ ကားသော့လေးပေးပွီး ဆိုငျကယျတှနျးကာ ထှကျသှားသော ကိုဇျောမိုးကို သီရိသနားသှားမိတယျ။ စိတျထဲလညျး ကွညျနူးမိတယျ။ သူ့အပျေါ တကယျဂရုစိုကျသော လူတဈယောကျ၊ ခဈြသောသူတဈယောကျကို တှရေ့တဲ့အတှကျလညျး ဖွဈတယျ။ သီရိစိတျထဲမှာ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးပွီး သူတပါးကို ကူညီတတျသော ဘဲရီးကိုလေးစားသှားတယျ။
ဘဲရီးကတော့ သီရိအပျေါ တရားဝငျခဈြခှငျ့ပနျလာမှာကိုလညျး တှေးမိတယျ။ အဲလိုဆိုရသျလညျး ကိုယျ့အပျေါ ဘျးလောကျသညျးခံနိုငျမလဲ စမျးသတျဖို့ စဉျးစားမိပွီး မိမိအဖွဈကို ရယျခငျြနမေိတော့တယျ။ ကနြျောလညျး ဘီးဖာပွီးဆိုငျကယျစီးကာ သီရိဆီလာလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ သီရိကိုသော့လှမျးပေးရငျး “သီရိရော့သော့..ကလေးတှစောသငျရဦးမယျမလား” “ဟငျဘယျလိုလုပျသိလဲ” “သီရိဆယျတနျးကလေးတှကေို Guide လုပျနတေယျမလား သှားတော့ ဆိုငျကယျတှနျးထားတာ ခြှေးတှနေဲ့.. ရလေေးဘာလေးခြိုးပွီးမှ သှား၊ မဟုတျရငျ ကလေးတှမေူးလဲသှားမယျ” “ဘာာာာာာာာာာ” “ရုပျကလေးကလှရကျသားနဲ့ လူကညဈပတျလို့ပါ” “ဘာ…ဘာပွောတယျ” “ဟဲ..ဟဲအလုပျတှရှေုပျပွီး ရမေခြိုးဖွဈဘူးဆို”
“အမလေး စှပျစှပျစှဲစှဲ” “သှားတော့လေ သီရိမနကျမှ ကိုစောငျ့နမေယျ” သီရိလနျ့တောငျလနျ့လာတယျ၊ ဒီလူကွီးက သီရိအကွောငျးသိနလေို့လေ၊ သီရိရယျခငျြသှားတယျ၊ စိတျထဲမှာလညျး တှဝေသှေားတယျ၊ ဘဲရီးနှငျ့တှတေ့ော့ သီရိစိတျထဲ ဘဲရီးကစိုးမိုးပွီးနတောလေ။ ညနကေလေးတှနှေငျ့ စာသငျနရေငျးပွုံးမိတယျ။ ညလညျး အိပျမပြျောဘူး မနကျရောကျတော့ စောစောလေးထလိုကျတယျ။ ရမေိုးခြိုးပွီး အလှပွငျရာက ရယျခငျြနတေယျ။ ဘဲရီးကိုလညျး တှခေ့ငျြတယျ။ “လူဆိုးကွီး တဖွေးဖွေးနှငျ့သီရိစိတျကို ဖမျးစားနိုငျတယျဟငျးး” အဲဒါနှငျ့ဆိုငျကယျလေးထုတျပွီးစီးကာ လမျးထိပျကိုထှကျတယျ၊ လမျးထိပျဝဲယာကွညျ့တော့ ဘဲရီးကားကိုတှတေ့ယျ။ လမျးထိပျဆိုတော့ သီရိရှကျသှားတယျ။ မတျောတဆ အိမျကလူတှနှေငျ့တှရေ့ငျ အရှကျကှဲမှာမို့ ခေါငျးငုံပွီး ဆိုငျကယျအတငျးမောငျးထှကျပွီး ကြောငျးကို လာခဲ့လိုငျတယျ။
စောစောရောကျတော့ ယောငျခြာခြာနှငျ့လေ၊ ကနြျောလညျး ကနြေျာ့ရှကေ့ ဆိုငျကယျအတငျးမောငျးသှားတဲ သီရီနောကျက လိုကျခဲ့တယျ။ သီရိနောကျကကားရပျပွီး “သီရိ..တဈခုခုစားရအောငျ” “ဟုတျ..ဟုတျ” ကနြျောကငျတငျးဘကျကိုလမျးလြောကျရငျးကနေ သီရိကိုကွညျ့တော့ သီရီကခေါငျးငုံကာ စဉျးစားနတေယျ။ “သီရိ..ကိုယျမငျးကိုခဈြတယျ” “ရှငျ…ဘဲရီး၊ အဲလိုပွောဖို့မစောလှနျးဘူးလား” “မစောဘူး..မငျးအနားမှာရှိတဲ့၊ ခဈြရငျထူး၊ မဟူရာနှငျ့ ဟိုဘဲလေးတှရေဲ့ခေါတော တဈထောငျနှငျ့ကွညျ့တဲ့ အကွညျ့တှကေ စိုးရိမျစရာကောငျးလို့ပါ” “အမျ..သူတို့ကနှာဗူးအကွညျ့နှငျ့ကွညျ့တယျပေါ့.. ဘဲရီးက ဘယျလိုလုပျသိလဲ” “မွှမွှေခေငျြးခွမွေငျတယျလေ” “အဲဒါဆို ဘဲရီးလညျးနှာဗူးပေါ့” “မဟုတျပါဘူး ကနြျောက အခဈြစှမျးရညျနှငျ့ ကွညျ့တာပါ” “ဘဲရီးက လိပျမြိုးပဲသိပျသိတတျတယျ” “သီရိကိုယျ့ကိုအဖွပေေးဦလေ” “ခကျြခငျြးဘယျပေးမလဲစောငျ့ပေါ့”
“အေးပါကှာစောငျ့ပါ့မယျ” ဒီလိုနှငျ့ကငျတငျးထဲရောကျတော့ စားစရာမှာလိုကျတယျ။ ကနြျောကကျောဖီ၊ သူကလကျဘကျရညျတဲ့။ ကနြျောလညျး အကွိုကျတူအောငျ လကျဖကျရညျမှာရတယျ။ ပိုကျဆံရှငျးတော့လညျး သူကအရှငျးမခံဘူး၊ သူ့စားတာသူသောကျတာ သူ့ဟာသူရှငျးသှားပွီး၊ ကနြျောကို ထားကာကြောငျးထဲကိုသှားတယျ။ သူ့မာနကို လုံးဝအထိမခံတဲ့မိနျးကလေးပါဗြာ။ သီရိတဈယောကျရငျထဲမှာတှဝေခေဲ့ရပွီ။ ရညျမှနျးခကျြတှေ တလှကွေီးနှငျ့ နလောခဲ့တာ။ ကိုဇျောမိုးရဲ့အကွငျနာခဈြခွငျးက သူအပျေါလှမျးမိုးခဲ့ရပွီ။ ဘယျသူခံနိုငျမလဲလေ ကိုယျ့လောကျဂဈြကနြသေူတဈယောကျ သိသိကွီးနှငျ့ ဆိုးတဲ့သူအပျေါ သညျးခံစိတျတှမှေေးပွီး ကိုယျ့ပေးမဲ့ မတ်ေတာတရားကို စောငျ့မြျောနသေူအပျေါမှာ နှလုံးသားက ခဈြခှငျ့ပေးလိုကျမိပွီ။ ကိုဇျောမိုးအပျေါမှာ ခဈြမိပမေယျ့ ကိုယျရဲ့လှတျလပျခှငျ့နှငျ့ ရညျမှနျးခကျြတှအေပျေါ ထိပါးလာမှာလညျး စိုးတယျ။
လောကဓံတရားကို အံတုပွီးရှဲ့တတျတဲ့ သီရိရဲ့အပွုအမူတှကေို ကိုဇျောမိုးနားလညျရငျ သိပျကောငျးမှာပဲလို့ တှေးမိတယျ။ နောငျတပတျတှမှောလညျး ဇျောမိုးဟာ သီရိနှငျ့အမွဲတှတေ့ယျ။ သီရိဆိုးနှဲ့တာ ခံရငျးနှငျ့ပဲ “သီရိ ကိုသီရိလေးကိုခဈြတယျကှာ.. သီရိသဘောထားလေးသိပါရစတေော့” “သီရိကနျ့ကှကျစရာမရှိဘူး ကိုကို” “ကိုယျ့ကို ကိုကိုလို့ချေါလိုကျတယျပေါ့နှျော သီရိ’” “အာ မသိဘူး” “ထပျချေါကှာသီရိရာ” “ချေါခငျြပါဘူး” “ချေါပါသီရိရာ” “ဘဲရီး” “ဟာကှာ..ရှတျ” ကနြျောနမျးပဈလိုကျတယျ။ စိတျထဲမှာ အားမလိုအားမရဖွဈလာလို့။ “အာ ကိုကိုနှျော” “ဟေးးးးးပြျောတယျဟေ့..ဟားးးဟားးးးဟားးးး” “ဟာ ကိုကိုဘာတှဖွေဈနလေဲ” “ဝမျးသာလှနျးလို့ပါကှာ” “ခဈ..ခဈ..ခဈ” “ကိုကိုတို့ဘုရားသှားရအောငျ” “ဒီမှာကိုကို ဒါမြိုးကရိုးနပွေီ၊ ပထမဘုရားသှားမယျ၊ ဒုတိယပနျးခွံသှားမယျ၊ ပွီးရငျ ဟိုတယျကိုချေါအုံးမှာ မဟုတျဘူးမလား” “ဟာသီရိကလညျးကှာ အဲလိုမဟုတျပါဘူး” “ဘာမဟုတျရမှာလညျးကိုကို၊
အဲဒါယောကျြားလေးတှေ လုပျနတေဲ့ သီအိုရီပဲလေ” “အငျးသီရိမှတျထားနှျော. ကိုကိုက သီရိကို ဘယျတော့မှဟိုတယျမချေါဘူး” “တကယျလား ကိုကို” “အငျးးး” “သီရိက ဟိုတယျပဲသှားခငျြတာ” “နိုး မချေါဘူး” “ကိုကိုပိုကျဆံမရှိလို့ မဟုတျလား” “ဘာ..မင်ျဂလာဆောငျပွီးရငျ တဈလလောကျဟိုတယျမှာ ဟနျးနီးမှနျးလုပျပဈမှာ.. သီရိကိုမနားစရေဘူး” “သှားညဈပတျ” “ဟားးးးးဟားးမကွောကျပါနှငျ့သီရိရယျ” “ဘာလဲပဲမွဈမို့လား” “အမျ..ပဲမွဈ..ဟားးးးဟားးးးး” “တျောပွီ…..ဘဲရီး” “သီရိကိုကိုခဈြတယျပွောလေ” “ခဈြတယျခဈြတယျ” “ခဈြတယျသီရိရယျ” ကနြျောလညျး သီရိကိုဖကျပွီး သီရိရဲ့နှုတျခမျးပါးလေးကို နမျးလိုကျတယျ။ သီရိလညျး ကနြေျာ့အနမျးတှကေို ပွနျတုနျ့ပွနျပွီးနမျးတယျဗြ။ အခဈြကိုတှရေ့တော့ ရငျခုနျသံခငျြးပါနီးစပျခဲ့ပွီလေ။ တဈယောကျနှငျ့နှငျ့တဈယောကျ အမွဲပဲတှခေ့ငျြတယျ။ တှရေ့ငျလညျး သီရိက ဘာပစ်စညျးလကျဆောငျပေးပေး လကျမခံဘူးဗြ။ အစားအသောကျစားရငျတောငျ တဈယောကျတလှညျ့ အကုနျခံခိုငျးတယျ။ ကနြျောဘယျလိုမွိုကမြှာလညျးဗြာ။
သူ့မှာ ကလေးတှကြေူရှငျပွရငျး ပိုကျဆံရှာတယျ။ ဘဝအတှကျဆိုပွီး သငျတနျးတှတေကျတယိ။ ကနြျောသူ့ကို စိတျမခတြော့ဘူး၊ သူ့မှာလညျး ယောကြားလေးသူငယျခငျြးတှကေ အမြားသား။ သိတဲ့အတိုငျးမစားရညှျောခံ။ အနံ့ရှူနတေဲ့ခဈြရငျ ထူးနှငျ့မဟူရာတို့ရှိတယျ။ ဖုနျးတှပွေောတယျ။ သူ့လှတျလပျခှငျ့ဆိုပွီး ပိတျပငျလို့ကမရဘူး။ ကနြျောသီရိကို အပိုငျခညျြဖို့ကွိုးစားတယျ။ လုံးဝလကျမခံဘူး။ “ကိုကိုသီရိကိုခဈြရငျ အဲလိုမလုပျနဲ့တဲ့ဗြာ” ကနြျောအကွံအစညျတှထေုတျနတောပေါ့ဗြာ။ ဒီလိုနှငျ့ ခဈြသူသကျတမျးသုံးလပွညျ့တဲ့အခါ ကနြျောအလုပျတှလေညျး ပွီးပွီမို့လို့ ကနြျောသီရိတို့ကြောငျးကို မသှားဖွဈတော့ဘူး။
သငျတနျးတကျခြိနျ မနကျပိုငျးတော့ တှခှေ့ငျ့ရတယျ။ နှဈယောကျသား ခဏတော့ စကားပွောဖွဈတယျလေ။ နီးနတေဲ့အခြိနျ သိပျမသိသာပမေယျ့ ကနြျောတဈလလောကျ ခရီးထှကျရတဲ့အခါ အရမျးလှမျးလာတယျ။ သီရိလညျး ကနြျောလိုပဲလှမျးနတေယျလေ။ ပွနျရောကျရငျ ဖုနျးဆကျပွောထားလို့ ကနြျောသီရိဆီကိုဖုနျးဆကျတယျ။ “ခလေးလေးကိုကိုပွနျရောကျပွီ” “မနကျသီရိဆီလာလေ’” “လာခငျြတယျကှာ.ကိုကိုအရမျးလှမျးနပွေီ” “သီရိလဲအရမျးလှမျးနတေယျကိုကို၊ သီရိဆီလာခဲ့ပါကှာ” “ကိုကိုနမေကောငျးဘူး သီရိရယျ” “ဟငျဘာဖွဈလို့လဲကိုကို၊ သီရိလာခဲ့မယျလေ” ကနြျောဝမျးသာသှားတယျ။ အိမျမှာ ကနြျောတဈယောကျတညျးလေ။ သီရိလာရငျ ကနြျော..ခဈြလိုကျမယျဆိုပွီး အကွံအစညျတှေ လုပျလိုကျတယျ။ ပဲမွဈမဟုတျကွောငျး သီရိသိသှားစရေမယျလေ။
“ကလငျ..ကလငျ” “သီရိ..လာပွီပဲ” “အငျးကိုကို” “လှမျးတယျသီရိရယျ” ကနြျောသီရိကိုဖကျပွီးနမျးလိုကျတယျ။ “အာ….ကိုကိုအိမျမှာလူမရှိဘူးလား” “ရှိဘူးလေ” “ဟော့တော့. ဘာလို့လိမျချေါတာလဲ နမေကောငျးဘူးဆိုပွီး” “သီရိကလညျးကှာ ကိုအရမျးလှမျးနလေို့” “သီရိလညျးလှမျးတယျကိုကို.ဒါပမေယျ့………” “သီရိရယျ ကိုကိုသီရိကိုအရမျးခဈြတာလေ” “သီရိသိပါတယျကိုကိုရယျ၊သီရိလေ အပြိုစငျဘဝကို ဒီလိုကွီး…” ကနြျောသီရိနှုတျခမျးကိုလကျညှိုးလေးနှငျ့ ပိတျလိုကျတယျ။ “သီရိရယျခဈြသူတှဖွေဈပွီး ခဈြသူဘဝမှာ ဒီလိုပဲခဈြကွတာပဲလေ၊ ကိုကိုသီရိကို လကျထပျယူမှာပါ.. ကိုကိုသီရိအပျေါမှာ တသကျလုံး သစ်စာရှိရှိ ပေါငျးသငျးမှာပါသီရိရယျ” “ဒါဆိုလညျးဂတိပဲနျော” “အေးပါသီရိရာ” “နောကျကမြှ သီရိကိုပဈသှားမယျဆိုရငျလညျး သီရိက ဂရုမစိုကျဘူး” “ကိုကိုပိုငျဆိုငျခငျြလှနျးလို့ပါ သီရိရယျ” “အငျးပါ ကိုကို” “ခဈြတယျသီရိရယျ” ကနြျောလညျး သီရိခါးကိုကဈြနအေောငျဖကျရငျး သီရိမကျြနှာအနှံ့ အနမျးမိုးတှရှောခလြိုကျတယျ။
တအိမျထဲ နှဈယောကျတညျးသာရှိတယျဆိုတဲ့ အသိက ကနြျောတို့နှဈယောကျလုံးကို စိတျအရမျးလှူပျရှားစတေယျ။ ခဈြသူနှဈဦးလညျးဖွဈတော့ လူမရှိတဲ့နရောမှာဖွဈတော့ သီရိရောကနြောရော ကာမစိတျကို ထိမျးခြုပျလို့ မရတော့ဘူးလေ။ ကနြျောသီရီနှုတျခမျးသားလေးကို နမျးလိုကျတယျ။ သိရီလညျး ရမကျခိုးတှဝေလောပွီလေ။ မကျြတောငျလေးစငျပွီး ကနြျောအကွငျနာတှကေို မြျောလငျ့နပွေီလေ။ ကနြျောသီရိကို အနမျးလေးပေးရငျး သီရိအကြီလေးကို အပျေါမခြှတျလိုကျတယျ။ သီရိရဲ့စနနှေဈခိုငျပေါ့ဗြာ လှလိုကျတာ။ နရေောငျမထိဘဲ ဖှငျ့ထှားခကျြဖွူဖှေးနတောပဲ၊ ရငျသားတှကေ ဘရာအပျေါမှာ ထှကျလုဆဲဆဲပေါ့။ ကနြျောလညျး ဘရာခြိတျကိုဖွုတျပွီးသီရိနို့တှကေို ကွညျ့မိတယျ။ စိတျတှထေနျနတေော့ နို့သီးခေါငျးလေးတှစေူပွီး ခြှနျထှကျနတေယျ၊၊ ပနျးရောငျသမျးတဲ့ နို့သီးခေါငျးနှငျ့ ဝနျးရံထားတဲ့ နိုးဝနျးလေးတှကေ ခဈြစရာအလှနျကောငျးနလေို့ ကနြျောလညျး ရငေတျနသေူပမာ တပွှတျပွှတျ အငမျးမရစို့လိုကျတယျ။
“ပွှတျ..ပွှတျ..ပွှတျ” “အားးးကိုကို..အားးးးဖွေးဖွေးစို့ပါကိရယျ” “ကိုအားရပါးရစို့ပါရစေ သီရိရယျ” “အငျးပါ ကိုကိုရယျ.. သီရိက ကိုကိုပွုသမြှ ခံရတော့မှာပဲလေ” “အဲလိုသဘောမထားနဲ့လခေဈြရာ၊ ခဈြကွပွီဆိုမှတော့ စိတျတူကိုယျတူခဈြခငျြတာ” “အငျးပါ ကိုကို ကိုကိုစိတျတိုငျးကသြာခဈြပါ၊ သရီခံပါ့မယျ” “သီရိကလညျးကှာ သီရိအကွိုကျလေးပွောပေါ့” “ဟငျ့ သီရိမှမလုပျဖူးသေးတာ ဘယျလိုလုပျသိမှာလဲ” “အငျးလေ သီရိ၊ လုံခညျြပါခြှတျလိုကျတော့မယျ” “ကိုကို့သဘောပါကိုကို” သီရိရဲ့ခှငျ့ပွုခကျြရပွီဆိုတော့ ကနြျောမွနျမွနျဆနျဆနျပဲ လုံခညျြကို ခြှတျလိုကျတယျ။ လုံခညျြလေးကြှတျပွနျတော့ ပငျတီလေးပျေါလာပွနျတယျ။ အနကျရောငျ ပငျတီလေးကို ခြှတျလိုကျတယျ။ သီရိကလညျး ကုတငျပျေါထိုငျပွီး အခြှတျခံတာလေ။ သီရိက ကုတငျပျေါထိုငျနတေဲ့တှကျ ပိပိကို ထငျထငျရှားရှား မတှရေ့ပမေယျ့ ဆီးခုံမှာမမှေးလေးတှေ ပေါကျနတောကွောငျ့ ကနြျောစိတျက အရမျးကိုဖီလျးဖွဈတယျ။
အမှနျအတိုငျးပွောရငျ ကနြျောသီရိကို အရမျးလှမျးတယျ။ သီရိကလညျး ကနြျောကို အရမျးလှမျးနတောလေ။ ကနြေျာ့ရဲ့တဏှာစိတျက ငယျထိပျအထိရောကျနတေယျ ပွောရမလားပဲ။ သီရိနို့ကိုစို့ပွီးပွီဆိုတော့ ကနြျောလုပျခငျြတဲ့ စိတျက သီရိပိပိလေးကို အရမျးယကျပေးခငျြတာပေါ့။ သီရိကို ကိုကုတငျပျေါလှဲလိုကျတယျ။ မို့ဖောငျးနတေဲ့ ပိပိကအရမျးကိုလှတယျဗြာ။ ကနြျောမနနေိုငျတော့ဘူး။ သီရိဘယျလိုခံစားနလေဲ ကနြျောမသိခငျြဘူး။ ရတဲ့အခှငျ့အရေးကို ကနြျောလကျလှတျမခံတော့ဘူးလေ။ ကနြျောကုတငျအောကျကနကော သီရိပေါငျလေးကို ကားကာအပျေါမွှောကျတငျလိုကျတယျ။ အရှတျသေးသေးလေး ပိပိအကှဲကွောငျးက ကနြေျာ့ကိုယကျလှဲ့ပါ။ လို့ဖိတျချေါနသေလိုပါ။ သီရိပိပိအကှဲကွောငျးအောကျခွမှောတော့ ကနြေျာ့ခြိုစို့ပေးမှုကွောငျ့ အရညျကွညျခြောဆီလေးတှေ စိမျ့နတေယျဗြာ။
ကနြျောအတှကျတော့ အခဈြရေ ခြိုခြိုလေးတှပေေါ့ဗြာ။ ခဈြသူရဲ့ပိပိက ထှကျတဲ့အရကွညျခြိုခြိုလေးကိုယကျလိုကျတယျ။ “ပလပျ..ပလပျ” “အားး အငျ့ဟငျ့ ကို..ကိုရေ..အားး” သီရိဆီက အခဈြအသံလေးထှကျပျေါလာတယျ။ ကနြျောလြှာကို အပွားလိုကျလုပျပွီး အားရပါးရ ယကျလိုကျတယျ။ “အာ့အငျ့ဟငျ့ဟငျ့ ကိုကိုရယျ ခဈြရူးရလိမျ့မယျ” အဲဒီအသံလေးက ကနြေျာ့စိတျကို အရမျးဖီးဖွဈစတေယျ။ အရှတျသေးသေး တှနျ့တှနျးလေးကိုလညျး လြှာနှငျ့အပွားလိုကျ ယကျလိုကျတယျ။ “အငျးးဟငျးးးဟငျးးကိုကိုအရမျးကောငျးးတယျကှာ” သီရီကအိပျရာခငျးကိုဆှဲဆုပျကိုငျပွီး တဟငျးဟငျးနဲ့ ညညျးနရှောတယျ။ သူ့အတှကျလညျး ဒါဟာ ပထမဆုံးအခဈြခံရခွငျးလေ။ ပထဆုံးအထိအတှကေို့ အရသာရှိနအေောငျ ကနြျောစှမျးဆောသျပေးနတောလေ။ တခကျြတခကျြယကျလိုကျတိုငျး သီရိဗိုကျသားလေးတှေ တငျးတငျးသှားတယျဗြာ။ လြှာကိုဖိပွီးမွုပျသထကျမွုပျအောငျ ဖိသိပျလိုကျတယျ။ အပြိုစဈလေးဖွဈလို့ အကှဲကွောငျးက ပေါငျကားထားပမေယျ့ စနေ့တေယျလေ။
ကနြျောအားစိုကျရတယျလေ။ အကှဲကွောငျးတလြောကျ အတငျးယကျရငျး သီရိအစကေ့လေးကို ထိအောငျယကျလိုကျတယျ။ ပိပိကမို့ဖောငျးနတောမို့ အစကေ့အထဲမှာ ရောကျနတောလေ။ အစကေ့လေးကို လြှာနှငျ့ကလျောပွီးနိုးဆှပေးလိုကျတယျ။ ဖိသိပျလိုကျ ကလျောလိုကျမို့လို့ သီရိမှာ တဟငျးဟငျးအျောနရေပွီ။ သီရိပိပိကလညျး အရညျတှရှေဲရှဲစိုနတောလေ။ အရညျတှေ လြှာနှငျ့သိမျးယကျပွီးမွိုခလြိုကျတယျ။ “အားးကိုကို..သီရိရငျထဲမှာ ကတုနျကရငျကွီးကှာ” ကနြျောသီရိ အစစေု့ပျလို့ရအောငျ ပိပိနှုတျခမျးသားနှဈဘကျဖွဲလိုကျပွီး အစကေို့ တပွှတျပွှတျစုပျလိုကျတယျ။ “အာ့ရှီးးရှီးး အာ့ ကိုကို” သီရီတကိုယျလုံးတုနျတကျလာတယျဧလ။ သီရိအျောဟဈညညျးညူရငျး တှနျ့လိမျကာပွီးသှားတယျ။ “အားးကိုကိုထှကျကုနျပွီထှကျကုနျပွီအားးးရှီးးရှီးးး” သီရိဆီကအရညျတှလှေမျ့ထှကျလာတယျဗြာ။
သီရီပွီးသှားတော့ ကနြျောလီးက အတှငျးခံဘောငျဘီထဲမှာ အရမျးရုနျးထှကျနပွေီ။ ကနြျောဘောငျးဘီခြှတျလိုကျတော့ ကနြေျာ့လီးက ခကျြအထိကပျနပွေီ။ “ဟယျ..အကွီးကွီးပါပဲလားကိုကို” “အငျး” “သီရိထငျမထားဘူးကိုကို.ကွောကျစရာကွီး” “မကွောကျကာနှငျ့သီရိရယျ.သူလညျးသီရိကို အရမျးခဈြတာ နာအောငျမလုပျပါဘူး.. သီရိကော သူ့ကိုအကွငျနာမပေးခငျြဘူးလား” “အှနျး…သီရိကွောကျတယျ” “လုပျပါကှာ သူလညျးသီရိအကွငိနာကို တမျးတနပွေီ” “ကွငျနာပေးခငျြတာပေါ့ကိုကိုရယျ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ဥစ်စာပဲလေ” သီရိလညျးပွောရငျး ကနြေျာ့လီးကို ကိုငျဆှဲပွီးစုပျလိုကျတယျ။ ကနြျောလီးဟာ လုံးပတျတဈလကျမ သုံးမတျအခငျြးရှိကာ အရှညျခွောကျလကျမ စှနျးစှနျးကလေးရှိတယျ။ ဆယျတနျးကတညျးက အရပွေားဖွတျ နောကျလှနျခြုပျထားပွီး ခြုပျရိုးနရောမှ ဖုထဈတှထေနတေယျ။ “ကိုကို ဒါကွီးဘာကွီးလဲ ကိုကို” “နောကျလှနျခြုပျထားတဲ့အရာပါကှာ” “အမလေးကွကျသီးထလိုကျတာကှာ” သီရိကပွောလညျးပွောစုပျလညျးစုပျလိုကျတယျ။ သီရိက သူ့ပါးစပျထဲလီးဝငျဆနျ့အောငျ အားထုတျစုပျလိုကျတယျ။ နူးညံ့တဲ့သီရိရဲ့ လြှာအစှမျးကွောငျ့ ကနြေျာ့လီးက အစှမျးကုနျတောငျလာတယျ။
အကွောကွီးပြိုငျးပြိုငျထပွီး သံခေါငျးတဈခြောငျးလို မာထနျလာတယျ။ သီရိခငျမြာ ကနြေျာ့လီးဒဈကွီးငုံစုပျရတာကွာတော့ ညောငျးလာတယျ။ အပွငျကပဲ ရခေဲမုနျ့စားသလို လြှာနှငျ့လီးဒဈကို ယကျပေးတယျလေ။ စူကွားဖူးနာဝရှိသလိုပဲလုပျပေးရှာတယျ။ “သဲ အပေါကျကလေးလြှာလေးနှငျ့ထိုးပေး” “အငျးးအငျးးး” လီးကိုယကျရငျးခေါငျးညိတျပွရှာတယျ။ ပွီးတော့ လီးအဝလေးကိုလြှာနှငျ့ထိုးပေးရငျး “ဒီလိုလားကိုကို” “အငျးကောငျးလိုကျတာသီရိရယျ” “ကိုကိုကသာကောငျးနသေီရိမှာတော့ အာတှညေောငျးလှပွီ” “အငျးပါသီရီရယျ.. ကိုကိုလိုးပါရစတေော့” “ကိုကိုသဘောပါ ကိုကို” “ကဲ ခုနတုနျးကအတိုငျးလေးနေ၊ ကိုကိုကုတငျအောကျကနပွေီး လုပျမယျ” သီရိလညျး ကုတငျအောကျခွဆေငျးထိုငျရငျး နောကျသို့လှခလြိုကျတယျ။ ပုံစကတော့ ကနြေျာ့အကွိုကျ ကုတငျကနျ့လနျဖွတျအိပျတဲ့ပုံပါ။ ဒီလိုးနညျးက အရမျးအားရစရာကောငျးတယျ။ သီရိခွနှေဈဘကျမိုးပျေါထောငျလိုကျတော့ သီရိအဖုတျရဲ့ နှုတျခမျသးပွူးပွီး ထှကျလာတယျ။ ကနြျောလညျး လီးကိုလကျတဖကျနဲ့ကိုငျပွီး လီးဒဈမွုပျရုံ အကှဲကွောငျးတလြောကျ ရှတေိူ့းနောကျဆုတျ လုပျလိုကျတော့။ “အာ့..အငျးးဟငျးးးကိုကို” သီရိရဲ့အသံလေးကတုနျတုနျရီရီလေး ထှကျလာတယျ။
ကနြျောလညျး ပိပိအပေါကျထဲလီးကို ဖိနှိပျပွီးသှငျးလိုကျတယျ။ လီးဒဈကဝငျသှားတာ သီရီရဲ့ အဖုတျနှုတျခမျးသားတှပေါ လိပျဝငျသှားသလို မွငျရတယျဗြာ။ွ”ပှတျ..ပလှတျ” ဆိုတဲ့အသံနှငျ့အတူ “အားး ကိုကို.အားကြှတျကြှတျ” သီရိရဲ့အလနျ့တကွားအျောသံနှငျ့အတူ လကျကတှနျးထုတျတယျ။ လီးကသုံးလကျမခနျ့ သီရိအဖုတျထဲလီးက တငျးကွပျစှာဝငျသှားတယျ။ “ဗဈြ..ဗဈြအသံနှငျ့အတူ “အားးလားးလားကိုကိုဖွေးလုပျပါ” “အငျး…..းပါသီရိရယျ” ကနြျောလညျး သီရိသကျသာအောငျနို့ကို ကုနျး၍စို့လိုကျတယျ။ နို့ကိုဘယျရောညာရော အပွနျအလှနျဘကျညီအောငျ့စို့ရငျး လြှာဖြားလေးနှငျ့ ယကျလိုကျတယျ။ ကုနျးစို့ရငျးပငျ သီရိပုခုံးအောကျလကျလြိုပွီး လကျကို ပကျလကျထားကာ ပုခုံးကိုဆှဲကိုသျလိုကျတယျ။ သီရိကတော့ အဖုတျမှာလီးဝငျရငျး နို့စို့ခံရတဲ့အတှကျ နာနရောက သကျသာလာတယျ။
ကနြျောလညျးလီးကိုအဆုံးထိ မသှငျးပဲ ဒဈကွီးနှငျ့အစကေို့ ပှတျဆှဲပေးပွီး တဖွေးဖွေး ရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျလိုကျရာ “အငျ့..ဟငျ့..ဟငျ့…ရပွီကိုကို” ကနြျောနောကျထပျနှဈလကျမခနျ့ ထပျသှငျးလိုကျတယျ။ “ဗွိ..ဗွိ..ဖောကျ” “အားးကိုကို…အားးနာလိုကျတာ ကိုကိုရယျ” ကနြျောလီးကအမှေးပါထိုးခှဲပဈလိုကျတာလေ။ ဒဈကားကွီးဆိုတော့ အမှေးကှဲပွီပေါ့ဗြာ။ “ခဏလေးပါသီရီရယျ၊ အပြိုစဈအမှေးပါး ပေါကျသှားလို့ပါ” “အငျး..သီရိသိတယျကိုကို အဲလိုနာမှာစိုးလို့ ကိုကိုကို သီရိမပေးခဲ့တာ” အခုကော ဘာလို့ပေးလဲဟငျ” “ကိုကိုကို အရမျးခဈြလို့” ကနြျောထပျပွီးမသှငျးရဲသေးဘူး။ တငျးကပျြလာတဲ့ အဖုတျညှဈအားကို ကနြျောခံစားရပွီ။ နောကျဝငျလာမယျ့လီးအတှကျ ကွောကျလနျ့ပွီး ညှဈလသေလား ကောငျးလှနျးလို့ ညှဈလသေလားတော့ သိတော့ဘူး။ ခဏလေးရပျကာ နို့ကိုကုနျးစို့လိုကျတယျ။ ခဏတာဝဒေနာလေးခံစားပွီး နောကျမှာတော့ “ရပွီကိုကိုသီရိခံနိုငျပွီ” သီရိခံနိုငျပွီဆိုမှ ကနြျောကနျြရှိတဲ့လီးကို သှငျးလိုကျတယျ။ ကနြျောဆီးခုံနှငျ့ သီရိဆီးခုံကပျသှားတဲ့အထိ ဖိကပျလိုကျတယျ။
ဂျေါလီသီးလို ခြုပျရိုးကဘုတှကေ သီရိအဖုတျနံရံတလြောကျ ပှတျဆှဲလို့နတေယျ။ “အာ့..ကိုကိုရယျ…အာ့.၊သားအိမျမြားထိလသေလားကိုကို အထဲကအောငျ့သှားတယျ” “မထိပါဘူးသီရိရယျ.အစမို့ပါကှာ.. ကိုကိုဆကျလိုးတော့မယျနျော” “အငျးလိုးလကေိုကို” ကနြျောလညျး လီးကိုတဈလက်ခခနျ့ခနျြပွီး အသှငျးအထုတျမှနျမှနျနဲ့ အသားကလြေးကငျြ့လိုးလိုကျတယျ။ “ဗဈြ..ဗဈြ ဗဈြ..ဘှတျ..ဖတျ..ဖတျ” “အာ့အငျ့..ဟငျးးးဟငျးး” သီရိကတော့မကျြလုံးလေးစုံမှိတျပွီး အောကျနှုတျခမျးလေးကိုကျကာ ညညျးတှားနတေယျလေ။ “အာ့..ရှီးးရှီးမွနျမွနျလေးလုပျပေးပါ ကိုကို” ထိနျးပွီးလိုးနတေဲ့ကနြျောဝမျးသာသှားပွီး မွနျွမျနျလေးလိုးလိုကျတယျ။ ကနြျောရဲ့ဆောငျခကျြမှာ သီရိအဖုတျနှုတျခမျးသားတှေ လိပျဝငျသှားမတတျ ဖွဈသလို ပွနျထုတျခြိနျမှာလညျး အုံလိုကျကွှတကျလာသလို လီးဒဈကွီးက ဆှဲယူလာတယျ။
လီးဝငျခကျြတဗြိ.ဗြိ တဇှပျဇှပျမွညျနသေလို ဆီးခုံခငျြးထိသံက တဖနျးဖနျးမွညျနပွေီ။ သီရိရဲ့အျောညညျးသံလညျး ပိုကယျြလာတယျ။ “အားးရှီးးရှီးးကိုကိုရယျ..အာား” “သီရိကောငျးရဲ့လား” “အားအရမျးကောငျးတယျကိုကို.. အား.. ရှီး… ကွမျးကွမျးလေးလုပျပါကိုကို. သီရိပွီးခငျြနပွေီ” ကနြျောခဈြသူလေးနာမှာစိုးလို့ ကွမျးကွမျးမလုပျခဲ့တာ။ ခဈြသူသာ တောငျးဆိုလို့ကတော့ ကုတငျကြိုးပစဆေိုတဲ့ ကနြျောသီရိပုခုံးကိုဆှဲကိုငျပွီး ကွမျးလိုကျတယျ။ သီရိကလညျး ကနြေျာ့ခါးကိုဆှဲပွီး အောကျကပငျ့လာတယျ။ သီရိရဲ့ လကျသညျးခြှနျတှလေညျး ကနြေျာ့အသားကို စူးနဈဝငျလာတယျ။ အဲလိုဖွဈလေ စိတျကွှလဖွေဈပွီး တဘိုငျးဘိုငျး တဒိုငျးဒိုငျးမညျအောငျ လိုးလိုကျတယျ။ “ဖနျးးဖနျးးဖနျး..ဗြိ.ဗွိ..ဘှတျ.ဖနျးးးဖနျး” အား..ကိုကိုသီရီပွီးပွီအားးး” သီရိကအကွောဆှဲသလို တခကျြနှဈခကျြခနျ့တှနျ့ကာ ငွိမျသှားပမေယျ့ ကနြျောကတော့ မပွီးသေးဘူး လိုးလို့ကောငျးဆဲ။ သီရိပွီးသှားတော့ အရညျတှထှေကျလာတာကွောငျ့ သီရိအဖုတျက အမွှုပျတှပေါထလာတယျ။ လိုးရတာလညျး အရမျးကောငျးလာတယျ။
နောကျထျငါးမိနဈခနျ့ ဆကျလိုးတော့ ကနြျောသုတျတှေ သီရိအဖုတျထဲ ပနျးထညျ့လိုကျပမေယျ့ ကနြျောလီးက နညျးနညျးမှ မညိုးသေးပါဘူး။ “အား ကိုကိုခဏလောကျနားပါအုံး ကိုကိုရပွ.ီ.. ရီအဖုတျနာလှပွီ” ကနြျောအခဈြလေးသီရိကိုသနားလို့သာ ခဏရပျပေးလိုကတယျ။ လီကတော့ တောငျနဆေဲလေ။ ခဏတာရပျပေးလိုကျတော့ “အာ..ကိုကိုပွီးသှားပွီမဟုတျဘူးလား” ကနြော့ရဲ့တောငျနဆေဲလီးကိုကွညျ့ပွီးသီရိကပွောလာတယျ။ “သီရိအမွငျပဲလေ ကိုကိုမပွီးသေးဘူးကှာ” “အာ သီရိတော့ခဏနားခငျြတယျကိုကို” “နား..လေ အခဈြ..ဒါပမေယျ့ကိုကို မပွီးသေးဘူးနှျော” “အငျးပါ.သီရီသနျ့ရှငျးရေးလုပျခငျြတယျ” “လာလကေိုကိုလုပျပေးမယျ” ကနြျောရခြေိုးခနျးဘကျကို သီရိလကျကှဲဆှဲရငျး ချေါလာခဲ့လိုကျတယျ။ ရခြေိုခနျးထဲ water heater လေးကို ဖှငျ့ပွီးရနှေေးလေးနှငျ့ သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးလိုကျတယျ။
“”အာ ကိုကိုကလညျးသီရိဘာသာလုပျပါ့မယျ” “ရဘူး ကိုကိုကလုပျပေးခငျြတာလေ” “အငျ့အငျး..ကှာ ရှကျတယျ၊သီရိဟာလုပျပေးနဲ့၊ ကိုကိုဟာအရငျလုပျပေးလိုကျမယျ.လာခဲ့” သီရိကနြော့လီးကွီးကိုကိုငျပွီး ရနှေေးစပျထားတဲ့ ရဖွေငျ့ ယုယုယယဆေးပေးတော့ ကနြျောလီးက ပိုပွီးမာလာပွနျတယျ။ “အာ ကိုကို မာလာပွနျပွီ၊တျောတျောဆိုးတယျ” “ဟငျးးဟငျးးးသီရိအဲလိုကိုငျပေးတော့ အရမျးထလာတာလေ” “မလှယျဘူးကှာ ဒီနတေ့ော့အသကျတောငျ အိမျပွနျပါ့မလးမသိတော့ဘူး” “အမြားကွီးမလုကျပါဘူးကှာ သူပြော့သှားရငျ ရပျလိုကျမယျ” “အငျးးးးပါ..ကိုကို့သဘော…ကိုကိုက လညျး စပွီးပဲလုပျပွီးပွီပဲလုပျပေါ့”” သီရိကဆပျပွာဘူးရညျလေးညဈရငျး ကနြေျာ့လီးကို သခြောတိုကျခြှတျပေးတာ ဖငျကွားရော ဂှေးဥတှပေါ ပွောငျအောငျဆေးလိုကျတယျ။ “ကဲရပွီကိုကိုအိပျခနျးထဲကပဲစောငျ့တော့” ကနြျောလညျးသီရိကိုကုတငျပျေါက စောငျ့နလေိုကျတယျ၊ ခဏနတေော့ သီရိရောကျလာပွီး ကုတငျပျေါလှမျးတကျလိုကျကာ လှဲနတေော့ ကနြျောက သီရိကိုလှမျးဖကျပွီး နမျးလိုကျတယျ။
သီရိလညျးပွနျနမျးပွီး ကနြျောနှငျ့ သီရိလြှာတိုကျပှဲစနတောပေါ့။ ကနြျောလကျကတော့ ဝကျမွီးလိုပဲ လှုပျရှားနလေိုကျတယျ၊၊ လုပြိုသိုး ကနြျောအတှကျကတော့ လိငျဆကျဆံရေးကို ကွုံဖူးနတောကွာပါပွီ လိုးလညျးလိုးနိုငျတယျ၊ အကွာကွီးလညျးလုပျနိုငျတယျ။ လိုးပွီးရငျ စှဲစှဲလနျးလနျးကနျြတဲ့ သဘောတှကွေောငျ့ ဇယားကပျမှာ စိုးလို့ ကနြျောရှောငျလိုကျ စားလိုကျပေါ့။ အခုက သီရိကိုတကယျလညျးခဈြမွတျနိုးပွီး လကျထပျယူမှာမို့ အိမျကိုအပါချေါလိုးတာပါ။ သူ့ကိုလညျး စှဲလနျးနအေောငျ ကနြျောလိုးမှာပါ။ အလိုးမခံဖူးသေးတဲ့ သီရိအခုဆို ကနြေျာ့အလိုကြ ဖွဈလာပွီလေ။ ကနြျောက သီရီကိုဖကျပွီး လညျတိုငျလေးကို နမျးလိုကျ နားရှကျကလေးကို ဖွေးဖွေးကိုကျလိုကျနဲ့ဆှပေးနတောပါ။
အခြို့မိနျးကလေးတှရေဲ့ ကာမစိတျဖွဈစတေဲ့နရောဟာ မတူဘူးလေ။ တခြို့က လညျတိုငျလေးကိုနမျးရငျ ကာမစိတျက အရမျးကွှလာသလို၊ တခြို့ကလညျး တကိုယျလုံးပှတျသတျပေးရငျ စိတျတှအေရမျးထတယျ။ တခြို့ကလညျး နို့စို့ပေးရငျအရမျးကွိုကျတတျတယျလေ။ သိရီအကွိုကျမှနျးဆရငျး ကနြျောကနြျောသီရိရဲ့ ကာမစိတျကို အသဈတဖနျနှိုးဆှဖို့ လုပျလိုကျတယျ။ သီရိလညျး ကနြော့လီးကိုကိုငျဆှပေးပွီး “အငျ့..ဟငျးးးးကိုကိုရယျသီရိပွနျဖွဈလာပွီကှာ” “သဲလေး ကိုကိုပွနျမှုတျပေးခငျြတယျကှာ” “ကိုကိုသဘောပါကိုကို” “သီရိကောမကွိုကျဘူးလား” “ပွောစရာလိုလို့လားကိုကိုရယျ၊ အားလုံးကွိုကျကွမှာပဲလေ” ကနြျောလညျးနောကျတဈကွိမျအတှကျ သီရိပိပိကိုဒုတိယံပိ ယကျရမှာပေါ့ဗြာတယျ။ ဒီအခေါကျကတော့ ဆပျပွာရနံ့လေး သငျးသငျးမှေးနတေယျ။
ဒါပမေယျ့ ကနြေျာ့အတှကျတော့ အဲဒါဟာ စိတျအနှောကျအယှကျပါပဲ။ ပိပိအနံ့နှငျ့တူမှ အရသာရှိတယျ။ မှေးပွီးအေးစကျနရေငျ အရသာပေါ့တာပေါ့ဗြာ။ ပိပိရနံ့ သငျးသငျးလကေသာ ကနြေျာ့ကို ဆှဲဆောငျနိုငျတာ။ ဒီတဈခါတော့ ပိပိကိုသသေခြောခြာလေး ယကျလိုကျဖို့ သီရိခါးအောကျ ခေါငျးအုံးခုဖို့အတှကျ “ခဈြလေး….သဲခါးအောကျအုံးခံလိုကျမယျလေ” “အငျးလကေိုကိုအဆငျပွသေလိုလိုကျပေါ့” အဲဒါဆိုခါးကွှပေး” သီရိလညျးခါးကိုကွှပေးတဲ့အတှကျ ကနြျောခေါငျးအုံးတဈလုံးယူကာ သီရိခါးအောကျထိုးထညျ့လိုကျ။ အနအေထားကတော့ ရှငေါးပြော့။ သီရိပိပိက ပိုပွီးကွှလာတယျ။ ဖွူဖှေးနတေဲ့ အသားအရညျက အခုတော့ ကနြေျာ့ကွောငျ့ နီရဲနတောပေါ။ လိုးခကျြပွငျးပွငျးဒဏျခံလိုကျရတဲ့ ပိပိအာနီရဲလို့ နတေယျလေ။ ကနြျောလညျး သီရိခွကေို အပျေါတှနျးတငျတော့ သီရိကလကျနဲ့ လှမျးဆှဲလိုကျတယျ။ အဲဒီအခါမာ သီရိရဲ့ပိပိသာမက စီရိရဲ့ဖငျနီနီလေးပါ ပျေါလာတယျ။
တဏှာစိတျတှေ မှနျထနျနတေဲ့ ကမြျောအတှကျကတော့ အကွိုကျပေါ့၊၊ ကနြျောစိုဝကနပွေီ့း ပိပိအကှဲကွောငျးတဈလြောကျ ယကျလိုကျတယျ။ သီရိတကိုယျလုံး တုနျတကျသှားတယျ။ ဘယျလိုမှ ထငျမထားတာလေ။ “အားးးးကိုငိုရယျ..ဘယျလိုလုပျလိုကျတာလဲ” ကနြျောစအိုဝနီနီကလေးကိုလြှာနှငျ့ ထိုးမှလေိုကျတယျ။ “အာ……ရှီးးးးအားးးးးအမလေးးးးးး” သီရိတဈယောကျလိမျ့နအေောငျခံစားနရေတယျ။ စအိုဝနီနီလေးကို အယကျခံလိုကျရတဲ့ခံစားမှုက ကတဟ၌ဏှာစိတျကို ပွငျးပွစတေယျ။ ပိပိထဲက အရညျတစေီ့းကလြာတယျ။ ကနြျောပိပိကို အလှညျ့ပေးပွီး နှုတျခမျးသားအား လကျနှငျ့ဖွဲကာ လြှာနှငျ့အတှငျးနံရံကို မှလေိုကျတယျ။ “အ အ…..အာ့အာ့…အားးးးးးရှီးး” သီစိတဈယောကျတဆတျဆတျတုနျသှားပွီး တအာ့အနှငျ့ညညျးညူနတေော့တယျ။ “အာ့ကိုကို.တျောပွီကှာ..အားးသီရီသလေိမျ့မယျ” ကနြျောလညျးရပျမပေးဘူး အစကေို့တပွှတျ. .ပွှတျစုပျလိုကျတယျ။ “အားလားးလားးဝိုးးးတျောပွီအားးးးးကိုကို အိုးးး” သီရီတဈယောကျအခံနိုငျတဲ့အဆုံး အသညျးအသနျရုနျးကနျပွီးထလာတယျ။
“အာ..ကိုကိုတျောပါတော့ဆို” “ဘာဖွဈလို့လဲ..ခဈြ” “အာ….ဘယျလိုကွီးဖွဈမှနျးကိုမသိဘူး၊ အသညျးတှအေူတှေ ပွုတျကသြှားသလို တလှပျလှပျနဲ့ကှာ” “ဟားးးဟားးကိုကိုအဲလောကျတောငျ ကြှမျးသလားကှာ” “လာခဲ့သူမြားကိုနှိပျစကျတာ ကိုကိုလညျး ပွနျခံစားရမယျ” “ရပါပွီသဲရဲ့ ကိုကိုလိုးခငျြပွီ” “မရဘူး.သူမြားခံရသလိုခံရမယျလာ. အိပျ.” ကနြျောလညျးလှဲအိပျလိုကျတယျ။ သီရိက “လာလေ..တငျပါးအောကျခေါငျးအုံးခံ သီရိတုနျးကလိုပွနျလုပျမှာ” ကနြျောလညျးခါးကိုပွနျကွှပေးလိုကျတယျ။ သီရိက ကနြေျာ့ခါးအောကျ ခေါငျးအုံးထိုးထျာ့လိုကျတယျ။ ပွီးတော့ “ခွထေောကျမိုးပျေါထောငျပေး” ကနြျောခွထေောကျတှမွှေောကျပွီးဒူးကှေးကာနလေိုကျတယျ။သီရိကကနြေျာ့ပေါငျကွားခေါငျးထိုးဝငျပွီးလီးကိုစစုပျတယျ။ဒီတဈခါတော့မသီရိကနြေျာ့ကိုလကျစားခခြေနျးပေါ့ဗြာ။ကနြျောအျောရပွီလေ။ပထမအခေါကျတာရှကျရှံ့နပေမေယျ့ဒီတဈေခေါကျတော့လီးဒဈတှကေိုလြှာနှငျ့ယကျတယျဂှငျးတိုကျပေးသေးတယျဗြ။ပါးစပျထဲလီးငုံပွီးရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျတယျ။
“အားးးအရမျးကောငျးတယျကှာ” ကနြျောလညျး တအအားနှငျ့ ဖီးတှအေရမျးကောငျးနတောပေါ့ဗြာ။ လီးထိပျဝကို လြှာနှငျ့ထိုးထိုးမှတေယျဗြ။ လီးစုပျပေးရငျး ဂှေးဥကို ဖှဖှလေးညှဈပေးတယျ။ ကနြေျာ့လီးက အစှမျးကုနျတောငျလာတယျ။ သီရိက လီးစုပျနတောကိုရပျပွီး ဂှေးဥလေးကို တခကျြတခကျြစီစုပျလိုကျလုပျတယျဗြ။ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ ကနြျောအသားတှေ တဆတျဆတျတောငျတုနျတယျဗြ။ “အားးလားးလားသီရီရယျ..အူးးး..အငျးးးးး” “သီရိလကေနြေျာ့ဂှေးဥကိုယကျပွီး တှနျးတငျကာ ဖငျကိုယကျတယျဗြာ။ ကနြျောပွီးခငျြသလိုတောငျ ဖွဈလာတယျ။ သုတျတှအေရမျးတိုးသလို ခံစားလိုကျရတယျ။ လီးကိုသုတျတိူးခကျြက တဒုတျဒုတျမွညျတယျဗြာ။ “အားးရပွီ သဲကိုကိုပွီးသှားလိမျ့မယျ.. ကိုကိုထပျလုပျခငျြသေးတာ” “ဟငျးးးးဟငျးးသိပွီလားသူမြားကိုနှိပျစကျသလို ပွနျခံရမယျဆိုတာလေ” “အေးပါကှာ… ကွောကျပါပွီ” သီရိအလိုကပြွောလိုကျတယျ။
သူမကနြေပျလို့ ပါမဈပိတျရငျ ငတျရမှာလကွေောကျရတယျ။ လငျမယားမှ မဖွဈသေးတာလေ။ “သီရီ..ခဈြလေးကုနျးပေးကှာ” “အငျးကုနျးပေးမယျလေ။ဘယျလိုကုနျးရမလဲ” “ကုတငျစှနျးကုနျးပေး၊ကိုကိုအောကျကနလေိုးမှာ” သီရိလျားကုတငျစှနျးကုနျးပေးတယျ။ သီရိကုနျးပေးတော့ ဖငျဝိုငျးလေး သီရိရဲ့အနောကျပိုငျးက အရမျးခဈြစရာကောငျးလှတယျ။ ကနြျောလညျး ကုတငျနားကပျပွီး သီရိအနအေထား နညျးနညျးပွငျလိုကျတယျ။ ပွီမှ ဖငျကွားလီးကို အပျေါတငျပွီး လေးငါးခါပှတျတိုကျလိုကျတယျ။ သီရိနညျးနညျးတုနျလှုပိသှားပွီး “ကိုကိုနှျော..သီရိဖငျမခံဘူးနှျော၊ တျောကွာဖငျပွဲသှားလို့ဒုက်ခရောကျရမယျ” “ကိုကိုမလုပျရကျပါဘူး သဲရယျ” ပါးစပျကသာပွောတာ စိတျထဲမှာတော့ လကျထပျပွီးလို့ကတော့ တှမေ့ယျလို့ ကွိမျးလိုကျတယျ။
ကနြေိာနှငျ့တှတေဲ့ ဆျောတိုငျးက ဖငျလိုးခံတာကွိုကျကွလို့ ဇျောမိုးလို့တောငျ မချေါတော့ ဖငျလိုးကောငျခဈြစနိုးနဲ့ ချေါကွတာလေ။ ကနြျောစိတျထဲ ကွိမျးဝါးရငျး သီရိအဖုတျထဲ လီးခေါငျးမွှုပျအောငျ ထိုးသှငျးလိုကျတယျ။ သီရိတခကျြကလေးတုနျသှားတယျ။ ဖွေးဖွေးလေးပဲ တရဈခငျြးသှငျးတယျ။ လီးကဗဈြ.. ဗဈြနှငျ့တရဈခငျြးတိုးဝငျသှားတယျ။ “အာ့ကိုကို.အောငျ့တယျ.ဖွေးဖွေးးကှာ’” “အေးပါသဲလေး” သိတယျလေ ဒီပုံစံကစစလိုးရငျး အောငျ့တကျတာ သဘာဝပဲ။ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ ကနြျောက သီရိကွောကျမသှားအောငျ ဖွေးဖွေးလေးလိုးရငျး စအိုဝကလေးကို လကျသညျးနှငျ့ မထိတထိလေး ခွဈပေးရငျး သီရိတဈယောကျ တဏှာစိတျတှထေလာအောငျ ထပျပွီးနိုဆှလိုကျတယျ။ ဖငျကို မထိတထိလေးလကျသညျးနှငျ့ ခွဈပေးလိုကျတဲ့အခါ သီရိစိတျတှထေနျလာပွီး အျောညညျးလာတယျ။ “အာ့. အငျးးဟငျးးးဟငျးးးကိုကို” ကနြျောတဖွေးဖွေးနှငျ့ သီရီခံနိုငျမှနျးသိလာတော့ အရှိနျလေးထပျတငျလိုကျတယျလီးကဇှိ ဗြိ ဗဈြဗဈြနှငျ့ ထိုးဝငျလိုကျထှကျလာလိုကျပေါ့။
“အငျးးဟငျးးးး ကိုကို ကွမျးကွမျေးဆောငျ့ကှာ” သိတယျလအေဲလိုဖွဈလာအောငျ တမငျလုပျထားတာ။ စအိုဝကိုလကျသညျးနှငျ့ ခွဈလေ အားမလိုအားမရ စိတျတှဖွေဈလေ ဖွဈအောငျလုပျထားတာ သီရီကကွမျးကွမျးလေး လိုးခိုငျးတော့၊ စအိုဝကိုခွဈနတေဲ့လကျကို နရောပွောငျးပွီး သီရိခါးကဉျြကဉျြလေးကိုကိုငျပွီး ဝုနျးလိုကျတယျ။ ကုတငျဘောငျတောငျ တကြှီကြှီမွညျတယျဗြာ။ လိုးခကျြက တဖနျးဖနျးမွညျနသေလို လီးဝသျခကျြကလညျး ဘှတျဘှတျမွညျလာတယျ။ “အားးးးကောငျးတယျ..ကိုကို” “ဇှိ..ဗြိ..ဗဈြ..ဗဈြ…..ဗှကျ..ဘှတျ..ဖနျးးဖနျးးးးဖနျးး” “အားကိုကို…အိုး..အားးရှီးးးရှီးးး” နှာမှုတျသံနှငျ့အတူ သီရိတဈယောကျပွီးတော့မယျ။ ကနြျောလညျး အဆကျမပွတျတှနျးလိုးရငျး သီရိခါးကို တငျးတငျးဆှဲကိုငျပွီးလိုးတယျ။ ဆောငျ့ခကျြတှပွေငျးလှနျးလို့ သီရီတငျပါးတောငျ ဖွူဖှေးတာကနေ ပနျးရောငျကပွေးလာတယျ။ တဖွေးဖွေးနှငျ့နီလာတယျ။
ကနြျောလညျး မိနဈနှဈဆယျကြျောလိုးလိုကျတယျ။ သီရိက အားမရှိတော့ဘူး သူကပွီးသှားလို့ ဒူးခှနေပွေီ။ ငါးမိနဈလောကျအဆကျမပွတျလိုးရငျး လီးကို အဆုံးထိကပျကာ သုတျတှပေနျးထညျ့လိုငျတယျ။ သုတျတှကေုနျအောငျ ပနျးထညျ့လိုကျပွီးတော့ သီရိခါးကိုလှတျခလြိုကျတယျ။ သီရိက ကနြျောလှတျလိုကျတော့ ကုတငျပျေါ မှောကျလကျြကသြှားတယျ။ ကနြျောလညျး သီရိဘေးနားကပျပွီး “ခဈြလေး..အိုကရေဲ့လား” “အားကိုမရှိတော့ဘူးကိုကိုရယျ” ဖြော့တော့တော့လသေံနှငျ့ပွောလတေော့ ကနြျောရယျခငျြသှားတယျ။ “ကဲသဲခဏနားအုံး ကိုကိုစားစရာသောကျစရာတှေ ပွငျလိုကျဦးမယျ” “အငျးပါကိုကို” ကနြျောစားစရာသောကျစရာတှပွေငျပွီးတော့ အိပျခနျးဘကျလှညျ့ကွညျ့လိုကျတယျ။ ကိုယျတုံးလုံးနှငျ့ သီရိကတော့ အိပျပြျောနဆေဲပါပဲဗြာ။ အေးကှနျးဖှငျ့ထားတဲ့ အခနျးမှာ သီရိအအေးမိနမှောစိုးတော့ စောငျလေးခွုံပေးတော့ သီရိလနျ့နိုးသှားတယျ။
“ဟငျ..ကိုကို” ဆိုပွီး ကနြေျာ့ကိုလှမျးဖကျတဲ့အတှကျ ကနြျောပွနျဖကျလိုကျကာ နဖူးလေးကို အနမျးတပှငျ့ခွှလေိုကျပွီး “ဟော ခဈြလေးနိုးသှားပွီလား” “အငျးကိုကို ” “ထလေ သီရိ..စားလို့ရပွီ” “အငျး..ကိုကိုထူမှထမှာ” ကနြျောထပျပွီးအနမျးလေးပေးရငျး သီရိကို အိပျရာပျေါထူမတျပေးလိုကျတော့ “ကိုကိုသီရိအဝတျအစားတှပေေးကှာ” သီရိကခေါငျးက ဆံပငျကိုသပျခရြငျးပွောတော့ “နအေုံးစီရိရဲ့ကိုကို အကြီင်္နှငျ့ပုဆိုးခဏ ဝတျထားပါလား” “အငျးးကောငျးသားပဲကိုကို” ကနြျော ပုဆိုးနှငျ့ရှပျတဈထညျပေးလိုကျတယျ။ သီရိလညျး ယူဝတျလိုကျတယျ။ ကနြေျာ့အဝတျအစားလေးနှငျ့လညျး သီရိက ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့ရှိတယျဗြာ။ “လာလေ ခဈြ ထမငျးသှားစားမယျ” “နပေါဦး ကိုကိုသီရိရခြေိုးခနျးဝငျလိုကျမယျ” သီရိရခြေိုးခနျးကထှကျလာတော့ မကျြနှာသဈလာတယျ။ ကနြျောသဘကျတဈထညျ လှမျးပေးရငျး “ရော့လေ ခဈြ မကျြနှာသုတျလိုကျတော့” “အငျးပါကိုကို” ဆိုပွီးသီရိသဘကျကိုလှမျးယူရငျး မကျြနှာနှငျ့လကျတှကေို သုတျလုကျတယျ။
ပွီးမှကနြေျာ့ကို “ရော့ကိုကိုသိမျးလိုကျတော့” ကနြျောလှမျးယူရငျး သီရိကိုလကျဆှဲကာ ထမငျးစားခနျးသို့ ချေါယူလိုကျတယျ။ ထထမငျးစားပွီးတော့ “အခုမှပဲနသောတော့တယျ ကိုကိုရယျ” ဗိုကျပွညျ့သှားတော့ အားအငျတှပွေနျပွညျ့လာသလို ခံစားရတယျ။ အခြိုပှဲလေးစားပွီး “ခဈြလာကှာ အိပျခနျးထဲသှားရအောငျ” “အငျးခဏတော့အနားယူကွမယျ” “အှနျးးးးးးချေါပွနျပွီကှာကွောကျလာပွီ” “မကွောကျပါနှငျ့ သဲကလညျး ကိုကျမစားပါဘူး၊ ခဈြရုံလေးပဲ” “အေးဒါကိုကွောကျတာ လူလညျးထူပူနပွေီ” “ဟားးးးးးးးဟားးးးး” သီရိကိုအိပျခနျးထဲချေါလာပွီးအိပျရာပျေါလှအိပျရငျး “သီရိရယျ အိမျမပွနျနှငျ့တော့ကှာ” “အာ ဘယျဖွဈမလဲ မာမီဆူလိမျ့မယျ” “”သီရိ..ကိုကိုတို့လကျထပျရအောငျလေ” “သီရိငယျသေးတယျကိုကို ကြောငျလညျး ပွီးသေးဘူး.. နောကျပွီးသီရိက လုပျခငျြတာတှေ အမြားကွီးရှိသေးတယျ”
“အငျးပါကှာ သီရိရယျ.. ကိုကိုက အတူတူနခေငျြလှပွီ” “ဟငျ..အခုလညျး အတူတူနတောပဲမဟုတျလား” “ခဈြကလညျးကှာ အခုလိုနရေတာအားမရဘူးလေ” “အားရအောငျနလေေ ကိုကို” “အငျးတကယျနျော ” “အငျးးဒီနတေ့ော့ ကိုကိုနခေငျြသလောကျသာနေ၊ ကိုကိုအကွိုကျသီရိနပေေးမယျသိလား” “အဲလိုအလိုကျသိလို့ပိုခဈြရတာ” “အှနျးးးးးကိုကိုနဲ့ခဈြတာ မလှယျဘူး၊ နောကျထပျမရဘူးသိလား” “ဟာကွာ.သဲကလဲ” ကနြျောနောကျထပျအစပွုနိုငျအောငျ သီရိကို နမျးလိုကျတယျ။
“တျောတော့ ကိုကိုသီရိနှုတျခမျးတှထေူပူနပွေီ၊ လညျပငျးမှာလညျး အကှကျတှထေနတေယျ၊ နောကျပွီး သီရိနို့တှလေညျး ကြိမျးနပွေီ၊ ကိုကို.ကိုလုပျပေးမယျ” သီရိအဝတျအစားတှခြှေတျလိုကျပွီး. ကနြေျာ့လီးကို စုပျတယျ။ တဖွေးဖွေးနှငျ့သီရိလီးစုပျတာ ကြှမျးကငျြလာတယျ။ လီးကိုတပွှတျပွှတျနှငျ့ စုပျပေးနတေယျ။ ကနြျောလညျး လီးက အရမျးတောငျလာပွနျတယျ။ တဏှာစိတျက ပွငျးပွလာလို့ သီရိပိပိကိုမှုတျခငျြလာတော့ “သဲ ကို့မကျြနှာအပျေါခှလိုကျပါလား” “အာ မလုပျရဲဘူး” “လုပျပါကှာ ကိုအရမျးဆန်ဒတှပွေငျးလာလို့ပါ” “ကနျ့တော့ကိုကိုသီရိတကျပေးမယျ” သီရိကကနြေျာ့အပျေါကားယားခှကာ မကျြနှာပျေါတကျထိုငျတယျ။ ကနြျောလညျး သီရိဖငျကို လကျနှဈဘကျနှငျ့မကာ အဖုတျကိုပါးစပျနှငျ့ နရောကအြောငျ လုပျလိုကျပွီး ယကျလိုကျတယျ။ ကားယားခှထားရတော့ သီရိပိပိဟာ နညျးနညျးဟနတော။ သီရိဆီကထှကျတဲ့ အရညျတှပေါးစပျထဲ ဝငျလာတယျဗြ။
မွိုလညျးခထြပျယကျပေါ့။ “ပလပျ..ပလပျ…ပလပျ” “အာ့..အငျးးဟငျးးဟငျးးးးးး” သိရီဆီကညညျးသံတှထှေကျလာတယျ။ လြှာနှငျ့အားရပါးရ ယကျလေ မေးကသီရိဖငျ့နှငျ့ အဖုတျကွားထိလေ၊ အရညျတှလေညျး တစကျစကျကလြေ။ ကနြျောလညျးမွိုခလြေ။ သီရိကို ရှနေ့ညျးနညျးရောကျအောငျပို့ရငျး သီရိဖငျကိုပါ ယကျလိုကျတယျ။ စအိုဝလေးက စူတူတူလေးဖွဈနတောလေ။ “အားးးကိုကို အရမျးကောငျးတယျကိုကိုရယျ” သီရိဆီကညညျးသံတှထှေကျလာလေ။ ကနြျောကွမျးကွမျးယကျလပေါပဲ။ သီရိအသံတှေ ဆူညံနတောလေ။ နောကျဆုံးသီရီအစကေို့ အောကျကနပွေီး ကလျောပွီးလြှာနှငျ့ထိုးတော့ “အားးဟားးးဟားးးးအရမျးကြိမျးနပွေီ ကိုကိုတျောပါတော့ သီရိမနတေတျတော့ဘူးကှာ.. အငျးးဟငျးးးးအားးး” သီရိရပျခိုငျးတော့ ကနြျောလညျးရပျလိုကျတယျ။ “သဲ..ကိုကိုအပျေါကတကျပွီးလုပျကှာ” “အငျး..လုပျကွညျ့မယျကိုကို” သီရိအောကျကိုရှသှေ့ားပွီး ကနြေျာ့အပျေါက ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျကာ လီးကိုကိုငျပွီး ပိပိနှငျ့တကေ့ာထိုငျခလြိုကျတယျ။ “ဗဈြ..ဗဈြ..ဗဈြ” “အာ့…” ဆိုပွီးတခကျြကွှလိုကျကာ သီရိထကျထိုငျခတြယျ။
သီရိမကျြနှာလှမျးကွညျ့တော့ မကျြလုံးစုံမှိတျပွီး အောကျနှုတျခမျးကို ကိုကျပွီးဇိမျယူနတော။ ပွီးတော့မှ သီရိကွမျွမျလေးလုပျတယျ။ လုပျရငျးညောငျးနရေငျ ကွိတျပွီး ရှတေို့းနောကျဆုတျ လုပျတယျ။ သီရိအပျေါက ဆောငျ့ခခြကျြကွောငျ့ လီးကအဖုတျထဲတဗြိ.. ဗွိတဘှတျဘှတျတဖနျးဖနျးမွညျလာတယျ။ “အငျးးဟငျးးးဟငျးးး..အားးး” ငါးမိနဈလောကျလုပျလိုကျတာ သီရီမောဟိုကျနတေဲ့ အသံကွားတှကွေားလာရတယျ။ “အားးဟငျးး အာတျောပွီကိုကိုသီရိညောငျးနပွေီ” “အဲဒါဆိုလညျး သီရိကကိုကို့ခွထေောကျဘကျ မကျြနှာမူပွီလုပျကွညျ့ပါလား” သီရိလညျး အနထေားမှနျအောငျလုပျလိုကျပွီး လီးကိုပိပိထဲထညျ့လိုကျတယျ။ လူကတော့ ခွရေငျးဘကျလကျထောကျပွီး ထိုငျလိုကျ ထလိုကျလုပျပေးတယျ။ ကနြျောက သူ့တငျသားတှကေို တှနျးတငျလိုကျအောကျသို့ ခလြိုကျနှငျ့ သီရိမညောငျးရအောငျ အားကူပေးလိုကျရငျး လိုးရတယျ။
သီရိဆီက ညညျးသံတှထှေကျလာတယျ။ ညညျးသံတှထှေငျလာသလို သီရိဆောငျ့ခကျြက ပိုသှကျလာတယျ။ “အာ့…ရှီးးးရှီးးးအာ့အငျ့ဟငျးးးးးးူး” “ဇှိ..ဘှတျ..ဖတျ..ဖတျ..ဖတျ” “အားးးးကိုကိုသီရိမရတော့ဘူးးးးအားးး” “သီရိ ဆငျးလိုကျကိုကိုလုပျမယျ” သီရိလညျးကနြေျာ့အပျေါကဆငျးလိုကျပွီး အိပျရာပျေါ ပကျလကျကလေးအိပျတော့ ကနြျောသီရိခါးအောကျ ခေါငျးအုံးခုလိုကျကာ ဖငျကိုအပျေါဆှဲထောငျပွီး အပျေါစီးကနေ လိုးလိုကျတယျ။ လိုးခကျြကပွငျးလှနျးလို့ လီးဝငျခကျြကတဗြိဗြိ တဇှိ ဇှိ နှငျ့မွညျသလို ဆီးခုံခငျြးရိုကျသံတဖနျးဖနျးထှကျနတေယျ။ “ဖနျးးးဖနျးးးးဖနျးးး” “အားးးးအမလေးးအားးးကောငျးတယျ.အားးး” ကနြျောလညျး အားရပါးရလိုးထညျ့လိုကျတယျ။ အပြိုစဈကို ဒီလိုလိုးရတာ အရမျးလညျးဖီးရှိတယျ။ လိုးရငျ အားနှငျ့လိုးနိုငျပွီးကွာကွာလိုးလေ မိနျးကလေးက စှဲလနျးလဆေိုတော့ နောကျအကွိမျရအောငျလို့ အစှမျးကုနျလိုးနတောပါ။
သီရိကလညျး ကွမျးကွမျးလိုးလကွေိုကျလေ။ အျောညညျးလပေါပဲ။ “ဖနျးးးဖနျးးးဖနျးးးး” “အားးး..အငျ့….ဟငျ့..အားးးး” “သဲကောငျးလားး” “ကောငျးတယျကိုကို ကွမျးကွမျးလေးလိုးပေး” ကွမျးလကွေိုကျလအောဂသတ်တိပိုငျရှငျသီရိ ၊ ကွမျးကွမျးလိုးတတျတဲ့ ကနြျောနဲ့ကက့ကျတိ၊ အမွဲလိုးရရငျကောငျးမှာ။ မွနျမွနျလပျထပျပွီး အမွဲဒီလိုနပေဈခငျြတာလေ။ “ကို ကို အားးးးကောငျးတယျကိုကို ” ဆီးခုံခငျြးပှတျတိုကျလို့အမှေးတှေ တဗဈြဗဈြမွညျနသေလို သီရီလညျး အရညျတှထှေကျလာတယျ။ အမွုပျတှလေို ဖွူဖွူအနှဈတှဖွေဈနတေယျ။ တဘှတျ.. ဘှတျမွညျလပေဲ သီရိကခေါငျးအုံးကို လကျနောကျပွနျလှမျးကိုငျရငျး “အားးးအငျးးးးးးဟငျးးးးးးးအားကောငျးတယျ” “ဘှတျ ဖတျ ဖနျးးဘှတျ ဘှတျ..ဘှတျ ” အပြိုအဖုတျမို့လို့သာလသေံမထှကျတယျ။ တကယျဆိုဘှိ ဘှတျဆိုတဲ့ လသေံထှကျလောကျအောငျ မွနျမွနျလေးလိုးလိုကျတယျ။
ဆီးခုံနှဈခလုံး အရညျတှစေိုခြှဲနတော။ သီရီအဖုတျထဲကထှကျတဲ့ အရညျတှဖေငျကွားထဲအထိ စီးဆငျးသှားနတေယျ။ လိုးခြိနျနာရီဝကျနီးပါးလောကျ အားရပါးရလိုးလိုကျတဲ့အခါ ကနြျောလညျး သုတျတှထှေကျသှားတယျ။ သုတျထှကျသှားတာတောငျ အခကျြငါးဆယျလောကျ မနားတမျးဆကျလိုးလိုကျတယျ။ သီရိလညျး ပြော့ခှသှေားပွီး မကျြနှာကလေးကို ခြောငျကသြှားတော့တယျ။ အဲဒီဧန့က လိုးတာလေးခြီမွောကျ လိုးပဈလိုကျတယျ။ သီရိခငျမြာ လမျးတောငျ ဖွောငျ့အောငျ မနညျးလမျးလြောကျနရေတယျ။
အဲကှနျးတတျထားတဲ့ အခနျးမှာ အဝတျဗလာနဲ့ အခြိနျအတျောကွာကွာနခေဲ့ရတဲ့ သီရိတဈယောကျ နှာတှမှေနျလာတယျ။ ရခြေိုးသနျ့ရှငျးရေးလုပျပွီး ခြိနျမှာ မကျြလုံးလေးတှနေီရဲသလို နှာပါခလြောတော့ “သဲ..မပွနျနဲ့တော့ကှာ” “မပွနျလို့မှမရတာ ကိုကိုရယျ” “သဲပုံကပွနျလို့ရပါ့မလား” “ရတယျကိုကိုမာမီဆူလိမျ့မယျ” “အငျး.ပါကိုကိုလိုကျပို့ပေးမယျလေ” “အငျးပါကိုကို” ကနြျောကားကိုမောငျးပွီးသီရီက အိပျပြျောလာတယျ။ သံလြှငျဘကျရောကျပွီး သီရိအိမျအထိ လိုကျပို့လိုကျတယျ။ သီရိလညျး ကားပျေါက ဆငျးလမျးလြောကျတာ လူမသိအောငျ ဟနျလုပျပွီး ကွိုးစားလြောကျနရေတယျပုံပါပဲ။ ကနြျောအိမျပွနျပွီးရောကျကွောငျး သီရိဆီဖုနျးဆကျတော့ သီရိဖုနျးမကိုငျနိုငျတော့ဘူး။ သူ့မာမီပွောတာက သီရိနမေကောငျးလို့ အိပျနတေယျပဲဖွတေော့။
ကနြျောလဲ စိုးရိမျသှားတယျ။ နောကျတနထေ့ပျပွီး ဖုနျးဆကျတော့ “သီရိနကေောငျးလား” “မကောငျးဘူးကိုကို” “ကိုကိုလာခဲ့မယျလေ” “အာ..မလာနဲ့” “ဟာ..ဘာဖွဈလို့လဲသဲ” “ကိုကို့ကိုမွငျရငျရှကျလို့” “အမျ” “ဟုတျတယျလေ.ဆေးခနျးသှားပွီး ဆေးသှငျးလိုကျရတယျ” “ဟားးဟားးအဲလောကျတောငျပဲလား” “လူလညျးလမျးကိုမလြောကျနိုငျဘူး၊ တကိုယျလုံးကိုကျခဲနတော” “ဟားးဟားးးးးအဲလောကျတောငျဖွဈသှားရတယျလို့ကှာ” “ဟငျးမညှာမတာခလေးကို” “သူပဲကွမျးမှကွိုကျတယျဆိုပွီး” “သှားးမပွောနဲ့ရှကျတယျ ဖုနျးခလြိုကျတော့မယျ” ဆိုပွီးဖုနျးခသြှားတယျ။ အဲဒီနကေ့သာ သီရိမပွနျခဲ့ရငျ ကနြျောရှလေကျတှဲပြျောခဲ့ရမှာကို ကနြျောမသိလို့ အတငျးမတားခဲ့တာပါ။ သီရိကို ဘာလို့လှမျးနရေလဲ ဆိုတာကတော့ နောကျနသေီ့ရိဆီ ဖုနျးဆကျလိုကျပွီးတဈခေါကျတှတေ့ယျ။ “သဲနကေောငျးသှားပွီလား” “ဟုတျ..ကောငျးသှားပွီကိုကို” “ကိုကိုမသှေ့ားလို့သီရိ ကိုဆေးမဝယျပေးလိုကျရဘူး” “စိတျခရြတဲ့နမေို့သီရိမပွောတာပါ” “သီရိက အဲဒါကိုသိလို့လား”
“ကိုကိုကလဲဒီခေါတျမိနျးကလေးပဲမသိဘဲ နပေါ့မလား” “အငျး ကိုကိုခရီးထှကျရအုံးမယျ” “ဘယျလဲကိုကို” “နပွေညျတျောမှာလေ အလုပျတှပွေနျစမလို့” “ဟုတျ ကိုကို” “အဲဒါသီရိကိုလာပွောတာ” “သှားလကေိုကို” “သီရိနတေို့ငျးဖုနျးပွောမှာနျော၊ သီရိဘာတှလေုပျနလေဲဆိုတာ fbကနေ့ တိုငျးကွညျ့မှာ” အငျးပါကိုကို” “သီရိ လညျးကြောငျးတကျရမယျမလား” “အငျး ကိုကိုလိုကျပို့မယျလေ” “မပို့နဲ့ကိုကိုသီရိဆိုငျကယျနဲ့သှားမှာ” “အငျးးးးသီရိကိုကိုအရမျးခဈြတယျ” “အှနျးပါကိုကို” “သီရိကိုကိုကို့ခသျြတယျတယျပွောကှာ” “ခဈြပါတယျရှငျ့ခဈြပါတယျ” “အငျးးးးဟငျးးအာဘှားလေးပေးခငျြလိုကျတာ” “လူတှရှေိတယျကိုကို” “အေးပါကှာ.မနမျးပါဘူး ဟီးးဟီးး” “ခဈခဈ ခဈ” “ဒါဆိုသှားပွီနှျော” “အငျးးးး”” “ဘိုငျ့” ကနြျောအိမျပွနျလာပွီးခရီးထှကျဖို့ပွငျဆငျရတယျ။ ကနြျောနှငျ့သီရိအတူတူအိပျဖူးပွီးပွီမို့လို့ ကနြျောသီရိကို စိတျခလြကျခထြားခဲ့တယျ။ နောကျပွီး ကနြျောနှငျ့သီရိနီးစပျရဖို့ အရေး အလုပျတှေ အမြားကွီးလုပျပွီးငှရှောရမယျလေ။ အလုပျတှလေုပျပွီး ညဆိုသူနှသျ့စကားပွောပေါ့။
သီရိ fbပျေါမှာတငျတဲ့ ပို့ဈလေးတှကေို like လေးပေးပေါ့ဗြာ။ သီရိဟာ သူဖွဈတာက ဘလော့ကာ ဖွဈခငျြတာ။ အောငျမွငျတဲ့ စာရေးဆရာတဈယောကျ ဖွဈခငျြတာကို ကနြျောသိတယျ။ ဒါပမေယျ့ စာရေးတယျဆိုတာ မလှယျဘူးလေ။ အကောငျ့အသဈတှဖှေငျ့ပွီး online မှာ စာရေးဖို့ ကွိုးစားနခေဲ့တယျ။ ကနြျောက အကောငျ့သဈတော့ သိတယျ။ နောကျထပျ သူဘာလုပျတယျဆိုတာတော့ မသိဘူး။ သီရိပငျကိုယျစရိုကျက လှတျလပျပေါ့ပါးပွီး ပြျောပြျောနတေတျတာပဲ ကနြျောကသိခဲ့တယျ။ ကနြျောအရငျကသာ ရှုပျပှခေဲ့ပမေယျ့ သီရိနှငျ့အတူတူအိပျပွီးကတညျးက ဘယျသူနှငျ့မှ မပတျသကျတော့ဘူး မှနျသောသစ်စာပါ။ သီရိကို တကယျလညျးခဈြတယျ။ တဈလလောကျ နပွေညျတျောနေ.ပွီး ရနျကုနျပွနျလာ။
သီရိနှငျ့တှတေ့ယျ။ ဟိုတယျချေါမရတဲ့အတှကျ သီရိနှငျ့ကနြျောထပျပွီး မလုပျဖွဈပါဘူး၊ သူလညျး ခလေးတှစောပွရတာ တဖကျသငျတနျးတကျရတာ တဖကျနှငျ့ဆိုတော့ သူလညျး အလုပျမအားပါဘူး။ အိမျမှာလညျး ကနြေျာ့မိဘတှရှေိနတေဲ့အတှကျ အိမျကိုလညျး ချေါရတာအဆငျမပွဘေူးလေ။ အပွငျမှာ ခဏတဖွုတျတော့ တှရေ့တာပေါ့ဗြာ။ သီရိကွညျ့ရတာ fbအပျေါ အရမျးစှဲလနျးနတေယျလို့ ယူဆတယျ။ ဖုနျးနှငျ့မကျြနှာခှာတယျလို့ မထငျဘူး။ သူ့ဖုနျးကိုလညျး အမွဲသိမျးထားတယျ။
ကနြျောလညျး သူ့ကိုယျရေးကိုယျတာကို အရမျးစှပျဖကျတယျထငျမှာစိုးလို့ သိပျပွီးမပွောဘူးလေ။ ကနြျောနှငျ့ သီရိတှဲနတောကို ကနြျောအသိုငျးအဝိုငျးက သတိထားမိလာတယျ။ ခဈြကွိုကျတာနဲ့ ခြောသျးဆိုးတာ ကှယျဝှကျထားလို့မှ မရတာလေ။ တနတေ့ော့ ကနြျောဆီအကိုဝမျးကှဲဖွဈတဲ့ ကိုဇျောကို ရောကျလာတယျ။ သူကလညျး ကနြျောတို့အပျေါ အရမျးကောငျးပါတယျ။ “ဇျောမိုး” “ဟာကိုဇျော ဘယျကလှညျ့လာတာလဲ” “မငျးဆီတမငျလာတာကှ” “အော..ကိစ်စအထူးအထှရှေိလို့လား” “ရှိတယျ..ဇျောမိုးရေ” “ပွော အကို” “အငျးပွောရမှာအားနာတယျကှာ” “ဗြာ ဘာဖွဈလို့လညျး” “မငျးမဟူရာကိုသိလား” “အငျး..သိတယျ” “ငါနှငျ့fbမှာသူငယျခငျြးကှ” “အျောဟုတျလား” “အဲဒါနှငျ့ကနြျောနှငျ့ဘာဆိုငျလို့လဲ” “ဆိုငျတယျကှ..ငါသူနှငျ့ရငျးနီးတာကွာပေါ့ အပွငျမှာလညျး တှဖေူ့းတယျ” “အငျးးး” “မငျးးfakeအကောငျ့ဆိုတာ သိလား” “ကွားဖူးတယျ၊” “မသျးကိုငါပွမယျ ငါ့အကောငျ့ကိုကွညျ့” ကနြျောလညျး သူ့ဖုနျးကိုယူကွညျ့တယျ။ “အဲမှာတှလေ့ား သီရိဆိုတဲ့အကောငျ့” “အငျးတှတေ့ယျ၊ အပွာစာအုပျတှေ ရှယျထားတာ”
“အေးအဲဒါဘယျသူမှတျလဲ” “ဘယျသိမလဲဗြာ” “အဲဒါ မငျးကောငျမလေးလေ” “ဘာဗြ..ကိုဇျော၊ ခငျမြားသီရိအပျေါ စျောကားလှနျးတယျ” “ဟကေ့ောငျ ငါမငျးအကိုပါကှ၊ မငျးနဈနာအောငျ ငါမလုပျဘူး” “ကိုဇျောမသခြောပဲနှငျ့ မပွောနှငျ့ဗြ” “ငါပွောရမလားမပွောရမလား စဉျးစားနတောကွာပွီ၊ မငျးကယူတော့မယျဆိုလို့” “အဲဒါတော့ မဆိုငျဘူးထငျတယျ” “မငျးစဉျးစားပေါ့ကှာ.. ကိုယျမယျ့မိနျးမက အဲလိုအပွာစာအုပျတှနှေငျ့ ပြျောနတေယျဆိုတာ၊ ယူပွီးမှ သီရိဟာအဲလိုမှနျးသိရငျ မငျးအဖအေမတေော့ သှားပွီ နောကျပွီး မငျးအဖရောထူးကလညျး ကွီးတယျ၊ မငျးအမကေလညျး အရှကျကွီးတယျ.. နှလုံးရောဂါလညျး ရှိတယျ.. မငျးသခြောစဉျးစားပေါ့ကှာ.. မငျးငါ့အကောငျ့ ခဏယူထား သူနဲ့ငါနှငျ့ friလုပျထားတယျ.. မငျးကွညျ့လိုကျပေါ့” သူ့အကောငျ့ရောပတျဈဝါ့ပါပေးခဲ့တယျ။
ကနြောသီရိအကောငျ့ကို မှကွေညျ့တယျ။ မနျ့ထားကွတာတှေ မကွညျ့ဝံ့စရာ။ reply ပွနျထားတဲ့ သီရိမနျ့တှကေလညျး ကွောကျလနျ့စရာ။ မစားရညှေျာခံ၊ ပါးစပျအရသာခံတဲ့ လူတှအေမြားကွီး။ ကနြေျာ့ရငျထဲ အရမျးခံစားရတယျ။ ကနြေျာ့ခဈြသူက ပွနျပွောနတောတှေ မနျ့တှကေ ရငျကှဲလုမတတျ ခံစားရတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သီရိသူ့ဖုနျးကို အကိုငျမခံတာဆိုတာ ကနြျောသိလိုကျပွီ။ ကနြျောသသေခြောခြာသိဖို့ လိုလာပွီ။ ကနြျောစုံစမျးမယျ။ ကနြျောသီရိကို ဘုရာသှားရအောငျ ဖုနျးဆကျတယျ။ သူ့သငျတနျးလေးမစခငျမှာ သှားရအောငျပေါ့။ “ဟလို..သဲ” “ကိုကိုရောကျပွီလား” “ရောကျပွီသဲ၊ ရောကျတုနျးလေး ဘုရားသှားရအောငျလေ” “မနကျဖွနျစောစောသှားရအောငျ”
“အိုကေ ကိုကိုမနကျခွောကျနာရီလာခဲ့မယျ” ကနြျောမနကျခွောကျနာရီဘုရားသှားဖို့ ခြိနျးလိုကျတယျ၊၊ မနကျစောစောဘုရားမသှားခငျ နံနကျစာ ဝငျစားလိုကျကွသေးတယျ၊ ပွီးမှ ဘုရားပျေါတကျ ဘုရားဖူးပွီးနောကျ အောကျဆငျးရငျး “ကိုကို သီရိtoiletသှားခငျြတယျ.. သငျတနျးကလညျး ကွာမှာမို့” “သှားလေ သဲကိုကိုအပွငျကစောငျ့ပါ့မယျ” “အှနျးခဏစောငျ့နှျော” “အေးပါသဲ” သီရိက အိမျသာထဲဝငျမယျအလုပျမှာ “သဲဘာလို့အိတျယူသှားမှာလဲ၊ ထားခဲ့လိုကျလေ” “ဟုတျ မသှေ့ားလို့ပါ” သီရိ အိမျသာထဲဝငျတုနျး အိတျဖှငျ့ရငျး ဖုနျးကို ဖှငျ့လိုကျတယျ။ ပတျဝါ့က သူ့မှေးနထေ့ညျ့ထားတာ ကနြျောသိတယျလေ။ ကနြျောသူ့ fb ကိုဖှငျ့ပွီး official ကို log out လုပျလိုကျတော့ ဖိတျ့အကောငျ့ကို သှားတှတေ့ယျ။ remove လုပျမထားဘူး၊ ဒါပမေယျ့ဖိတျ အကောငျ့ကို ဖှငျ့မရဘူး။ ကနြျောဖှငျ့ကွညျ့နတေုနျး သီရိရောကျလာတယျ။ “ဟာ ကိုကို..ဘာလို့သူမြားဖုနျးဖှငျ့ကွညျ့နတောလဲ”
“သီရိ ဒီဟာက မငျးအကောငျ့တှလေား” “ဟုတျတယျလေ၊ ကိုကိုစညျးမရှိဘူး” “ဘာကှ.သီရိ မငျးဘယျလိုမိနျးခလေးလဲ” “ဘာဖွဈလို့လဲကိုကို ” “မငျးက မိနျးကလေးဖွဈပွီး fake အကောငျ့သုံးရတယျလို့” “ခုခတျေဘာဆနျးလို့လဲ ကိုကို၊ လူခငျြးသိကွတာမှ မဟုတျပဲ” “ဆနျးတယျ သီရိ မငျးကသာ လူခငျြးမသိဘူးပွောတာ သိတဲ့လူက လာပွောတယျကှ မငျးသိလား” “သိလညျး ဂရုစိုကျစရာမလိုပါဘူး” “ဟာ သီရိရယျ ကိုယျယူမယျ့မိနျးကလေးက အဲလိုမြိုးမဖွဈခငျြဘူး” “မဖွဈခငျြရငျ လမျးခှဲလိုကျ ကိုကို” “ဘာကှ..အဲလိုမပွောနဲ့သီရိ မငျးကို ငါအရမျးခဈြတာ၊ မငျးနောကျ ဒီအလုပျမြိုးမလုပျပါနှငျ့ကှာ”
“ကိုကိုသူမြားလှတျလပျခှငျ့ကို မထိခိုကျနဲ့” “ဘာ သီရိ မငျးဘယျလိုပွောလိုကျတာလဲကှာ” “မငျးအကငျြ့ကိုမပွငျနိုငျဘူးလား” “မပွငျနိုငျဘူး” “ဟာကှာ မငျးတျောတျောခေါငျးမာပါလားကှာ” “မာတယျကိုကိုမာတယျ.၊ ကဲဘာမှမပွောနဲ့ သီရိသငျတနျးသှားတော့မယျ” “ကိုကိုလိုကျပို့မယျ” “မလိုကျပို့နဲ့.လိုကျလာရငျ အျောလိုကျမှာ” ပွောရငျး သီရိကတကျစီတဈစီးငှားပွီး ကားပျေါတကျသှားတော့ ကနြျောစိတျညဈပွီး ကနျြခဲ့ရတယျ။ အရမျးစိတျညဈသှားတယျဗြာ။
ခွမေကိုငျမလကျမကိုငျမိ မြောကျသဈကိုငျး လှတျသလိုပါဘဲ။ နောကျဆုံးတော့ ကနြော့အသိဖွဈတဲ့ မမခရမျးပွာကို ကနြျောဖုံးဆကျလိုကျတယျ။ မိနျးကလေးခငျြးဆိုတော့ အဖွလေေးသိရအောငျပါ။ “မောငျးလေးပွော” “ကနြေျာ့နှငျ့သီရိကိစ်စလေးပါမမ” “မမသိတယျ မောငျလေး အိမျထောငျပွုတာ အခဈြတဈခုနဲ့မလုံလောကျတာ သီရိနားမလညျတာပါ၊ အသှငျတူမှ အိမျသူဖွဈနိုငျတယျလေ၊ အိမျထောငျပွုပွီးမှ မောငျလေးတို့အကွောသျးလူသိရငျ မောငျလေးမိဘတှေ အရှကျကှဲမယျ၊ မောငျလေးရှဆေ့ကျမတိုးစခေငျြဘူး၊” “ကနြျောသီရိကိုအရမျးခဈြတယျ မမရယျ” “သိပါတယျမောငျလေးရယျ၊ မမပွောတာလဲ စဉျးစားပေါ့” “ဟုတျကဲ့ပါမမ” ငနြျောအရမးစိတျညဈသှားတယျ။ အရမျးစိတျညဈတော့ ဘာမှအလုပျလုပျလို့ မရတော့ဘူး၊ ကားကို ဟိုဒီလြောကျမောငျးပွီး အရကျဆိုငျဘကျ ခွလှေမျးဦးတညျလိုကျတယျ။ တခှကျပွီးတခှကျ သောကျနရေငျး ဖုနျးကဝငျလာတယျ။
ကွညျ့လိုကျတော့ အိမျက မကိုငျဘဲ ထားလိုကျတယျ။ သုံးလေးကွိမျချေါသေးတယျ။ ညဆယျနာရီလောကျ ဖွဈလာတယျ။ လူလညျး တျောတျောမူးနပွေီ။ ဖုနျးထပျဝငျလာတယျ။ ကွညျ့လိုကျတော့ ကိုဇျော.. “ဟလို ညီလေးဇျောမိုး” “အငျးအကိုပွော” “မငျးဘယျမှလဲ..” “အရကျဆိုငျမှာ.” “ငါလာခဲ့မယျ” “မလာနဲ့” “မဖွဈဘူး..အဘချေါခိုငျးလိုကျတာ” “ဟာဗြာ” “အခုဘယျအရကျဆိုငျမှာလဲ” ကနြျောဆိုငျနာမညျပွောလိုကျတော့ နာရီဝကျလောကျကွာပွီး ကိုဇျောရောကျလာတယျ။ အရကျဖိုးရှငျးပွီး ကားပျေါအတငျးတငျပွီး အိမျကိုမောငျးတယျ။ အိမျရောကျတော့ ခွလှေမျးမမှနျတော့တဲ့ ကနြေျာ့ကို ကိုဇျောပဲအိပျရာပျေါတငျခဲ့တာပဲဗြာ။ မနကျမိုးလငျးတော့ ခေါငျးတှေ မတရားကိုကျခဲနတေယျ။ ရလေညျး ငတျတာကွောငျ့ ထမငျးစားခနျးးဘကျသှားပွီး ရသေောကျမလို့ သှားတယျဗြ။ ဟိုရောကျတော့ “ဟကေ့ောငျဇျောမိုး” ‘”ဗြာ ဖဖေေ” “ငါအာလုံးသိပွီးပွီကှ ”
“ဗြာ” “မငျးနဲ့သီရိကိစ်စလေ” “ဟုတျ ငါလုံးဝသဘောမတူဘူး” “ဟာ ဖဖေေ” အေး ငါပွောမယျ. ငါလညျးမဟုတျတာ မလုပျခဲ့ဘူး၊ မငျးယူမဲ့ငါ့ခြှေးမဟာ ခွောကျပွဈကငျး သဲလဲစငျဖွဈရမယျ” “ကနြျောသူ့ကိုခဈြတယျဖဖေေ၊ သီရိကိုယူမှာ” “ဘာကှ ဟကေ့ောငျ” “ဒီမှာသားး မငျးသီရိကိုယူခငျြရငျ ငါသပွေီးမှယူ” “ဗြာမမေေ” “ငါနှငျ့နငျ့အဖတေို့ကို အရှကျရအောငျမလုပျနဲ့၊ ပွောထားလကျြတဲ့ ကွားက သားကသီရိကိုယူရငျ မမေအေဆိပျသောကျသပေဈမှာ နားလညျလား” “ရကျစကျလိုကျတာဗြာ” “လောကမှာ ယူစရာမိနျးမတှပေေါလို့ကှာ၊ ငါပေးစားမယျ” “မယူဘူးဗြာ.. သီရိကလှဲရငျ ဘယျသူ့မှမယူဘူး” “အေးနငျသီရိကိုယူရငျ ငါလညျးတဈခါတညျး အဆိပျသောကျပွီးသားပဲ” “အေး..မငျးဘယျမှမသှားပဲ အိမျမှာပဲနကွေားလား” ကနြျောသီရိဆီဖုနျးဆကျတယျ။ သီရိမကိုငျဘူး၊ အကွိမျကွိမျဆကျတယျ၊ သီရိဖုနျးပါပိတျတယျ။ ကနြျောဆောကျတညျရာမရဘူးဗြာ။
တခြိနျလုံး ဖုနျးချေါနတေယျ။ ညရောကျမှ သီရိဆီကိုချေါလို့ရတယျ။ “သဲ…သီရိ” “ဒီမှာကိုကို နောကျသီရိဆီဖုနျးလုံးဝမဆကျနဲ့၊ မိဘတှသေဘောမတူတဲ့ ရှငျနဲ့ဘယျတော့မှမယူဘူး” “သီရိရယျ ကိုကိုအရမျးခဈြတယျ၊ သီရိကို လကျထပျလို့ရတဲ့နအေ့ထိ ကိုကိုသစ်စာရှိရှိ ခဈြနပေါ့မယျ” “တျောပါပွီကိုကိုရယျ သီရိကိုမလေို့ကျတော့၊ လာလညျးမလာနဲ့တော့၊ သီရိလညျး ကိုကို့ကို မနေို့ငျအောငျကွိုးစားမယျ” ကနြျောမကျြရညျတှစေီးကလြာသလို သီရိလညျး ငိုနလေိမျ့မယျ၊ သီရိဖုနျးခသြှားတယျ။ အခြိနျတှသောကွာလာတယျ။ ကနြျောသီရိကို မမနေို့ငျဘူး၊ သီရိရဲ့ အကောငျ့ အစဈ က ကနြော့ကို ဘလော့သှားတယျ။
သီရိက စိတျညဈပွီး အကောငျ့အစဈကို မသုံးတော့ပဲ ဖိတျ့ အကောငျ့မှာ ပြျောနတေယျလေ။အခုတော့ ကနြျောလညျး ဖိတျ အကောငျ့လေးသုံးရငျး စာတှရေေးလာတယျ။ အခုသီရိနှငျ့ fri ဖွဈနပွေီ။ ညီမလေးတဈယောကျလို သဘောထားတယျလို့ ပွောရငျး သူ့ကိုပွောကွဆိုကွနဲ့ သူမနျ့တာတှကေို ကွညျ့နမေိတယျ။ ရငျနာနာနဲ့ သူ့အကောငျ့လေး မီးစိမျးလာတာကိုကွညျ့ရငျး လှမျးနရေတာပေါ့ဗြာ။ ကနြျောသီရိကို အရမျးခဈြတယျ။ တနနေ့မှေ့ာ သူနှငျ့လကျထပျနိုငျမယျလို့လဲ မြှျောလငျ့တယျ။ ကနြျောခငျမြားကို အရမျးခဈြတယျ သီရိရယျ …… ပွီး။
“အော်………သူ့အကောင့်လေးမီးစိမ်းနေပါလား” ဖုန်းလေးကိုကိုင်ပြီးfbလေးကို ဖွင့်လိုက်တော့ သီရီအကောင့်လေး မီးလေးစိမ်းနေတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှလည်း နှုတ်မဆက်ရဲတဲ့ဘဝ။ သီရိရေ ကိုယ့်မှာသာ ကိုယ့်အပြစ်နှင့် ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ တို့နှစ်ယောက်ချစ်ခြင်းကို ကိုယ့်ရဲ့ဇီဇာကြောင်မှုကြောင့် တို့တွေဝေးခဲ့ကြရတာ မဟုတ်လားလေ။ အားလုံးကိုယ့်အပြစ်တွေပါကွာ” လို့ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့လေးတွေးရင်း အတိတ်ကို ဇော်မိုးတစ်ယောက် တမ်းတပြီးမဆုံနိုင်တဲ့ဘဝမို့ ဆွေးနေရတယ်လေ။ ‘”အော်သီရိရယ်” ကျနော်..ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကလိုလ် lecture therater တည်ဆောက်ရေးမှာ အန်ဂျင်နီယာကန်ထရိုက်တာ အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ကနေပြီး အလုပ်သွားရတာလေ။ ကားမောင်းပြီးပေါ့။ ဖောင်ဒေးရှင်းလေးစတင်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ပုံစံတွေက မတည်မငြိမ်၊ အခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး ဖြစ်နေတာကြောင့် မူလဒီဇိုင်းအတိုင်း လုပ်ထားရကနေ ပုံစံပြောင်းတဲ့အတွက် ပေါက်ကွဲနေတာအချိန် ကားကိုမြန်မြန်လေးမောင်းလာခဲ့တယ်။
သံလျှင်ဘက်ကမ်းရောက်တော့ လမ်းရှင်းပါတယ်ဆိုပြီး အရှိန်တင်လိုက်တယ်။ လူက ကိုယ့်အတွေးနှင့် ကိုယ်ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကရုမစိုက်အားဘူးဗျ။ လမ်းသွယ်လေးကနေ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး အတင်းထွက်လာတယ်။ ကားရှေ့အထိရောက်လာတာကြောင့် “ကျွီ..ဟီ..ဟီ..ကျွီ” ကားဘရိတ်ကိုအတင်းဖမ်းနင်းရင်း ဒေါသထောင်းကနဲ ထွက်သွားတယ်။ မတိုက်မိပေမယ့် ဆိုင်ကယ်ကလဲတယ်။ လဲသာလဲသာ သောက်ခလေးမက လက်ထဲက ရေခဲချောင်းကို မလွှတ်ဘူး။ သိတဲ့အတိုင်း အလုပ်ထဲမှာဆဲနေကျပုံစံအတိုင်း အယုတ်တအနတ္တတွေ ထွက်သွားတယ်။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဆိုင်ကယ်ကိုထူရင်း ကြည့်လိုက်ကာ “ဟေ့ကောင်မလေး..ဒါကာကား ဟဲ့ကားတိုက်ရင် သေတတ်တယ် နားလည်လား၊ နင်လင်မလိုချင်တော့ဘူးလား” “အံမာ တိုက်ချင်တိုက်ပလိုက်၊ လင်မလိုချင်တော့ဘူးလား ဘာလာနဲ့” ကျနော်လည်း အဲဒီအခါမှ သတိထားမိတယ်၊ ကောင်မလေးက မျက်ကြောတင်းလေး ဆေးဆိုးဆံပင်လေးနှင့်။ ရုပ်လေးက ချစ်စရာလေးပါ။
တော်တော်လေးလည်း လှတယ်။ သူ့အရပ်နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ အလှအပ အဖုအထစ်တွေက ရင်ခုန်စရကြီးပေါ့။ ရင်ထဲမှာ ရေခဲမြစ်လေးစီးဆင်းသွားတယ်။ သိပ်ချစ်သွားပြီခေးရယ်။ “အဲဒီလိုပါ လင်ယူမယ်ဆို ငါ့ကိုစဉ်းစားပေးပါလို့” “အမ်မသာကြီး..ရုပ်ကဖြင့် သင်းချိုင်းကို ခြေတလှမ်းနေပြီ ငါခဲနှင့်ကောက်ထုလိုက်ရ” ကောင်မလေးက ပါးစပ်ကလည်းပြောရင်း ခဲကောက်ကိုင်လို့ ကျနော်ကားပေါ်တက်ပြီး အတင်းမောင်းပြေးရတော့တယ်။ “ဟိုက် မလွယ်ကြောဇတ်ဇတ်ကြဲလေး” ကျနော်..အဲဇတ်ဇတ်ကြဲလေးကိုခိုက်သွားတယ်။ အင်း..အသက်ကလည်း ခြောက်နှစ်လောက်ကွာမယ့် သဘောရှိတယ်။ ဒီလိုအလန်းလေးက ငါလိုလူကို ဘယ်ကြိုက်မလဲကွာ.. ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့အချစ်ကို ရဖို့ငါ့သိက္ခာတွေမာနတွေကို ခဝါချရမှာပဲလေ။ ချစ်တော့လည်း လူငယ်စတို၈်ဖမ်းရမှာပေါ့။ နောက်နေ့ အဲဆော်ကို အဲဒီနေရာလေးမှာပဲ ကြိုစောင့်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ အဟဲနဖူးစာရွာလယ်ပြီ။ ရန်ကုနသားနှင့် သံလျှင်သူ၊ အဟီး..မိုက်တယ်။ အော်..ငါတော့ ရှင်မွေ့လွန်းနှင့်တော့ တွေ့ပြီ။ အင်း..အဆင်ပြေအောင်ပဲ လုပ်ရမယ်၊ ငါ့အသက်က မိန်းမယူရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီပဲ။ စိတ်ကူးနှင့်ရူးပေါ့ဗျာ သီရိတစ်ယောက်ပေါက်ကွဲနေတယ်။
မနက်က ရေခဲချောင်းလေးဝယ်ပြီး ဆိုင်ကယ်လက်တဖက်နှင့် ထိန်းစီးပြီး လမ်းသွယ်က လမ်းမကြီးပေါ်တက်တော့ အရှိန်နည်းနည်းလွန်ပြီး သူများလမ်းကြောပေါ် ရောက်သွားတာ။ ရန်ကုန်ဘက်ကလာတဲ့ ကားနှင့်တိုက်မိတော့မလို့။ လဲသွားတာ လူကို မထူပဲဆိုင်ကယ်ကိုထူတယ်။ ပြီးတော့ သောက်အားမနာလည်း ပြောသေးတယ်။ ဘာတဲ့ လင်မလိုချင်ဘူးလားတဲ့။ သူ့အပူကျနေတာပဲ။ ပြီးတော့လည်း ရိသဲ့သဲ့ရည်းစား စကားပြောသေးတယ်။ လူကဘဲ အိုဘဲနာကြီးဖြစ်နေပြီ။ ဒီကမှ ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတာ။ အားမနာလျှာမကျိုးပြောတယ်။ စိတ်တိုပြီးခဲနှင့်ထုမလို့။ “ခွေးသားကြီးတွေ့ရင်တော့.ဟင်းးးဟင်းး” ဒေါသစိတ်လေးလျော့လိုက်ပြီးမှ ပြန်တွေးကြည့်လိုက်တယ်။ အသက်သာကြီးတာပါ။ ရုပ်ကမဆိုးဘူးပဲ “အမယ်သူ့တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ရေမွေးနံတွေနှင့် မွေးနေတာပဲ။ ရေမွေးပုလင်းများ ဖိတ်ကျလာခဲ့သလားမသိဘူး” “အာ..ငါဘာတွေတွေးမိနေတာလဲ” ဆတ်ဆတ်ကြဲလေး သီရိရင်ထဲ အတွေးတချက် ခဏတာလေးဝင်သွားတော့။ သီရိတစ်ယောက် ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးမိသွားတယ်။ သီရိလည်း ကျောင်းဘက်တက်ဖို့အတွက် ဆိုင်ကယ်ကို ကျောင်းဘက်ဦးတည်ထွက်လိုက်တယ်။
ကျောင်းဘက်ရောက်ပြီး ကျနော်လည်း အလုပ်များနေတာကြောင့် ဘယ်မှမထွက်ပဲ အလုပ်အတွက် စီစဉ်ပေးနေရပေမယ့် ခုနတုန်းက လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ကောင်မလေးက အတွေးထဲမှာ စိုးမိုးနေတာကြောင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြုံးမိတယ်။ ဆယ်လီနာဂိုမက်လို လှတဲ့ကောင်မလေးရယ် မင်းဆီမှာလဲလေ။ နေ့လည်ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ ကင်တင်းဘက်ကို သွားလိုက်တယ်။ ဆိုင်ကလည်း ရင်နီးနေပြီ။ ဆိုင်ရှင်မချယ်ရီက အခါတိုင်းဆို ကျနော်ကနောက်ကျပြီးမှ လာလေ့ရှိတော့ အံဩနေတယ်။ ဆိုင်မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ များနေလို့ လက်မလယ်ဘူး။ ကျနော်လည်း ဆိုင်ထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ ဟားးးး ဟိုကောင်မလေး၊ ကြည့်စမ်း ဝေးဝေးရှာစရာမလိုဘူး ဒီကျောင်းကပဲ. နဖူးစာမှန်တော့တွေ့ရပြီပေါ့။ “ထမင်းပေါင်းတစ်ပွဲလာချ၊ ပြီးတော့ သံပုရည်တစ်ခွက်” အောသူမှာပြီငါခွင်ဖန်ပြီးအနားကပ်လိုက်ဦးမယ်။
“အကြော်ဆရာ ထမင်းပေါင်းမြန်မြန်လုပ်ကွာ” “ဆရာစားမလို့လား၊” “မဟုတ်ဘူး ဟိုဆော်လေးလေသူမှာတာ” “အော်မသီရိလား.” “မင်းသိလို့လား.သိတယ် ဂျစ်တူးမ” “ဟေ..သီရိတဲ့လား” “သီရိရတနာတဲ့ ဆရာ” “အေးးးရပြီလား၊ထမင်ပေါင်း” “ရပြီဆရာ” “ပေး..ငါ့ကိုပေး” “ဆရာပို့ပေးမလို့လား” “အင်းးးးး” ကျနော်လည်း ထမင်းပေါင်းပန်းကန်ယူကာ သီရိအနားကိုသွားပြီး “ရပါပြီ.ထမင်းပေါင်း” သီရိမော့ကြည့်တော့ ရင်တောင်ခုန်သွားတယ်။ “ဟာ. ဘဲရီးစားပွဲထိုးလား” “ဟုတ်ကဲ့” သီရီသဘောကျသွားတယ် လက်စားချေခွင့်ရပြီ။ “အော.ရေနွေးပေးဦး” “ရမယ်.” ကျနော်ရေနွေးအိုးချပေးလိုက်တယ်။ “တစ်ရှူးဘူးပေးအုံး” “ရမယ်” တစ်ရှူးဘူးချပေးလိုက်တယ်။ “ဟင်..ဇွန်းတွေကမသန့်ဘူး” “ပေးပါ.ကျနော်ရေနွေးစိမ်ပေးမယ်” ရေနွေးစိမ်ပေးပြီးဇွန်းခက်ရင်း ဆေးပေးလိုက်တယ်။
စားပွဲခုံက ညစ်ပတ်နေတယ်။ သုတ်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့အနားမထိတထိလေးကပ်ပြီး သုတ်ပေးလိုက်တာ။ “ဟေ့လူ..ဘာလို့အနားကပ်တာတုန်း” “အဲသေသေချာချာကြည့်ချင်လို့ပါ” “ဘာရှင့်..” “အော် မောင်လေးဇော်မိုး.. အားနာလိုက်တာကွယ်၊ သီရိညီမလေး သံပုရာရည်သောက်ဦးမလား” ကျနော်လည်း မချယ်ရီအနားရောက်ာလို့ ဆက်စကားမပြောပဲ ခွာလိုက်တယ်။ မချယ်ရီနှင့် သီရိတို့စကားပြောနေတယ်။ မချယ်ရီက ကျနော့်ဘက်လှည့်ကြည့်ပြီး အားတုံ့အားနာ ဖြစ်နေပုံပဲ။ သူကတော့ ပြုံးစိစိနှင့်… အင်းးသီရိရယ် မင်းငါ့ကိုပြုစားနိုင်တယ်ကွယ်။ ညနေသဲုးနာရီလောက်အလုပ်ကနေပြနခဲ့တယ်။ ဘုရားကုန်းကျော်ပြီး ကျိုက်ခေါက်အလွန်မှာ သီရိကိုဆိုင်ကယ်တွန်းရင်း လမ်းမှာတွေ့တယ်။
“ဟေ့…သီရီ” “ဟင်..ဘဲရီး” “ဟာတစ်ခါတည်းဘဲ အဖြစ်ခေါ်လိုက်တာလား” “ဘာရှင့်.နာချင်ပြန်ပြီ” “အာကူညီမလို့ပါကွာ” “မလိုဘူး..ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပဲ၊ ရှင်တို့ယောက်ျားလေးတွေက နည်းနည်းကူညီမယ်၊ ခင်ချင်တယ်ပြောမယ်၊ ပြီးရည်းစားစကားပြောမယ်မ သိတာကျလို့” “အောသီရိကကြိုသိပြီးပြီပဲ.. အဖြေပေးဖို့ စဉ်းစားတော့” “ဘာရှင့်..” “ပေးပါ.ဆိုင်ကယ်၊ ရော့ကားသော့ကားပေါ်နေခဲ့ ဆိုင်ကယ်သွားပြင်လာခဲ့မယ်” ကျနော်ကားသော့အတင်းပေးပြီး ဆိုင်ကယ်ကို တွန်းလာခဲ့တယ်။ ဆယ့်ရှစ်ကုန်းမှာ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်မရှိတော့ အောင်ချမ်းသာအထိ တွန်းလာခဲ့တယ်။ မောမှန်းတောင်မသိဘူး၊ အချစ်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါက်ဖွားနေလို့ပေါဗျာ။ ကားသော့လေးပေးပြီး ဆိုင်ကယ်တွန်းကာ ထွက်သွားသော ကိုဇော်မိုးကို သီရိသနားသွားမိတယ်။ စိတ်ထဲလည်း ကြည်နူးမိတယ်။ သူ့အပေါ် တကယ်ဂရုစိုက်သော လူတစ်ယောက်၊ ချစ်သောသူတစ်ယောက်ကို တွေ့ရတဲ့အတွက်လည်း ဖြစ်တယ်။ သီရိစိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး သူတပါးကို ကူညီတတ်သော ဘဲရီးကိုလေးစားသွားတယ်။
ဘဲရီးကတော့ သီရိအပေါ် တရားဝင်ချစ်ခွင့်ပန်လာမှာကိုလည်း တွေးမိတယ်။ အဲလိုဆိုရသ်လည်း ကိုယ့်အပေါ် ဘ်းလောက်သည်းခံနိုင်မလဲ စမ်းသတ်ဖို့ စဉ်းစားမိပြီး မိမိအဖြစ်ကို ရယ်ချင်နေမိတော့တယ်။ ကျနော်လည်း ဘီးဖာပြီးဆိုင်ကယ်စီးကာ သီရိဆီလာလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သီရိကိုသော့လှမ်းပေးရင်း “သီရိရော့သော့..ကလေးတွေစာသင်ရဦးမယ်မလား” “ဟင်ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ” “သီရိဆယ်တန်းကလေးတွေကို Guide လုပ်နေတယ်မလား သွားတော့ ဆိုင်ကယ်တွန်းထားတာ ချွေးတွေနဲ့.. ရေလေးဘာလေးချိုးပြီးမှ သွား၊ မဟုတ်ရင် ကလေးတွေမူးလဲသွားမယ်” “ဘာာာာာာာာာာ” “ရုပ်ကလေးကလှရက်သားနဲ့ လူကညစ်ပတ်လို့ပါ” “ဘာ…ဘာပြောတယ်” “ဟဲ..ဟဲအလုပ်တွေရှုပ်ပြီး ရေမချိုးဖြစ်ဘူးဆို”
“အမလေး စွပ်စွပ်စွဲစွဲ” “သွားတော့လေ သီရိမနက်မှ ကိုစောင့်နေမယ်” သီရိလန့်တောင်လန့်လာတယ်၊ ဒီလူကြီးက သီရိအကြောင်းသိနေလို့လေ၊ သီရိရယ်ချင်သွားတယ်၊ စိတ်ထဲမှာလည်း တွေဝေသွားတယ်၊ ဘဲရီးနှင့်တွေ့တော့ သီရိစိတ်ထဲ ဘဲရီးကစိုးမိုးပြီးနေတာလေ။ ညနေကလေးတွေနှင့် စာသင်နေရင်းပြုံးမိတယ်။ ညလည်း အိပ်မပျော်ဘူး မနက်ရောက်တော့ စောစောလေးထလိုက်တယ်။ ရေမိုးချိုးပြီး အလှပြင်ရာက ရယ်ချင်နေတယ်။ ဘဲရီးကိုလည်း တွေ့ချင်တယ်။ “လူဆိုးကြီး တဖြေးဖြေးနှင့်သီရိစိတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်တယ်ဟင်းး” အဲဒါနှင့်ဆိုင်ကယ်လေးထုတ်ပြီးစီးကာ လမ်းထိပ်ကိုထွက်တယ်၊ လမ်းထိပ်ဝဲယာကြည့်တော့ ဘဲရီးကားကိုတွေ့တယ်။ လမ်းထိပ်ဆိုတော့ သီရိရှက်သွားတယ်။ မတော်တဆ အိမ်ကလူတွေနှင့်တွေ့ရင် အရှက်ကွဲမှာမို့ ခေါင်းငုံပြီး ဆိုင်ကယ်အတင်းမောင်းထွက်ပြီး ကျောင်းကို လာခဲ့လိုင်တယ်။
စောစောရောက်တော့ ယောင်ချာချာနှင့်လေ၊ ကျနော်လည်း ကျနော့်ရှေ့က ဆိုင်ကယ်အတင်းမောင်းသွားတဲ သီရီနောက်က လိုက်ခဲ့တယ်။ သီရိနောက်ကကားရပ်ပြီး “သီရိ..တစ်ခုခုစားရအောင်” “ဟုတ်..ဟုတ်” ကျနော်ကင်တင်းဘက်ကိုလမ်းလျောက်ရင်းကနေ သီရိကိုကြည့်တော့ သီရီကခေါင်းငုံကာ စဉ်းစားနေတယ်။ “သီရိ..ကိုယ်မင်းကိုချစ်တယ်” “ရှင်…ဘဲရီး၊ အဲလိုပြောဖို့မစောလွန်းဘူးလား” “မစောဘူး..မင်းအနားမှာရှိတဲ့၊ ချစ်ရင်ထူး၊ မဟူရာနှင့် ဟိုဘဲလေးတွေရဲ့ခေါတော တစ်ထောင်နှင့်ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေက စိုးရိမ်စရာကောင်းလို့ပါ” “အမ်..သူတို့ကနှာဗူးအကြည့်နှင့်ကြည့်တယ်ပေါ့.. ဘဲရီးက ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ” “မြွေမြွေချင်းခြေမြင်တယ်လေ” “အဲဒါဆို ဘဲရီးလည်းနှာဗူးပေါ့” “မဟုတ်ပါဘူး ကျနော်က အချစ်စွမ်းရည်နှင့် ကြည့်တာပါ” “ဘဲရီးက လိပ်မျိုးပဲသိပ်သိတတ်တယ်” “သီရိကိုယ့်ကိုအဖြေပေးဦလေ” “ချက်ချင်းဘယ်ပေးမလဲစောင့်ပေါ့”
“အေးပါကွာစောင့်ပါ့မယ်” ဒီလိုနှင့်ကင်တင်းထဲရောက်တော့ စားစရာမှာလိုက်တယ်။ ကျနော်ကကော်ဖီ၊ သူကလက်ဘက်ရည်တဲ့။ ကျနော်လည်း အကြိုက်တူအောင် လက်ဖက်ရည်မှာရတယ်။ ပိုက်ဆံရှင်းတော့လည်း သူကအရှင်းမခံဘူး၊ သူ့စားတာသူသောက်တာ သူ့ဟာသူရှင်းသွားပြီး၊ ကျနော်ကို ထားကာကျောင်းထဲကိုသွားတယ်။ သူ့မာနကို လုံးဝအထိမခံတဲ့မိန်းကလေးပါဗျာ။ သီရိတစ်ယောက်ရင်ထဲမှာတွေဝေခဲ့ရပြီ။ ရည်မှန်းချက်တွေ တလှေကြီးနှင့် နေလာခဲ့တာ။ ကိုဇော်မိုးရဲ့အကြင်နာချစ်ခြင်းက သူအပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့ရပြီ။ ဘယ်သူခံနိုင်မလဲလေ ကိုယ့်လောက်ဂျစ်ကျနေသူတစ်ယောက် သိသိကြီးနှင့် ဆိုးတဲ့သူအပေါ် သည်းခံစိတ်တွေမွေးပြီး ကိုယ့်ပေးမဲ့ မေတ္တာတရားကို စောင့်မျော်နေသူအပေါ်မှာ နှလုံးသားက ချစ်ခွင့်ပေးလိုက်မိပြီ။ ကိုဇော်မိုးအပေါ်မှာ ချစ်မိပေမယ့် ကိုယ်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ရည်မှန်းချက်တွေအပေါ် ထိပါးလာမှာလည်း စိုးတယ်။
လောကဓံတရားကို အံတုပြီးရွဲ့တတ်တဲ့ သီရိရဲ့အပြုအမူတွေကို ကိုဇော်မိုးနားလည်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ နောင်တပတ်တွေမှာလည်း ဇော်မိုးဟာ သီရိနှင့်အမြဲတွေ့တယ်။ သီရိဆိုးနွဲ့တာ ခံရင်းနှင့်ပဲ “သီရိ ကိုသီရိလေးကိုချစ်တယ်ကွာ.. သီရိသဘောထားလေးသိပါရစေတော့” “သီရိကန့်ကွက်စရာမရှိဘူး ကိုကို” “ကိုယ့်ကို ကိုကိုလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နှော် သီရိ’” “အာ မသိဘူး” “ထပ်ခေါ်ကွာသီရိရာ” “ခေါ်ချင်ပါဘူး” “ခေါ်ပါသီရိရာ” “ဘဲရီး” “ဟာကွာ..ရွတ်” ကျနော်နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ အားမလိုအားမရဖြစ်လာလို့။ “အာ ကိုကိုနှော်” “ဟေးးးးးပျော်တယ်ဟေ့..ဟားးးဟားးးးဟားးးး” “ဟာ ကိုကိုဘာတွေဖြစ်နေလဲ” “ဝမ်းသာလွန်းလို့ပါကွာ” “ခစ်..ခစ်..ခစ်” “ကိုကိုတို့ဘုရားသွားရအောင်” “ဒီမှာကိုကို ဒါမျိုးကရိုးနေပြီ၊ ပထမဘုရားသွားမယ်၊ ဒုတိယပန်းခြံသွားမယ်၊ ပြီးရင် ဟိုတယ်ကိုခေါ်အုံးမှာ မဟုတ်ဘူးမလား” “ဟာသီရိကလည်းကွာ အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး” “ဘာမဟုတ်ရမှာလည်းကိုကို၊
အဲဒါယောက်ျားလေးတွေ လုပ်နေတဲ့ သီအိုရီပဲလေ” “အင်းသီရိမှတ်ထားနှော်. ကိုကိုက သီရိကို ဘယ်တော့မှဟိုတယ်မခေါ်ဘူး” “တကယ်လား ကိုကို” “အင်းးး” “သီရိက ဟိုတယ်ပဲသွားချင်တာ” “နိုး မခေါ်ဘူး” “ကိုကိုပိုက်ဆံမရှိလို့ မဟုတ်လား” “ဘာ..မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင် တစ်လလောက်ဟိုတယ်မှာ ဟန်းနီးမွန်းလုပ်ပစ်မှာ.. သီရိကိုမနားစေရဘူး” “သွားညစ်ပတ်” “ဟားးးးးဟားးမကြောက်ပါနှင့်သီရိရယ်” “ဘာလဲပဲမြစ်မို့လား” “အမ်..ပဲမြစ်..ဟားးးးဟားးးးး” “တော်ပြီ…..ဘဲရီး” “သီရိကိုကိုချစ်တယ်ပြောလေ” “ချစ်တယ်ချစ်တယ်” “ချစ်တယ်သီရိရယ်” ကျနော်လည်း သီရိကိုဖက်ပြီး သီရိရဲ့နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို နမ်းလိုက်တယ်။ သီရိလည်း ကျနော့်အနမ်းတွေကို ပြန်တုန့်ပြန်ပြီးနမ်းတယ်ဗျ။ အချစ်ကိုတွေ့ရတော့ ရင်ခုန်သံချင်းပါနီးစပ်ခဲ့ပြီလေ။ တစ်ယောက်နှင့်နှင့်တစ်ယောက် အမြဲပဲတွေ့ချင်တယ်။ တွေ့ရင်လည်း သီရိက ဘာပစ္စည်းလက်ဆောင်ပေးပေး လက်မခံဘူးဗျ။ အစားအသောက်စားရင်တောင် တစ်ယောက်တလှည့် အကုန်ခံခိုင်းတယ်။ ကျနော်ဘယ်လိုမြိုကျမှာလည်းဗျာ။
သူ့မှာ ကလေးတွေကျူရှင်ပြရင်း ပိုက်ဆံရှာတယ်။ ဘဝအတွက်ဆိုပြီး သင်တန်းတွေတက်တယိ။ ကျနော်သူ့ကို စိတ်မချတော့ဘူး၊ သူ့မှာလည်း ယောကျားလေးသူငယ်ချင်းတွေက အများသား။ သိတဲ့အတိုင်းမစားရညှော်ခံ။ အနံ့ရှူနေတဲ့ချစ်ရင် ထူးနှင့်မဟူရာတို့ရှိတယ်။ ဖုန်းတွေပြောတယ်။ သူ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုပြီး ပိတ်ပင်လို့ကမရဘူး။ ကျနော်သီရိကို အပိုင်ချည်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ လုံးဝလက်မခံဘူး။ “ကိုကိုသီရိကိုချစ်ရင် အဲလိုမလုပ်နဲ့တဲ့ဗျာ” ကျနော်အကြံအစည်တွေထုတ်နေတာပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုနှင့် ချစ်သူသက်တမ်းသုံးလပြည့်တဲ့အခါ ကျနော်အလုပ်တွေလည်း ပြီးပြီမို့လို့ ကျနော်သီရိတို့ကျောင်းကို မသွားဖြစ်တော့ဘူး။
သင်တန်းတက်ချိန် မနက်ပိုင်းတော့ တွေ့ခွင့်ရတယ်။ နှစ်ယောက်သား ခဏတော့ စကားပြောဖြစ်တယ်လေ။ နီးနေတဲ့အချိန် သိပ်မသိသာပေမယ့် ကျနော်တစ်လလောက် ခရီးထွက်ရတဲ့အခါ အရမ်းလွမ်းလာတယ်။ သီရိလည်း ကျနော်လိုပဲလွမ်းနေတယ်လေ။ ပြန်ရောက်ရင် ဖုန်းဆက်ပြောထားလို့ ကျနော်သီရိဆီကိုဖုန်းဆက်တယ်။ “ခလေးလေးကိုကိုပြန်ရောက်ပြီ” “မနက်သီရိဆီလာလေ’” “လာချင်တယ်ကွာ.ကိုကိုအရမ်းလွမ်းနေပြီ” “သီရိလဲအရမ်းလွမ်းနေတယ်ကိုကို၊ သီရိဆီလာခဲ့ပါကွာ” “ကိုကိုနေမကောင်းဘူး သီရိရယ်” “ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကို၊ သီရိလာခဲ့မယ်လေ” ကျနော်ဝမ်းသာသွားတယ်။ အိမ်မှာ ကျနော်တစ်ယောက်တည်းလေ။ သီရိလာရင် ကျနော်..ချစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အကြံအစည်တွေ လုပ်လိုက်တယ်။ ပဲမြစ်မဟုတ်ကြောင်း သီရိသိသွားစေရမယ်လေ။
“ကလင်..ကလင်” “သီရိ..လာပြီပဲ” “အင်းကိုကို” “လွမ်းတယ်သီရိရယ်” ကျနော်သီရိကိုဖက်ပြီးနမ်းလိုက်တယ်။ “အာ….ကိုကိုအိမ်မှာလူမရှိဘူးလား” “ရှိဘူးလေ” “ဟော့တော့. ဘာလို့လိမ်ခေါ်တာလဲ နေမကောင်းဘူးဆိုပြီး” “သီရိကလည်းကွာ ကိုအရမ်းလွမ်းနေလို့” “သီရိလည်းလွမ်းတယ်ကိုကို.ဒါပေမယ့်………” “သီရိရယ် ကိုကိုသီရိကိုအရမ်းချစ်တာလေ” “သီရိသိပါတယ်ကိုကိုရယ်၊သီရိလေ အပျိုစင်ဘဝကို ဒီလိုကြီး…” ကျနော်သီရိနှုတ်ခမ်းကိုလက်ညှိုးလေးနှင့် ပိတ်လိုက်တယ်။ “သီရိရယ်ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး ချစ်သူဘဝမှာ ဒီလိုပဲချစ်ကြတာပဲလေ၊ ကိုကိုသီရိကို လက်ထပ်ယူမှာပါ.. ကိုကိုသီရိအပေါ်မှာ တသက်လုံး သစ္စာရှိရှိ ပေါင်းသင်းမှာပါသီရိရယ်” “ဒါဆိုလည်းဂတိပဲနော်” “အေးပါသီရိရာ” “နောက်ကျမှ သီရိကိုပစ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း သီရိက ဂရုမစိုက်ဘူး” “ကိုကိုပိုင်ဆိုင်ချင်လွန်းလို့ပါ သီရိရယ်” “အင်းပါ ကိုကို” “ချစ်တယ်သီရိရယ်” ကျနော်လည်း သီရိခါးကိုကျစ်နေအောင်ဖက်ရင်း သီရိမျက်နှာအနှံ့ အနမ်းမိုးတွေရွာချလိုက်တယ်။
တအိမ်ထဲ နှစ်ယောက်တည်းသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ အသိက ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကို စိတ်အရမ်းလှူပ်ရှားစေတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦးလည်းဖြစ်တော့ လူမရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တော့ သီရိရောကျနောရော ကာမစိတ်ကို ထိမ်းချုပ်လို့ မရတော့ဘူးလေ။ ကျနော်သီရီနှုတ်ခမ်းသားလေးကို နမ်းလိုက်တယ်။ သိရီလည်း ရမက်ခိုးတွေဝေလာပြီလေ။ မျက်တောင်လေးစင်ပြီး ကျနော်အကြင်နာတွေကို မျော်လင့်နေပြီလေ။ ကျနော်သီရိကို အနမ်းလေးပေးရင်း သီရိအကျီလေးကို အပေါ်မချွတ်လိုက်တယ်။ သီရိရဲ့စနေနှစ်ခိုင်ပေါ့ဗျာ လှလိုက်တာ။ နေရောင်မထိဘဲ ဖွင့်ထွားချက်ဖြူဖွေးနေတာပဲ၊ ရင်သားတွေက ဘရာအပေါ်မှာ ထွက်လုဆဲဆဲပေါ့။ ကျနော်လည်း ဘရာချိတ်ကိုဖြုတ်ပြီးသီရိနို့တွေကို ကြည့်မိတယ်။ စိတ်တွေထန်နေတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေစူပြီး ချွန်ထွက်နေတယ်၊၊ ပန်းရောင်သမ်းတဲ့ နို့သီးခေါင်းနှင့် ဝန်းရံထားတဲ့ နိုးဝန်းလေးတွေက ချစ်စရာအလွန်ကောင်းနေလို့ ကျနော်လည်း ရေငတ်နေသူပမာ တပြွတ်ပြွတ် အငမ်းမရစို့လိုက်တယ်။
“ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်” “အားးးကိုကို..အားးးးဖြေးဖြေးစို့ပါကိရယ်” “ကိုအားရပါးရစို့ပါရစေ သီရိရယ်” “အင်းပါ ကိုကိုရယ်.. သီရိက ကိုကိုပြုသမျှ ခံရတော့မှာပဲလေ” “အဲလိုသဘောမထားနဲ့လေချစ်ရာ၊ ချစ်ကြပြီဆိုမှတော့ စိတ်တူကိုယ်တူချစ်ချင်တာ” “အင်းပါ ကိုကို ကိုကိုစိတ်တိုင်းကျသာချစ်ပါ၊ သရီခံပါ့မယ်” “သီရိကလည်းကွာ သီရိအကြိုက်လေးပြောပေါ့” “ဟင့် သီရိမှမလုပ်ဖူးသေးတာ ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ” “အင်းလေ သီရိ၊ လုံချည်ပါချွတ်လိုက်တော့မယ်” “ကိုကို့သဘောပါကိုကို” သီရိရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုတော့ ကျနော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ လုံချည်ကို ချွတ်လိုက်တယ်။ လုံချည်လေးကျွတ်ပြန်တော့ ပင်တီလေးပေါ်လာပြန်တယ်။ အနက်ရောင် ပင်တီလေးကို ချွတ်လိုက်တယ်။ သီရိကလည်း ကုတင်ပေါ်ထိုင်ပြီး အချွတ်ခံတာလေ။ သီရိက ကုတင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့တွက် ပိပိကို ထင်ထင်ရှားရှား မတွေ့ရပေမယ့် ဆီးခုံမှာမမွေးလေးတွေ ပေါက်နေတာကြောင့် ကျနော်စိတ်က အရမ်းကိုဖီလ်းဖြစ်တယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရင် ကျနော်သီရိကို အရမ်းလွမ်းတယ်။ သီရိကလည်း ကျနော်ကို အရမ်းလွမ်းနေတာလေ။ ကျနော့်ရဲ့တဏှာစိတ်က ငယ်ထိပ်အထိရောက်နေတယ် ပြောရမလားပဲ။ သီရိနို့ကိုစို့ပြီးပြီဆိုတော့ ကျနော်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်က သီရိပိပိလေးကို အရမ်းယက်ပေးချင်တာပေါ့။ သီရိကို ကိုကုတင်ပေါ်လှဲလိုက်တယ်။ မို့ဖောင်းနေတဲ့ ပိပိကအရမ်းကိုလှတယ်ဗျာ။ ကျနော်မနေနိုင်တော့ဘူး။ သီရိဘယ်လိုခံစားနေလဲ ကျနော်မသိချင်ဘူး။ ရတဲ့အခွင့်အရေးကို ကျနော်လက်လွတ်မခံတော့ဘူးလေ။ ကျနော်ကုတင်အောက်ကနေကာ သီရိပေါင်လေးကို ကားကာအပေါ်မြှောက်တင်လိုက်တယ်။ အရွတ်သေးသေးလေး ပိပိအကွဲကြောင်းက ကျနော့်ကိုယက်လှဲ့ပါ။ လို့ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါ။ သီရိပိပိအကွဲကြောင်းအောက်ခြေမှာတော့ ကျနော့်ချိုစို့ပေးမှုကြောင့် အရည်ကြည်ချောဆီလေးတွေ စိမ့်နေတယ်ဗျာ။
ကျနော်အတွက်တော့ အချစ်ရေ ချိုချိုလေးတွေပေါ့ဗျာ။ ချစ်သူရဲ့ပိပိက ထွက်တဲ့အရကြည်ချိုချိုလေးကိုယက်လိုက်တယ်။ “ပလပ်..ပလပ်” “အားး အင့်ဟင့် ကို..ကိုရေ..အားး” သီရိဆီက အချစ်အသံလေးထွက်ပေါ်လာတယ်။ ကျနော်လျှာကို အပြားလိုက်လုပ်ပြီး အားရပါးရ ယက်လိုက်တယ်။ “အာ့အင့်ဟင့်ဟင့် ကိုကိုရယ် ချစ်ရူးရလိမ့်မယ်” အဲဒီအသံလေးက ကျနော့်စိတ်ကို အရမ်းဖီးဖြစ်စေတယ်။ အရွတ်သေးသေး တွန့်တွန်းလေးကိုလည်း လျှာနှင့်အပြားလိုက် ယက်လိုက်တယ်။ “အင်းးဟင်းးးဟင်းးကိုကိုအရမ်းကောင်းးတယ်ကွာ” သီရီကအိပ်ရာခင်းကိုဆွဲဆုပ်ကိုင်ပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ ညည်းနေရှာတယ်။ သူ့အတွက်လည်း ဒါဟာ ပထမဆုံးအချစ်ခံရခြင်းလေ။ ပထဆုံးအထိအတွေ့ကို အရသာရှိနေအောင် ကျနော်စွမ်းဆောသ်ပေးနေတာလေ။ တချက်တချက်ယက်လိုက်တိုင်း သီရိဗိုက်သားလေးတွေ တင်းတင်းသွားတယ်ဗျာ။ လျှာကိုဖိပြီးမြုပ်သထက်မြုပ်အောင် ဖိသိပ်လိုက်တယ်။ အပျိုစစ်လေးဖြစ်လို့ အကွဲကြောင်းက ပေါင်ကားထားပေမယ့် စေ့နေတယ်လေ။
ကျနော်အားစိုက်ရတယ်လေ။ အကွဲကြောင်းတလျောက် အတင်းယက်ရင်း သီရိအစေ့ကလေးကို ထိအောင်ယက်လိုက်တယ်။ ပိပိကမို့ဖောင်းနေတာမို့ အစေ့ကအထဲမှာ ရောက်နေတာလေ။ အစေ့ကလေးကို လျှာနှင့်ကလော်ပြီးနိုးဆွပေးလိုက်တယ်။ ဖိသိပ်လိုက် ကလော်လိုက်မို့လို့ သီရိမှာ တဟင်းဟင်းအော်နေရပြီ။ သီရိပိပိကလည်း အရည်တွေရွဲရွဲစိုနေတာလေ။ အရည်တွေ လျှာနှင့်သိမ်းယက်ပြီးမြိုချလိုက်တယ်။ “အားးကိုကို..သီရိရင်ထဲမှာ ကတုန်ကရင်ကြီးကွာ” ကျနော်သီရိ အစေ့စုပ်လို့ရအောင် ပိပိနှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဘက်ဖြဲလိုက်ပြီး အစေ့ကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်တယ်။ “အာ့ရှီးးရှီးး အာ့ ကိုကို” သီရီတကိုယ်လုံးတုန်တက်လာတယ်ဧလ။ သီရိအော်ဟစ်ညည်းညူရင်း တွန့်လိမ်ကာပြီးသွားတယ်။ “အားးကိုကိုထွက်ကုန်ပြီထွက်ကုန်ပြီအားးးရှီးးရှီးးး” သီရိဆီကအရည်တွေလှမ့်ထွက်လာတယ်ဗျာ။
သီရီပြီးသွားတော့ ကျနော်လီးက အတွင်းခံဘောင်ဘီထဲမှာ အရမ်းရုန်းထွက်နေပြီ။ ကျနော်ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်တော့ ကျနော့်လီးက ချက်အထိကပ်နေပြီ။ “ဟယ်..အကြီးကြီးပါပဲလားကိုကို” “အင်း” “သီရိထင်မထားဘူးကိုကို.ကြောက်စရာကြီး” “မကြောက်ကာနှင့်သီရိရယ်.သူလည်းသီရိကို အရမ်းချစ်တာ နာအောင်မလုပ်ပါဘူး.. သီရိကော သူ့ကိုအကြင်နာမပေးချင်ဘူးလား” “အွန်း…သီရိကြောက်တယ်” “လုပ်ပါကွာ သူလည်းသီရိအကြငိနာကို တမ်းတနေပြီ” “ကြင်နာပေးချင်တာပေါ့ကိုကိုရယ် ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ဥစ္စာပဲလေ” သီရိလည်းပြောရင်း ကျနော့်လီးကို ကိုင်ဆွဲပြီးစုပ်လိုက်တယ်။ ကျနော်လီးဟာ လုံးပတ်တစ်လက်မ သုံးမတ်အချင်းရှိကာ အရှည်ခြောက်လက်မ စွန်းစွန်းကလေးရှိတယ်။ ဆယ်တန်းကတည်းက အရေပြားဖြတ် နောက်လှန်ချုပ်ထားပြီး ချုပ်ရိုးနေရာမှ ဖုထစ်တွေထနေတယ်။ “ကိုကို ဒါကြီးဘာကြီးလဲ ကိုကို” “နောက်လှန်ချုပ်ထားတဲ့အရာပါကွာ” “အမလေးကြက်သီးထလိုက်တာကွာ” သီရိကပြောလည်းပြောစုပ်လည်းစုပ်လိုက်တယ်။ သီရိက သူ့ပါးစပ်ထဲလီးဝင်ဆန့်အောင် အားထုတ်စုပ်လိုက်တယ်။ နူးညံ့တဲ့သီရိရဲ့ လျှာအစွမ်းကြောင့် ကျနော့်လီးက အစွမ်းကုန်တောင်လာတယ်။
အကြောကြီးပျိုင်းပျိုင်ထပြီး သံခေါင်းတစ်ချောင်းလို မာထန်လာတယ်။ သီရိခင်မျာ ကျနော့်လီးဒစ်ကြီးငုံစုပ်ရတာကြာတော့ ညောင်းလာတယ်။ အပြင်ကပဲ ရေခဲမုန့်စားသလို လျှာနှင့်လီးဒစ်ကို ယက်ပေးတယ်လေ။ စူကြားဖူးနာဝရှိသလိုပဲလုပ်ပေးရှာတယ်။ “သဲ အပေါက်ကလေးလျှာလေးနှင့်ထိုးပေး” “အင်းးအင်းးး” လီးကိုယက်ရင်းခေါင်းညိတ်ပြရှာတယ်။ ပြီးတော့ လီးအဝလေးကိုလျှာနှင့်ထိုးပေးရင်း “ဒီလိုလားကိုကို” “အင်းကောင်းလိုက်တာသီရိရယ်” “ကိုကိုကသာကောင်းနေသီရိမှာတော့ အာတွေညောင်းလှပြီ” “အင်းပါသီရီရယ်.. ကိုကိုလိုးပါရစေတော့” “ကိုကိုသေဘာပါ ကိုကို” “ကဲ ခုနတုန်းကအတိုင်းလေးနေ၊ ကိုကိုကုတင်အောက်ကနေပြီး လုပ်မယ်” သီရိလည်း ကုတင်အောက်ခြေဆင်းထိုင်ရင်း နောက်သို့လှချလိုက်တယ်။ ပုံစကတော့ ကျနော့်အကြိုက် ကုတင်ကန့်လန်ဖြတ်အိပ်တဲ့ပုံပါ။ ဒီလိုးနည်းက အရမ်းအားရစရာကောင်းတယ်။ သီရိခြေနှစ်ဘက်မိုးပေါ်ထောင်လိုက်တော့ သီရိအဖုတ်ရဲ့ နှုတ်ခမ်သးပြူးပြီး ထွက်လာတယ်။ ကျနော်လည်း လီးကိုလက်တဖက်နဲ့ကိုင်ပြီး လီးဒစ်မြုပ်ရုံ အကွဲကြောင်းတလျောက် ရှေ့တိူးနောက်ဆုတ် လုပ်လိုက်တော့။ “အာ့..အင်းးဟင်းးးကိုကို” သီရိရဲ့အသံလေးကတုန်တုန်ရီရီလေး ထွက်လာတယ်။
ကျနော်လည်း ပိပိအပေါက်ထဲလီးကို ဖိနှိပ်ပြီးသွင်းလိုက်တယ်။ လီးဒစ်ကဝင်သွားတာ သီရီရဲ့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေပါ လိပ်ဝင်သွားသလို မြင်ရတယ်ဗျာ။ြ”ပွတ်..ပလွတ်” ဆိုတဲ့အသံနှင့်အတူ “အားး ကိုကို.အားကျွတ်ကျွတ်” သီရိရဲ့အလန့်တကြားအော်သံနှင့်အတူ လက်ကတွန်းထုတ်တယ်။ လီးကသုံးလက်မခန့် သီရိအဖုတ်ထဲလီးက တင်းကြပ်စွာဝင်သွားတယ်။ “ဗျစ်..ဗျစ်အသံနှင့်အတူ “အားးလားးလားကိုကိုဖြေးလုပ်ပါ” “အင်း…..းပါသီရိရယ်” ကျနော်လည်း သီရိသက်သာအောင်နို့ကို ကုန်း၍စို့လိုက်တယ်။ နို့ကိုဘယ်ရောညာရော အပြန်အလှန်ဘက်ညီအောင့်စို့ရင်း လျှာဖျားလေးနှင့် ယက်လိုက်တယ်။ ကုန်းစို့ရင်းပင် သီရိပုခုံးအောက်လက်လျိုပြီး လက်ကို ပက်လက်ထားကာ ပုခုံးကိုဆွဲကိုသ်လိုက်တယ်။ သီရိကတော့ အဖုတ်မှာလီးဝင်ရင်း နို့စို့ခံရတဲ့အတွက် နာနေရာက သက်သာလာတယ်။
ကျနော်လည်းလီးကိုအဆုံးထိ မသွင်းပဲ ဒစ်ကြီးနှင့်အစေ့ကို ပွတ်ဆွဲပေးပြီး တဖြေးဖြေး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်လိုက်ရာ “အင့်..ဟင့်..ဟင့်…ရပြီကိုကို” ကျနော်နောက်ထပ်နှစ်လက်မခန့် ထပ်သွင်းလိုက်တယ်။ “ဗြိ..ဗြိ..ဖောက်” “အားးကိုကို…အားးနာလိုက်တာ ကိုကိုရယ်” ကျနော်လီးကအမှေးပါထိုးခွဲပစ်လိုက်တာလေ။ ဒစ်ကားကြီးဆိုတော့ အမှေးကွဲပြီပေါ့ဗျာ။ “ခဏလေးပါသီရီရယ်၊ အပျိုစစ်အမှေးပါး ပေါက်သွားလို့ပါ” “အင်း..သီရိသိတယ်ကိုကို အဲလိုနာမှာစိုးလို့ ကိုကိုကို သီရိမပေးခဲ့တာ” အခုကော ဘာလို့ပေးလဲဟင်” “ကိုကိုကို အရမ်းချစ်လို့” ကျနော်ထပ်ပြီးမသွင်းရဲသေးဘူး။ တင်းကျပ်လာတဲ့ အဖုတ်ညှစ်အားကို ကျနော်ခံစားရပြီ။ နောက်ဝင်လာမယ့်လီးအတွက် ကြောက်လန့်ပြီး ညှစ်လေသလား ကောင်းလွန်းလို့ ညှစ်လေသလားတော့ သိတော့ဘူး။ ခဏလေးရပ်ကာ နို့ကိုကုန်းစို့လိုက်တယ်။ ခဏတာဝေဒနာလေးခံစားပြီး နောက်မှာတော့ “ရပြီကိုကိုသီရိခံနိုင်ပြီ” သီရိခံနိုင်ပြီဆိုမှ ကျနော်ကျန်ရှိတဲ့လီးကို သွင်းလိုက်တယ်။ ကျနော်ဆီးခုံနှင့် သီရိဆီးခုံကပ်သွားတဲ့အထိ ဖိကပ်လိုက်တယ်။
ဂေါ်လီသီးလို ချုပ်ရိုးကဘုတွေက သီရိအဖုတ်နံရံတလျောက် ပွတ်ဆွဲလို့နေတယ်။ “အာ့..ကိုကိုရယ်…အာ့.၊သားအိမ်များထိလေသလားကိုကို အထဲကအောင့်သွားတယ်” “မထိပါဘူးသီရိရယ်.အစမို့ပါကွာ.. ကိုကိုဆက်လိုးတော့မယ်နော်” “အင်းလိုးလေကိုကို” ကျနော်လည်း လီးကိုတစ်လက္ခခန့်ချန်ပြီး အသွင်းအထုတ်မှန်မှန်နဲ့ အသားကျလေးကျင့်လိုးလိုက်တယ်။ “ဗျစ်..ဗျစ် ဗျစ်..ဘွတ်..ဖတ်..ဖတ်” “အာ့အင့်..ဟင်းးးဟင်းး” သီရိကတော့မျက်လုံးလေးစုံမှိတ်ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ကာ ညည်းတွားနေတယ်လေ။ “အာ့..ရှီးးရှီးမြန်မြန်လေးလုပ်ပေးပါ ကိုကို” ထိန်းပြီးလိုးနေတဲ့ကျနော်ဝမ်းသာသွားပြီး မြန်မ်ြန်လေးလိုးလိုက်တယ်။ ကျနော်ရဲ့ဆောင်ချက်မှာ သီရိအဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ လိပ်ဝင်သွားမတတ် ဖြစ်သလို ပြန်ထုတ်ချိန်မှာလည်း အုံလိုက်ကြွတက်လာသလို လီးဒစ်ကြီးက ဆွဲယူလာတယ်။
လီးဝင်ချက်တဗျိ.ဗျိ တဇွပ်ဇွပ်မြည်နေသလို ဆီးခုံချင်းထိသံက တဖန်းဖန်းမြည်နေပြီ။ သီရိရဲ့အော်ညည်းသံလည်း ပိုကျယ်လာတယ်။ “အားးရှီးးရှီးးကိုကိုရယ်..အာား” “သီရိကောင်းရဲ့လား” “အားအရမ်းကောင်းတယ်ကိုကို.. အား.. ရှီး… ကြမ်းကြမ်းလေးလုပ်ပါကိုကို. သီရိပြီးချင်နေပြီ” ကျနော်ချစ်သူလေးနာမှာစိုးလို့ ကြမ်းကြမ်းမလုပ်ခဲ့တာ။ ချစ်သူသာ တောင်းဆိုလို့ကတော့ ကုတင်ကျိုးပစေဆိုတဲ့ ကျနော်သီရိပုခုံးကိုဆွဲကိုင်ပြီး ကြမ်းလိုက်တယ်။ သီရိကလည်း ကျနော့်ခါးကိုဆွဲပြီး အောက်ကပင့်လာတယ်။ သီရိရဲ့ လက်သည်းချွန်တွေလည်း ကျနော့်အသားကို စူးနစ်ဝင်လာတယ်။ အဲလိုဖြစ်လေ စိတ်ကြွလေဖြစ်ပြီး တဘိုင်းဘိုင်း တဒိုင်းဒိုင်းမည်အောင် လိုးလိုက်တယ်။ “ဖန်းးဖန်းးဖန်း..ဗျိ.ဗြိ..ဘွတ်.ဖန်းးးဖန်း” အား..ကိုကိုသီရီပြီးပြီအားးး” သီရိကအကြောဆွဲသလို တချက်နှစ်ချက်ခန့်တွန့်ကာ ငြိမ်သွားပေမယ့် ကျနော်ကတော့ မပြီးသေးဘူး လိုးလို့ကောင်းဆဲ။ သီရိပြီးသွားတော့ အရည်တွေထွက်လာတာကြောင့် သီရိအဖုတ်က အမြှုပ်တွေပါထလာတယ်။ လိုးရတာလည်း အရမ်းကောင်းလာတယ်။
နောက်ထ်ငါးမိနစ်ခန့် ဆက်လိုးတော့ ကျနော်သုတ်တွေ သီရိအဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်ပေမယ့် ကျနော်လီးက နည်းနည်းမှ မညိုးသေးပါဘူး။ “အား ကိုကိုခဏလောက်နားပါအုံး ကိုကိုရပြ.ီ.. ရီအဖုတ်နာလှပြီ” ကျနော်အချစ်လေးသီရိကိုသနားလို့သာ ခဏရပ်ပေးလိုကတယ်။ လီကတော့ တောင်နေဆဲလေ။ ခဏတာရပ်ပေးလိုက်တော့ “အာ..ကိုကိုပြီးသွားပြီမဟုတ်ဘူးလား” ကျနော့ရဲ့တောင်နေဆဲလီးကိုကြည့်ပြီးသီရိကပြောလာတယ်။ “သီရိအမြင်ပဲလေ ကိုကိုမပြီးသေးဘူးကွာ” “အာ သီရိတော့ခဏနားချင်တယ်ကိုကို” “နား..လေ အချစ်..ဒါပေမယ့်ကိုကို မပြီးသေးဘူးနှော်” “အင်းပါ.သီရီသန့်ရှင်းရေးလုပ်ချင်တယ်” “လာလေကိုကိုလုပ်ပေးမယ်” ကျနော်ရေချိုးခန်းဘက်ကို သီရိလက်ကွဲဆွဲရင်း ခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ရေချိုခန်းထဲ water heater လေးကို ဖွင့်ပြီးရေနွေးလေးနှင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
“”အာ ကိုကိုကလည်းသီရိဘာသာလုပ်ပါ့မယ်” “ရဘူး ကိုကိုကလုပ်ပေးချင်တာလေ” “အင့်အင်း..ကွာ ရှက်တယ်၊သီရိဟာလုပ်ပေးနဲ့၊ ကိုကိုဟာအရင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်.လာခဲ့” သီရိကျနော့လီးကြီးကိုကိုင်ပြီး ရေနွေးစပ်ထားတဲ့ ရေဖြင့် ယုယုယယဆေးပေးတော့ ကျနော်လီးက ပိုပြီးမာလာပြန်တယ်။ “အာ ကိုကို မာလာပြန်ပြီ၊တော်တော်ဆိုးတယ်” “ဟင်းးဟင်းးးသီရိအဲလိုကိုင်ပေးတော့ အရမ်းထလာတာလေ” “မလွယ်ဘူးကွာ ဒီနေ့တော့အသက်တောင် အိမ်ပြန်ပါ့မလးမသိတော့ဘူး” “အများကြီးမလုက်ပါဘူးကွာ သူပျော့သွားရင် ရပ်လိုက်မယ်” “အင်းးးးပါ..ကိုကို့သဘော…ကိုကိုက လည်း စပြီးပဲလုပ်ပြီးပြီပဲလုပ်ပေါ့”” သီရိကဆပ်ပြာဘူးရည်လေးညစ်ရင်း ကျနော့်လီးကို သေချာတိုက်ချွတ်ပေးတာ ဖင်ကြားရော ဂွေးဥတွေပါ ပြောင်အောင်ဆေးလိုက်တယ်။ “ကဲရပြီကိုကိုအိပ်ခန်းထဲကပဲစောင့်တော့” ကျနော်လည်းသီရိကိုကုတင်ပေါ်က စောင့်နေလိုက်တယ်၊ ခဏနေတော့ သီရိရောက်လာပြီး ကုတင်ပေါ်လှမ်းတက်လိုက်ကာ လှဲနေတော့ ကျနော်က သီရိကိုလှမ်းဖက်ပြီး နမ်းလိုက်တယ်။
သီရိလည်းပြန်နမ်းပြီး ကျနော်နှင့် သီရိလျှာတိုက်ပွဲစနေတာပေါ့။ ကျနော်လက်ကတော့ ဝက်မြီးလိုပဲ လှုပ်ရှားနေလိုက်တယ်၊၊ လုပျိုသိုး ကျနော်အတွက်ကတော့ လိင်ဆက်ဆံရေးကို ကြုံဖူးနေတာကြာပါပြီ လိုးလည်းလိုးနိုင်တယ်၊ အကြာကြီးလည်းလုပ်နိုင်တယ်။ လိုးပြီးရင် စွဲစွဲလန်းလန်းကျန်တဲ့ သဘောတွေကြောင့် ဇယားကပ်မှာ စိုးလို့ ကျနော်ရှောင်လိုက် စားလိုက်ပေါ့။ အခုက သီရိကိုတကယ်လည်းချစ်မြတ်နိုးပြီး လက်ထပ်ယူမှာမို့ အိမ်ကိုအပါခေါ်လိုးတာပါ။ သူ့ကိုလည်း စွဲလန်းနေအောင် ကျနော်လိုးမှာပါ။ အလိုးမခံဖူးသေးတဲ့ သီရိအခုဆို ကျနော့်အလိုကျ ဖြစ်လာပြီလေ။ ကျနော်က သီရီကိုဖက်ပြီး လည်တိုင်လေးကို နမ်းလိုက် နားရွက်ကလေးကို ဖြေးဖြေးကိုက်လိုက်နဲ့ဆွပေးနေတာပါ။
အချို့မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကာမစိတ်ဖြစ်စေတဲ့နေရာဟာ မတူဘူးလေ။ တချို့က လည်တိုင်လေးကိုနမ်းရင် ကာမစိတ်က အရမ်းကြွလာသလို၊ တချို့ကလည်း တကိုယ်လုံးပွတ်သတ်ပေးရင် စိတ်တွေအရမ်းထတယ်။ တချို့ကလည်း နို့စို့ပေးရင်အရမ်းကြိုက်တတ်တယ်လေ။ သိရီအကြိုက်မှန်းဆရင်း ကျနော်ကျနော်သီရိရဲ့ ကာမစိတ်ကို အသစ်တဖန်နှိုးဆွဖို့ လုပ်လိုက်တယ်။ သီရိလည်း ကျနော့လီးကိုကိုင်ဆွပေးပြီး “အင့်..ဟင်းးးးကိုကိုရယ်သီရိပြန်ဖြစ်လာပြီကွာ” “သဲလေး ကိုကိုပြန်မှုတ်ပေးချင်တယ်ကွာ” “ကိုကိုသေဘာပါကိုကို” “သီရိကောမကြိုက်ဘူးလား” “ပြောစရာလိုလို့လားကိုကိုရယ်၊ အားလုံးကြိုက်ကြမှာပဲလေ” ကျနော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်အတွက် သီရိပိပိကိုဒုတိယံပိ ယက်ရမှာပေါ့ဗျာတယ်။ ဒီအခေါက်ကတော့ ဆပ်ပြာရနံ့လေး သင်းသင်းမွေးနေတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော့်အတွက်တော့ အဲဒါဟာ စိတ်အနှောက်အယှက်ပါပဲ။ ပိပိအနံ့နှင့်တူမှ အရသာရှိတယ်။ မွှေးပြီးအေးစက်နေရင် အရသာပေါ့တာပေါ့ဗျာ။ ပိပိရနံ့ သင်းသင်းလေကသာ ကျနော့်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တာ။ ဒီတစ်ခါတော့ ပိပိကိုသေသေချာချာလေး ယက်လိုက်ဖို့ သီရိခါးအောက် ခေါင်းအုံးခုဖို့အတွက် “ချစ်လေး….သဲခါးအောက်အုံးခံလိုက်မယ်လေ” “အင်းလေကိုကိုအဆင်ပြေသလိုလိုက်ပေါ့” အဲဒါဆိုခါးကြွပေး” သီရိလည်းခါးကိုကြွပေးတဲ့အတွက် ကျနော်ခေါင်းအုံးတစ်လုံးယူကာ သီရိခါးအောက်ထိုးထည့်လိုက်။ အနေအထားကတော့ ရွှေငါးပျော့။ သီရိပိပိက ပိုပြီးကြွလာတယ်။ ဖြူဖွေးနေတဲ့ အသားအရည်က အခုတော့ ကျနော့်ကြောင့် နီရဲနေတာပေါ။ လိုးချက်ပြင်းပြင်းဒဏ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပိပိအာနီရဲလို့ နေတယ်လေ။ ကျနော်လည်း သီရိခြေကို အပေါ်တွန်းတင်တော့ သီရိကလက်နဲ့ လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမာ သီရိရဲ့ပိပိသာမက စီရိရဲ့ဖင်နီနီလေးပါ ပေါ်လာတယ်။
တဏှာစိတ်တွေ မွန်ထန်နေတဲ့ ကျမော်အတွက်ကတော့ အကြိုက်ပေါ့၊၊ ကျနော်စိုဝကနေပြီ့း ပိပိအကွဲကြောင်းတစ်လျောက် ယက်လိုက်တယ်။ သီရိတကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားတယ်။ ဘယ်လိုမှ ထင်မထားတာလေ။ “အားးးးကိုငိုရယ်..ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ” ကျနော်စအိုဝနီနီကလေးကိုလျှာနှင့် ထိုးမွှေလိုက်တယ်။ “အာ……ရှီးးးးအားးးးးအမလေးးးးးး” သီရိတစ်ယောက်လိမ့်နေအောင်ခံစားနေရတယ်။ စအိုဝနီနီလေးကို အယက်ခံလိုက်ရတဲ့ခံစားမှုက ကတဟ၌ဏှာစိတ်ကို ပြင်းပြစေတယ်။ ပိပိထဲက အရည်တေ့စီးကျလာတယ်။ ကျနော်ပိပိကို အလှည့်ပေးပြီး နှုတ်ခမ်းသားအား လက်နှင့်ဖြဲကာ လျှာနှင့်အတွင်းနံရံကို မွှေလိုက်တယ်။ “အ အ…..အာ့အာ့…အားးးးးးရှီးး” သီစိတစ်ယောက်တဆတ်ဆတ်တုန်သွားပြီး တအာ့အနှင့်ညည်းညူနေတော့တယ်။ “အာ့ကိုကို.တော်ပြီကွာ..အားးသီရီသေလိမ့်မယ်” ကျနော်လည်းရပ်မပေးဘူး အစေ့ကိုတပြွတ်. .ပြွတ်စုပ်လိုက်တယ်။ “အားလားးလားးဝိုးးးတော်ပြီအားးးးးကိုကို အိုးးး” သီရီတစ်ယောက်အခံနိုင်တဲ့အဆုံး အသည်းအသန်ရုန်းကန်ပြီးထလာတယ်။
“အာ..ကိုကိုတော်ပါတော့ဆို” “ဘာဖြစ်လို့လဲ..ချစ်” “အာ….ဘယ်လိုကြီးဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူး၊ အသည်းတွေအူတွေ ပြုတ်ကျသွားသလို တလှပ်လှပ်နဲ့ကွာ” “ဟားးးဟားးကိုကိုအဲလောက်တောင် ကျွမ်းသလားကွာ” “လာခဲ့သူများကိုနှိပ်စက်တာ ကိုကိုလည်း ပြန်ခံစားရမယ်” “ရပါပြီသဲရဲ့ ကိုကိုလိုးချင်ပြီ” “မရဘူး.သူများခံရသလိုခံရမယ်လာ. အိပ်.” ကျနော်လည်းလှဲအိပ်လိုက်တယ်။ သီရိက “လာလေ..တင်ပါးအောက်ခေါင်းအုံးခံ သီရိတုန်းကလိုပြန်လုပ်မှာ” ကျနော်လည်းခါးကိုပြန်ကြွပေးလိုက်တယ်။ သီရိက ကျနော့်ခါးအောက် ခေါင်းအုံးထိုးထာ့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ “ခြေထောက်မိုးပေါ်ထောင်ပေး” ကျနော်ခြေထောက်တွေမြှောက်ပြီးဒူးကွေးကာနေလိုက်တယ်။သီရိကကျနော့်ပေါင်ကြားခေါင်းထိုးဝင်ပြီးလီးကိုစစုပ်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့မသီရိကျနော့်ကိုလက်စားချေခန်းပေါ့ဗျာ။ကျနော်အော်ရပြီလေ။ပထမအခေါက်တာရှက်ရွံ့နေပေမယ့်ဒီတစ်ေခေါက်တော့လီးဒစ်တွေကိုလျှာနှင့်ယက်တယ်ဂွင်းတိုက်ပေးသေးတယ်ဗျ။ပါးစပ်ထဲလီးငုံပြီးရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်တယ်။
“အားးးအရမ်းကောင်းတယ်ကွာ” ကျနော်လည်း တအအားနှင့် ဖီးတွေအရမ်းကောင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ လီးထိပ်ဝကို လျှာနှင့်ထိုးထိုးမွှေတယ်ဗျ။ လီးစုပ်ပေးရင်း ဂွေးဥကို ဖွဖွလေးညှစ်ပေးတယ်။ ကျနော့်လီးက အစွမ်းကုန်တောင်လာတယ်။ သီရိက လီးစုပ်နေတာကိုရပ်ပြီး ဂွေးဥလေးကို တချက်တချက်စီစုပ်လိုက်လုပ်တယ်ဗျ။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကျနော်အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တောင်တုန်တယ်ဗျ။ “အားးလားးလားသီရီရယ်..အူးးး..အင်းးးးး” “သီရိလေကျနော့်ဂွေးဥကိုယက်ပြီး တွန်းတင်ကာ ဖင်ကိုယက်တယ်ဗျာ။ ကျနော်ပြီးချင်သလိုတောင် ဖြစ်လာတယ်။ သုတ်တွေအရမ်းတိုးသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ လီးကိုသုတ်တိူးချက်က တဒုတ်ဒုတ်မြည်တယ်ဗျာ။ “အားးရပြီ သဲကိုကိုပြီးသွားလိမ့်မယ်.. ကိုကိုထပ်လုပ်ချင်သေးတာ” “ဟင်းးးးဟင်းးသိပြီလားသူများကိုနှိပ်စက်သလို ပြန်ခံရမယ်ဆိုတာလေ” “အေးပါကွာ… ကြောက်ပါပြီ” သီရိအလိုကျပြောလိုက်တယ်။
သူမကျေနပ်လို့ ပါမစ်ပိတ်ရင် ငတ်ရမှာလေကြောက်ရတယ်။ လင်မယားမှ မဖြစ်သေးတာလေ။ “သီရီ..ချစ်လေးကုန်းပေးကွာ” “အင်းကုန်းပေးမယ်လေ။ဘယ်လိုကုန်းရမလဲ” “ကုတင်စွန်းကုန်းပေး၊ကိုကိုအောက်ကနေလိုးမှာ” သီရိလာ်းကုတင်စွန်းကုန်းပေးတယ်။ သီရိကုန်းပေးတော့ ဖင်ဝိုင်းလေး သီရိရဲ့အနောက်ပိုင်းက အရမ်းချစ်စရာကောင်းလှတယ်။ ကျနော်လည်း ကုတင်နားကပ်ပြီး သီရိအနေအထား နည်းနည်းပြင်လိုက်တယ်။ ပြီမှ ဖင်ကြားလီးကို အပေါ်တင်ပြီး လေးငါးခါပွတ်တိုက်လိုက်တယ်။ သီရိနည်းနည်းတုန်လှုပိသွားပြီး “ကိုကိုနှော်..သီရိဖင်မခံဘူးနှော်၊ တော်ကြာဖင်ပြဲသွားလို့ဒုက္ခရောက်ရမယ်” “ကိုကိုမလုပ်ရက်ပါဘူး သဲရယ်” ပါးစပ်ကသာပြောတာ စိတ်ထဲမှာတော့ လက်ထပ်ပြီးလို့ကတော့ တွေ့မယ်လို့ ကြိမ်းလိုက်တယ်။
ကျနေိာနှင့်တွေ့တဲ့ ဆော်တိုင်းက ဖင်လိုးခံတာကြိုက်ကြလို့ ဇော်မိုးလို့တောင် မခေါ်တော့ ဖင်လိုးကောင်ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြတာလေ။ ကျနော်စိတ်ထဲ ကြိမ်းဝါးရင်း သီရိအဖုတ်ထဲ လီးခေါင်းမြှုပ်အောင် ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ သီရိတချက်ကလေးတုန်သွားတယ်။ ဖြေးဖြေးလေးပဲ တရစ်ချင်းသွင်းတယ်။ လီးကဗျစ်.. ဗျစ်နှင့်တရစ်ချင်းတိုးဝင်သွားတယ်။ “အာ့ကိုကို.အောင့်တယ်.ဖြေးဖြေးးကွာ’” “အေးပါသဲလေး” သိတယ်လေ ဒီပုံစံကစစလိုးရင်း အောင့်တက်တာ သဘာဝပဲ။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကျနော်က သီရိကြောက်မသွားအောင် ဖြေးဖြေးလေးလိုးရင်း စအိုဝကလေးကို လက်သည်းနှင့် မထိတထိလေး ခြစ်ပေးရင်း သီရိတစ်ယောက် တဏှာစိတ်တွေထလာအောင် ထပ်ပြီးနိုဆွလိုက်တယ်။ ဖင်ကို မထိတထိလေးလက်သည်းနှင့် ခြစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ သီရိစိတ်တွေထန်လာပြီး အော်ညည်းလာတယ်။ “အာ့. အင်းးဟင်းးးဟင်းးးကိုကို” ကျနော်တဖြေးဖြေးနှင့် သီရီခံနိုင်မှန်းသိလာတော့ အရှိန်လေးထပ်တင်လိုက်တယ်လီးကဇွိ ဗျိ ဗျစ်ဗျစ်နှင့် ထိုးဝင်လိုက်ထွက်လာလိုက်ပေါ့။
“အင်းးဟင်းးးး ကိုကို ကြမ်းကြမ်ေးဆောင့်ကွာ” သိတယ်လေအဲလိုဖြစ်လာအောင် တမင်လုပ်ထားတာ။ စအိုဝကိုလက်သည်းနှင့် ခြစ်လေ အားမလိုအားမရ စိတ်တွေဖြစ်လေ ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာ သီရီကကြမ်းကြမ်းလေး လိုးခိုင်းတော့၊ စအိုဝကိုခြစ်နေတဲ့လက်ကို နေရာပြောင်းပြီး သီရိခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကိုကိုင်ပြီး ဝုန်းလိုက်တယ်။ ကုတင်ဘောင်တောင် တကျွီကျွီမြည်တယ်ဗျာ။ လိုးချက်က တဖန်းဖန်းမြည်နေသလို လီးဝသ်ချက်ကလည်း ဘွတ်ဘွတ်မြည်လာတယ်။ “အားးးးကောင်းတယ်..ကိုကို” “ဇွိ..ဗျိ..ဗျစ်..ဗျစ်…..ဗွက်..ဘွတ်..ဖန်းးဖန်းးးးဖန်းး” “အားကိုကို…အိုး..အားးရှီးးးရှီးးး” နှာမှုတ်သံနှင့်အတူ သီရိတစ်ယောက်ပြီးတော့မယ်။ ကျနော်လည်း အဆက်မပြတ်တွန်းလိုးရင်း သီရိခါးကို တင်းတင်းဆွဲကိုင်ပြီးလိုးတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေပြင်းလွန်းလို့ သီရီတင်ပါးတောင် ဖြူဖွေးတာကနေ ပန်းရောင်ကပြေးလာတယ်။ တဖြေးဖြေးနှင့်နီလာတယ်။
ကျနော်လည်း မိနစ်နှစ်ဆယ်ကျော်လိုးလိုက်တယ်။ သီရိက အားမရှိတော့ဘူး သူကပြီးသွားလို့ ဒူးခွေနေပြီ။ ငါးမိနစ်လောက်အဆက်မပြတ်လိုးရင်း လီးကို အဆုံးထိကပ်ကာ သုတ်တွေပန်းထည့်လိုင်တယ်။ သုတ်တွေကုန်အောင် ပန်းထည့်လိုက်ပြီးတော့ သီရိခါးကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်။ သီရိက ကျနော်လွှတ်လိုက်တော့ ကုတင်ပေါ် မှောက်လျက်ကျသွားတယ်။ ကျနော်လည်း သီရိဘေးနားကပ်ပြီး “ချစ်လေး..အိုကေရဲ့လား” “အားကိုမရှိတော့ဘူးကိုကိုရယ်” ဖျော့တော့တော့လေသံနှင့်ပြောလေတော့ ကျနော်ရယ်ချင်သွားတယ်။ “ကဲသဲခဏနားအုံး ကိုကိုစားစရာသောက်စရာတွေ ပြင်လိုက်ဦးမယ်” “အင်းပါကိုကို” ကျနော်စားစရာသောက်စရာတွေပြင်ပြီးတော့ အိပ်ခန်းဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ်တုံးလုံးနှင့် သီရိကတော့ အိပ်ပျော်နေဆဲပါပဲဗျာ။ အေးကွန်းဖွင့်ထားတဲ့ အခန်းမှာ သီရိအအေးမိနေမှာစိုးတော့ စောင်လေးခြုံပေးတော့ သီရိလန့်နိုးသွားတယ်။
“ဟင်..ကိုကို” ဆိုပြီး ကျနော့်ကိုလှမ်းဖက်တဲ့အတွက် ကျနော်ပြန်ဖက်လိုက်ကာ နဖူးလေးကို အနမ်းတပွင့်ခြွေလိုက်ပြီး “ဟော ချစ်လေးနိုးသွားပြီလား” “အင်းကိုကို ” “ထလေ သီရိ..စားလို့ရပြီ” “အင်း..ကိုကိုထူမှထမှာ” ကျနော်ထပ်ပြီးအနမ်းလေးပေးရင်း သီရိကို အိပ်ရာပေါ်ထူမတ်ပေးလိုက်တော့ “ကိုကိုသီရိအဝတ်အစားတွေပေးကွာ” သီရိကခေါင်းက ဆံပင်ကိုသပ်ချရင်းပြောတော့ “နေအုံးစီရိရဲ့ကိုကို အကျီင်္နှင့်ပုဆိုးခဏ ဝတ်ထားပါလား” “အင်းးကောင်းသားပဲကိုကို” ကျနော် ပုဆိုးနှင့်ရှပ်တစ်ထည်ပေးလိုက်တယ်။ သီရိလည်း ယူဝတ်လိုက်တယ်။ ကျနော့်အဝတ်အစားလေးနှင့်လည်း သီရိက ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဗျာ။ “လာလေ ချစ် ထမင်းသွားစားမယ်” “နေပါဦး ကိုကိုသီရိရေချိုးခန်းဝင်လိုက်မယ်” သီရိရေချိုးခန်းကထွက်လာတော့ မျက်နှာသစ်လာတယ်။ ကျနော်သဘက်တစ်ထည် လှမ်းပေးရင်း “ရော့လေ ချစ် မျက်နှာသုတ်လိုက်တော့” “အင်းပါကိုကို” ဆိုပြီးသီရိသဘက်ကိုလှမ်းယူရင်း မျက်နှာနှင့်လက်တွေကို သုတ်လုက်တယ်။
ပြီးမှကျနော့်ကို “ရော့ကိုကိုသိမ်းလိုက်တော့” ကျနော်လှမ်းယူရင်း သီရိကိုလက်ဆွဲကာ ထမင်းစားခန်းသို့ ခေါ်ယူလိုက်တယ်။ ထထမင်းစားပြီးတော့ “အခုမှပဲနေသာတော့တယ် ကိုကိုရယ်” ဗိုက်ပြည့်သွားတော့ အားအင်တွေပြန်ပြည့်လာသလို ခံစားရတယ်။ အချိုပွဲလေးစားပြီး “ချစ်လာကွာ အိပ်ခန်းထဲသွားရအောင်” “အင်းခဏတော့အနားယူကြမယ်” “အွန်းးးးးးခေါ်ပြန်ပြီကွာကြောက်လာပြီ” “မကြောက်ပါနှင့် သဲကလည်း ကိုက်မစားပါဘူး၊ ချစ်ရုံလေးပဲ” “အေးဒါကိုကြောက်တာ လူလည်းထူပူနေပြီ” “ဟားးးးးးးးဟားးးးး” သီရိကိုအိပ်ခန်းထဲခေါ်လာပြီးအိပ်ရာပေါ်လှအိပ်ရင်း “သီရိရယ် အိမ်မပြန်နှင့်တော့ကွာ” “အာ ဘယ်ဖြစ်မလဲ မာမီဆူလိမ့်မယ်” “”သီရိ..ကိုကိုတို့လက်ထပ်ရအောင်လေ” “သီရိငယ်သေးတယ်ကိုကို ကျောင်လည်း ပြီးသေးဘူး.. နောက်ပြီးသီရိက လုပ်ချင်တာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်”
“အင်းပါကွာ သီရိရယ်.. ကိုကိုက အတူတူနေချင်လှပြီ” “ဟင်..အခုလည်း အတူတူနေတာပဲမဟုတ်လား” “ချစ်ကလည်းကွာ အခုလိုနေရတာအားမရဘူးလေ” “အားရအောင်နေလေ ကိုကို” “အင်းတကယ်နော် ” “အင်းးဒီနေ့တော့ ကိုကိုနေချင်သလောက်သာနေ၊ ကိုကိုအကြိုက်သီရိနေပေးမယ်သိလား” “အဲလိုအလိုက်သိလို့ပိုချစ်ရတာ” “အွန်းးးးးကိုကိုနဲ့ချစ်တာ မလွယ်ဘူး၊ နောက်ထပ်မရဘူးသိလား” “ဟာကြာ.သဲကလဲ” ကျနော်နောက်ထပ်အစပြုနိုင်အောင် သီရိကို နမ်းလိုက်တယ်။
“တော်တော့ ကိုကိုသီရိနှုတ်ခမ်းတွေထူပူနေပြီ၊ လည်ပင်းမှာလည်း အကွက်တွေထနေတယ်၊ နောက်ပြီး သီရိနို့တွေလည်း ကျိမ်းနေပြီ၊ ကိုကို.ကိုလုပ်ပေးမယ်” သီရိအဝတ်အစားတွေချွတ်လိုက်ပြီး. ကျနော့်လီးကို စုပ်တယ်။ တဖြေးဖြေးနှင့်သီရိလီးစုပ်တာ ကျွမ်းကျင်လာတယ်။ လီးကိုတပြွတ်ပြွတ်နှင့် စုပ်ပေးနေတယ်။ ကျနော်လည်း လီးက အရမ်းတောင်လာပြန်တယ်။ တဏှာစိတ်က ပြင်းပြလာလို့ သီရိပိပိကိုမှုတ်ချင်လာတော့ “သဲ ကို့မျက်နှာအပေါ်ခွလိုက်ပါလား” “အာ မလုပ်ရဲဘူး” “လုပ်ပါကွာ ကိုအရမ်းဆန္ဒတွေပြင်းလာလို့ပါ” “ကန့်တော့ကိုကိုသီရိတက်ပေးမယ်” သီရိကကျနော့်အပေါ်ကားယားခွကာ မျက်နှာပေါ်တက်ထိုင်တယ်။ ကျနော်လည်း သီရိဖင်ကို လက်နှစ်ဘက်နှင့်မကာ အဖုတ်ကိုပါးစပ်နှင့် နေရာကျအောင် လုပ်လိုက်ပြီး ယက်လိုက်တယ်။ ကားယားခွထားရတော့ သီရိပိပိဟာ နည်းနည်းဟနေတာ။ သီရိဆီကထွက်တဲ့ အရည်တွေပါးစပ်ထဲ ဝင်လာတယ်ဗျ။
မြိုလည်းချထပ်ယက်ပေါ့။ “ပလပ်..ပလပ်…ပလပ်” “အာ့..အင်းးဟင်းးဟင်းးးးးး” သိရီဆီကညည်းသံတွေထွက်လာတယ်။ လျှာနှင့်အားရပါးရ ယက်လေ မေးကသီရိဖင့်နှင့် အဖုတ်ကြားထိလေ၊ အရည်တွေလည်း တစက်စက်ကျလေ။ ကျနော်လည်းမြိုချလေ။ သီရိကို ရှေ့နည်းနည်းရောက်အောင်ပို့ရင်း သီရိဖင်ကိုပါ ယက်လိုက်တယ်။ စအိုဝလေးက စူတူတူလေးဖြစ်နေတာလေ။ “အားးးကိုကို အရမ်းကောင်းတယ်ကိုကိုရယ်” သီရိဆီကညည်းသံတွေထွက်လာလေ။ ကျနော်ကြမ်းကြမ်းယက်လေပါပဲ။ သီရိအသံတွေ ဆူညံနေတာလေ။ နောက်ဆုံးသီရီအစေ့ကို အောက်ကနေပြီး ကလော်ပြီးလျှာနှင့်ထိုးတော့ “အားးဟားးးဟားးးးအရမ်းကျိမ်းနေပြီ ကိုကိုတော်ပါတော့ သီရိမနေတတ်တော့ဘူးကွာ.. အင်းးဟင်းးးးအားးး” သီရိရပ်ခိုင်းတော့ ကျနော်လည်းရပ်လိုက်တယ်။ “သဲ..ကိုကိုအပေါ်ကတက်ပြီးလုပ်ကွာ” “အင်း..လုပ်ကြည့်မယ်ကိုကို” သီရိအောက်ကိုရွှေ့သွားပြီး ကျနော့်အပေါ်က ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ လီးကိုကိုင်ပြီး ပိပိနှင့်တေ့ကာထိုင်ချလိုက်တယ်။ “ဗျစ်..ဗျစ်..ဗျစ်” “အာ့…” ဆိုပြီးတချက်ကြွလိုက်ကာ သီရိထက်ထိုင်ချတယ်။
သီရိမျက်နှာလှမ်းကြည့်တော့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ပြီးဇိမ်ယူနေတာ။ ပြီးတော့မှ သီရိက မ်ြမြ်လေးလုပ်တယ်။ လုပ်ရင်းညောင်းနေရင် ကြိတ်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်တယ်။ သီရိအပေါ်က ဆောင့်ချချက်ကြောင့် လီးကအဖုတ်ထဲတဗျိ.. ဗြိတဘွတ်ဘွတ်တဖန်းဖန်းမြည်လာတယ်။ “အင်းးဟင်းးးဟင်းးး..အားးး” ငါးမိနစ်လောက်လုပ်လိုက်တာ သီရီမောဟိုက်နေတဲ့ အသံကြားတွေကြားလာရတယ်။ “အားးဟင်းး အာတော်ပြီကိုကိုသီရိညောင်းနေပြီ” “အဲဒါဆိုလည်း သီရိကကိုကို့ခြေထောက်ဘက် မျက်နှာမူပြီလုပ်ကြည့်ပါလား” သီရိလည်း အနေထားမှန်အောင်လုပ်လိုက်ပြီး လီးကိုပိပိထဲထည့်လိုက်တယ်။ လူကတော့ ခြေရင်းဘက်လက်ထောက်ပြီး ထိုင်လိုက် ထလိုက်လုပ်ပေးတယ်။ ကျနော်က သူ့တင်သားတွေကို တွန်းတင်လိုက်အောက်သို့ ချလိုက်နှင့် သီရိမညောင်းရအောင် အားကူပေးလိုက်ရင်း လိုးရတယ်။
သီရိဆီက ညည်းသံတွေထွက်လာတယ်။ ညည်းသံတွေထွင်လာသလို သီရိဆောင့်ချက်က ပိုသွက်လာတယ်။ “အာ့…ရှီးးးရှီးးးအာ့အင့်ဟင်းးးးးးူး” “ဇွိ..ဘွတ်..ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်” “အားးးးကိုကိုသီရိမရတော့ဘူးးးးအားးး” “သီရိ ဆင်းလိုက်ကိုကိုလုပ်မယ်” သီရိလည်းကျနော့်အပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီး အိပ်ရာပေါ် ပက်လက်ကလေးအိပ်တော့ ကျနော်သီရိခါးအောက် ခေါင်းအုံးခုလိုက်ကာ ဖင်ကိုအပေါ်ဆွဲထောင်ပြီး အပေါ်စီးကနေ လိုးလိုက်တယ်။ လိုးချက်ကပြင်းလွန်းလို့ လီးဝင်ချက်ကတဗျိဗျိ တဇွိ ဇွိ နှင့်မြည်သလို ဆီးခုံချင်းရိုက်သံတဖန်းဖန်းထွက်နေတယ်။ “ဖန်းးးဖန်းးးးဖန်းးး” “အားးးးအမလေးးအားးးကောင်းတယ်.အားးး” ကျနော်လည်း အားရပါးရလိုးထည့်လိုက်တယ်။ အပျိုစစ်ကို ဒီလိုလိုးရတာ အရမ်းလည်းဖီးရှိတယ်။ လိုးရင် အားနှင့်လိုးနိုင်ပြီးကြာကြာလိုးလေ မိန်းကလေးက စွဲလန်းလေဆိုတော့ နောက်အကြိမ်ရအောင်လို့ အစွမ်းကုန်လိုးနေတာပါ။
သီရိကလည်း ကြမ်းကြမ်းလိုးလေကြိုက်လေ။ အော်ညည်းလေပါပဲ။ “ဖန်းးးဖန်းးးဖန်းးးး” “အားးး..အင့်….ဟင့်..အားးးး” “သဲကောင်းလားး” “ကောင်းတယ်ကိုကို ကြမ်းကြမ်းလေးလိုးပေး” ကြမ်းလေကြိုက်လေအာဂသတ္တိပိုင်ရှင်သီရိ ၊ ကြမ်းကြမ်းလိုးတတ်တဲ့ ကျနော်နဲ့ကက့က်တိ၊ အမြဲလိုးရရင်ကောင်းမှာ။ မြန်မြန်လပ်ထပ်ပြီး အမြဲဒီလိုနေပစ်ချင်တာလေ။ “ကို ကို အားးးးကောင်းတယ်ကိုကို ” ဆီးခုံချင်းပွတ်တိုက်လို့အမွေးတွေ တဗျစ်ဗျစ်မြည်နေသလို သီရီလည်း အရည်တွေထွက်လာတယ်။ အမြုပ်တွေလို ဖြူဖြူအနှစ်တွေဖြစ်နေတယ်။ တဘွတ်.. ဘွတ်မြည်လေပဲ သီရိကခေါင်းအုံးကို လက်နောက်ပြန်လှမ်းကိုင်ရင်း “အားးးအင်းးးးးးဟင်းးးးးးးအားကောင်းတယ်” “ဘွတ် ဖတ် ဖန်းးဘွတ် ဘွတ်..ဘွတ် ” အပျိုအဖုတ်မို့လို့သာလေသံမထွက်တယ်။ တကယ်ဆိုဘွိ ဘွတ်ဆိုတဲ့ လေသံထွက်လောက်အောင် မြန်မြန်လေးလိုးလိုက်တယ်။
ဆီးခုံနှစ်ခလုံး အရည်တွေစိုချွဲနေတာ။ သီရီအဖုတ်ထဲကထွက်တဲ့ အရည်တွေဖင်ကြားထဲအထိ စီးဆင်းသွားနေတယ်။ လိုးချိန်နာရီဝက်နီးပါးလောက် အားရပါးရလိုးလိုက်တဲ့အခါ ကျနော်လည်း သုတ်တွေထွက်သွားတယ်။ သုတ်ထွက်သွားတာတောင် အချက်ငါးဆယ်လောက် မနားတမ်းဆက်လိုးလိုက်တယ်။ သီရိလည်း ပျော့ခွေသွားပြီး မျက်နှာကလေးကို ချောင်ကျသွားတော့တယ်။ အဲဒီဧန့က လိုးတာလေးချီမြောက် လိုးပစ်လိုက်တယ်။ သီရိခင်မျာ လမ်းတောင် ဖြောင့်အောင် မနည်းလမ်းလျောက်နေရတယ်။
အဲကွန်းတတ်ထားတဲ့ အခန်းမှာ အဝတ်ဗလာနဲ့ အချိန်အတော်ကြာကြာနေခဲ့ရတဲ့ သီရိတစ်ယောက် နှာတွေမွှန်လာတယ်။ ရေချိုးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ချိန်မှာ မျက်လုံးလေးတွေနီရဲသလို နှာပါချေလာတော့ “သဲ..မပြန်နဲ့တော့ကွာ” “မပြန်လို့မှမရတာ ကိုကိုရယ်” “သဲပုံကပြန်လို့ရပါ့မလား” “ရတယ်ကိုကိုမာမီဆူလိမ့်မယ်” “အင်း.ပါကိုကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ” “အင်းပါကိုကို” ကျနော်ကားကိုမောင်းပြီးသီရီက အိပ်ပျော်လာတယ်။ သံလျှင်ဘက်ရောက်ပြီး သီရိအိမ်အထိ လိုက်ပို့လိုက်တယ်။ သီရိလည်း ကားပေါ်က ဆင်းလမ်းလျောက်တာ လူမသိအောင် ဟန်လုပ်ပြီး ကြိုးစားလျောက်နေရတယ်ပုံပါပဲ။ ကျနော်အိမ်ပြန်ပြီးရောက်ကြောင်း သီရိဆီဖုန်းဆက်တော့ သီရိဖုန်းမကိုင်နိုင်တော့ဘူး။ သူ့မာမီပြောတာက သီရိနေမကောင်းလို့ အိပ်နေတယ်ပဲဖြေတော့။
ကျနော်လဲ စိုးရိမ်သွားတယ်။ နောက်တနေ့ထပ်ပြီး ဖုန်းဆက်တော့ “သီရိနေကောင်းလား” “မကောင်းဘူးကိုကို” “ကိုကိုလာခဲ့မယ်လေ” “အာ..မလာနဲ့” “ဟာ..ဘာဖြစ်လို့လဲသဲ” “ကိုကို့ကိုမြင်ရင်ရှက်လို့” “အမ်” “ဟုတ်တယ်လေ.ဆေးခန်းသွားပြီး ဆေးသွင်းလိုက်ရတယ်” “ဟားးဟားးအဲလောက်တောင်ပဲလား” “လူလည်းလမ်းကိုမလျောက်နိုင်ဘူး၊ တကိုယ်လုံးကိုက်ခဲနေတာ” “ဟားးဟားးးးးအဲလောက်တောင်ဖြစ်သွားရတယ်လို့ကွာ” “ဟင်းမညှာမတာခလေးကို” “သူပဲကြမ်းမှကြိုက်တယ်ဆိုပြီး” “သွားးမပြောနဲ့ရှက်တယ် ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်” ဆိုပြီးဖုန်းချသွားတယ်။ အဲဒီနေ့ကသာ သီရိမပြန်ခဲ့ရင် ကျနော်ရွှေလက်တွဲပျော်ခဲ့ရမှာကို ကျနော်မသိလို့ အတင်းမတားခဲ့တာပါ။ သီရိကို ဘာလို့လွမ်းနေရလဲ ဆိုတာကတော့ နောက်နေ့သီရိဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးတစ်ခေါက်တွေ့တယ်။ “သဲနေကောင်းသွားပြီလား” “ဟုတ်..ကောင်းသွားပြီကိုကို” “ကိုကိုမေ့သွားလို့သီရိ ကိုဆေးမဝယ်ပေးလိုက်ရဘူး” “စိတ်ချရတဲ့နေ့မို့သီရိမပြောတာပါ” “သီရိက အဲဒါကိုသိလို့လား”
“ကိုကိုကလဲဒီခေါတ်မိန်းကလေးပဲမသိဘဲ နေပါ့မလား” “အင်း ကိုကိုခရီးထွက်ရအုံးမယ်” “ဘယ်လဲကိုကို” “နေပြည်တော်မှာလေ အလုပ်တွေပြန်စမလို့” “ဟုတ် ကိုကို” “အဲဒါသီရိကိုလာပြောတာ” “သွားလေကိုကို” “သီရိနေ့တိုင်းဖုန်းပြောမှာနော်၊ သီရိဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ fbကနေ့ တိုင်းကြည့်မှာ” အင်းပါကိုကို” “သီရိ လည်းကျောင်းတက်ရမယ်မလား” “အင်း ကိုကိုလိုက်ပို့မယ်လေ” “မပို့နဲ့ကိုကိုသီရိဆိုင်ကယ်နဲ့သွားမှာ” “အင်းးးးသီရိကိုကိုအရမ်းချစ်တယ်” “အွန်းပါကိုကို” “သီရိကိုကိုကို့ချသ်တယ်တယ်ပြောကွာ” “ချစ်ပါတယ်ရှင့်ချစ်ပါတယ်” “အင်းးးးဟင်းးအာဘွားလေးပေးချင်လိုက်တာ” “လူတွေရှိတယ်ကိုကို” “အေးပါကွာ.မနမ်းပါဘူး ဟီးးဟီးး” “ခစ်ခစ် ခစ်” “ဒါဆိုသွားပြီနှော်” “အင်းးးး”” “ဘိုင့်” ကျနော်အိမ်ပြန်လာပြီးခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်။ ကျနော်နှင့်သီရိအတူတူအိပ်ဖူးပြီးပြီမို့လို့ ကျနော်သီရိကို စိတ်ချလက်ချထားခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး ကျနော်နှင့်သီရိနီးစပ်ရဖို့ အရေး အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်ပြီးငွေရှာရမယ်လေ။ အလုပ်တွေလုပ်ပြီး ညဆိုသူနှသ့်စကားပြောပေါ့။
သီရိ fbပေါ်မှာတင်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို like လေးပေးပေါ့ဗျာ။ သီရိဟာ သူဖြစ်တာက ဘလော့ကာ ဖြစ်ချင်တာ။ အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တာကို ကျနော်သိတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးတယ်ဆိုတာ မလွယ်ဘူးလေ။ အကောင့်အသစ်တွေဖွင့်ပြီး online မှာ စာရေးဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ ကျနော်က အကောင့်သစ်တော့ သိတယ်။ နောက်ထပ် သူဘာလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ မသိဘူး။ သီရိပင်ကိုယ်စရိုက်က လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်တာပဲ ကျနော်ကသိခဲ့တယ်။ ကျနော်အရင်ကသာ ရှုပ်ပွေခဲ့ပေမယ့် သီရိနှင့်အတူတူအိပ်ပြီးကတည်းက ဘယ်သူနှင့်မှ မပတ်သက်တော့ဘူး မှန်သောသစ္စာပါ။ သီရိကို တကယ်လည်းချစ်တယ်။ တစ်လလောက် နေပြည်တော်နေ.ပြီး ရန်ကုန်ပြန်လာ။
သီရိနှင့်တွေ့တယ်။ ဟိုတယ်ခေါ်မရတဲ့အတွက် သီရိနှင့်ကျနော်ထပ်ပြီး မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး၊ သူလည်း ခလေးတွေစာပြရတာ တဖက်သင်တန်းတက်ရတာ တဖက်နှင့်ဆိုတော့ သူလည်း အလုပ်မအားပါဘူး။ အိမ်မှာလည်း ကျနော့်မိဘတွေရှိနေတဲ့အတွက် အိမ်ကိုလည်း ခေါ်ရတာအဆင်မပြေဘူးလေ။ အပြင်မှာ ခဏတဖြုတ်တော့ တွေ့ရတာပေါ့ဗျာ။ သီရိကြည့်ရတာ fbအပေါ် အရမ်းစွဲလန်းနေတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဖုန်းနှင့်မျက်နှာခွာတယ်လို့ မထင်ဘူး။ သူ့ဖုန်းကိုလည်း အမြဲသိမ်းထားတယ်။
ကျနော်လည်း သူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို အရမ်းစွပ်ဖက်တယ်ထင်မှာစိုးလို့ သိပ်ပြီးမပြောဘူးလေ။ ကျနော်နှင့် သီရိတွဲနေတာကို ကျနော်အသိုင်းအဝိုင်းက သတိထားမိလာတယ်။ ချစ်ကြိုက်တာနဲ့ ချောသ်းဆိုးတာ ကွယ်ဝှက်ထားလို့မှ မရတာလေ။ တနေ့တော့ ကျနော်ဆီအကိုဝမ်းကွဲဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်ကို ရောက်လာတယ်။ သူကလည်း ကျနော်တို့အပေါ် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ “ဇော်မိုး” “ဟာကိုဇော် ဘယ်ကလှည့်လာတာလဲ” “မင်းဆီတမင်လာတာကွ” “အော..ကိစ္စအထူးအထွေရှိလို့လား” “ရှိတယ်..ဇော်မိုးရေ” “ပြော အကို” “အင်းပြောရမှာအားနာတယ်ကွာ” “ဗျာ ဘာဖြစ်လို့လည်း” “မင်းမဟူရာကိုသိလား” “အင်း..သိတယ်” “ငါနှင့်fbမှာသူငယ်ချင်းကွ” “အော်ဟုတ်လား” “အဲဒါနှင့်ကျနော်နှင့်ဘာဆိုင်လို့လဲ” “ဆိုင်တယ်ကွ..ငါသူနှင့်ရင်းနီးတာကြာပေါ့ အပြင်မှာလည်း တွေ့ဖူးတယ်” “အင်းးး” “မင်းးfakeအကောင့်ဆိုတာ သိလား” “ကြားဖူးတယ်၊” “မသ်းကိုငါပြမယ် ငါ့အကောင့်ကိုကြည့်” ကျနော်လည်း သူ့ဖုန်းကိုယူကြည့်တယ်။ “အဲမှာတွေ့လား သီရိဆိုတဲ့အကောင့်” “အင်းတွေ့တယ်၊ အပြာစာအုပ်တွေ ရှယ်ထားတာ”
“အေးအဲဒါဘယ်သူမှတ်လဲ” “ဘယ်သိမလဲဗျာ” “အဲဒါ မင်းကောင်မလေးလေ” “ဘာဗျ..ကိုဇော်၊ ခင်များသီရိအပေါ် စော်ကားလွန်းတယ်” “ဟေ့ကောင် ငါမင်းအကိုပါကွ၊ မင်းနစ်နာအောင် ငါမလုပ်ဘူး” “ကိုဇော်မသေချာပဲနှင့် မပြောနှင့်ဗျ” “ငါပြောရမလားမပြောရမလား စဉ်းစားနေတာကြာပြီ၊ မင်းကယူတော့မယ်ဆိုလို့” “အဲဒါတော့ မဆိုင်ဘူးထင်တယ်” “မင်းစဉ်းစားပေါ့ကွာ.. ကိုယ်မယ့်မိန်းမက အဲလိုအပြာစာအုပ်တွေနှင့် ပျော်နေတယ်ဆိုတာ၊ ယူပြီးမှ သီရိဟာအဲလိုမှန်းသိရင် မင်းအဖေအမေတော့ သွားပြီ နောက်ပြီး မင်းအဖေရာထူးကလည်း ကြီးတယ်၊ မင်းအမေကလည်း အရှက်ကြီးတယ်.. နှလုံးရောဂါလည်း ရှိတယ်.. မင်းသေချာစဉ်းစားပေါ့ကွာ.. မင်းငါ့အကောင့် ခဏယူထား သူနဲ့ငါနှင့် friလုပ်ထားတယ်.. မင်းကြည့်လိုက်ပေါ့” သူ့အကောင့်ရောပတ်စ်ဝါ့ပါပေးခဲ့တယ်။
ကျနောသီရိအကောင့်ကို မွှေကြည့်တယ်။ မန့်ထားကြတာတွေ မကြည့်ဝံ့စရာ။ reply ပြန်ထားတဲ့ သီရိမန့်တွေကလည်း ကြောက်လန့်စရာ။ မစားရညှော်ခံ၊ ပါးစပ်အရသာခံတဲ့ လူတွေအများကြီး။ ကျနော့်ရင်ထဲ အရမ်းခံစားရတယ်။ ကျနော့်ချစ်သူက ပြန်ပြောနေတာတွေ မန့်တွေက ရင်ကွဲလုမတတ် ခံစားရတယ်။ အဲဒါကြောင့် သီရိသူ့ဖုန်းကို အကိုင်မခံတာဆိုတာ ကျနော်သိလိုက်ပြီ။ ကျနော်သေသေချာချာသိဖို့ လိုလာပြီ။ ကျနော်စုံစမ်းမယ်။ ကျနော်သီရိကို ဘုရာသွားရအောင် ဖုန်းဆက်တယ်။ သူ့သင်တန်းလေးမစခင်မှာ သွားရအောင်ပေါ့။ “ဟလို..သဲ” “ကိုကိုရောက်ပြီလား” “ရောက်ပြီသဲ၊ ရောက်တုန်းလေး ဘုရားသွားရအောင်လေ” “မနက်ဖြန်စောစောသွားရအောင်”
“အိုကေ ကိုကိုမနက်ခြောက်နာရီလာခဲ့မယ်” ကျနော်မနက်ခြောက်နာရီဘုရားသွားဖို့ ချိန်းလိုက်တယ်၊၊ မနက်စောစောဘုရားမသွားခင် နံနက်စာ ဝင်စားလိုက်ကြသေးတယ်၊ ပြီးမှ ဘုရားပေါ်တက် ဘုရားဖူးပြီးနောက် အောက်ဆင်းရင်း “ကိုကို သီရိtoiletသွားချင်တယ်.. သင်တန်းကလည်း ကြာမှာမို့” “သွားလေ သဲကိုကိုအပြင်ကစောင့်ပါ့မယ်” “အွန်းခဏစောင့်နှော်” “အေးပါသဲ” သီရိက အိမ်သာထဲဝင်မယ်အလုပ်မှာ “သဲဘာလို့အိတ်ယူသွားမှာလဲ၊ ထားခဲ့လိုက်လေ” “ဟုတ် မေ့သွားလို့ပါ” သီရိ အိမ်သာထဲဝင်တုန်း အိတ်ဖွင့်ရင်း ဖုန်းကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ ပတ်ဝါ့က သူ့မွေးနေ့ထည့်ထားတာ ကျနော်သိတယ်လေ။ ကျနော်သူ့ fb ကိုဖွင့်ပြီး official ကို log out လုပ်လိုက်တော့ ဖိတ့်အကောင့်ကို သွားတွေ့တယ်။ remove လုပ်မထားဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဖိတ် အကောင့်ကို ဖွင့်မရဘူး။ ကျနော်ဖွင့်ကြည့်နေတုန်း သီရိရောက်လာတယ်။ “ဟာ ကိုကို..ဘာလို့သူများဖုန်းဖွင့်ကြည့်နေတာလဲ”
“သီရိ ဒီဟာက မင်းအကောင့်တွေလား” “ဟုတ်တယ်လေ၊ ကိုကိုစည်းမရှိဘူး” “ဘာကွ.သီရိ မင်းဘယ်လိုမိန်းခလေးလဲ” “ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကို ” “မင်းက မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး fake အကောင့်သုံးရတယ်လို့” “ခုခေတ်ဘာဆန်းလို့လဲ ကိုကို၊ လူချင်းသိကြတာမှ မဟုတ်ပဲ” “ဆန်းတယ် သီရိ မင်းကသာ လူချင်းမသိဘူးပြောတာ သိတဲ့လူက လာပြောတယ်ကွ မင်းသိလား” “သိလည်း ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး” “ဟာ သီရိရယ် ကိုယ်ယူမယ့်မိန်းကလေးက အဲလိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူး” “မဖြစ်ချင်ရင် လမ်းခွဲလိုက် ကိုကို” “ဘာကွ..အဲလိုမပြောနဲ့သီရိ မင်းကို ငါအရမ်းချစ်တာ၊ မင်းနောက် ဒီအလုပ်မျိုးမလုပ်ပါနှင့်ကွာ”
“ကိုကိုသူများလွတ်လပ်ခွင့်ကို မထိခိုက်နဲ့” “ဘာ သီရိ မင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကွာ” “မင်းအကျင့်ကိုမပြင်နိုင်ဘူးလား” “မပြင်နိုင်ဘူး” “ဟာကွာ မင်းတော်တော်ခေါင်းမာပါလားကွာ” “မာတယ်ကိုကိုမာတယ်.၊ ကဲဘာမှမပြောနဲ့ သီရိသင်တန်းသွားတော့မယ်” “ကိုကိုလိုက်ပို့မယ်” “မလိုက်ပို့နဲ့.လိုက်လာရင် အော်လိုက်မှာ” ပြောရင်း သီရိကတက်စီတစ်စီးငှားပြီး ကားပေါ်တက်သွားတော့ ကျနော်စိတ်ညစ်ပြီး ကျန်ခဲ့ရတယ်။ အရမ်းစိတ်ညစ်သွားတယ်ဗျာ။
ခြေမကိုင်မလက်မကိုင်မိ မျောက်သစ်ကိုင်း လွတ်သလိုပါဘဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ကျနော့အသိဖြစ်တဲ့ မမခရမ်းပြာကို ကျနော်ဖုံးဆက်လိုက်တယ်။ မိန်းကလေးချင်းဆိုတော့ အဖြေလေးသိရအောင်ပါ။ “မောင်းလေးပြော” “ကျနော့်နှင့်သီရိကိစ္စလေးပါမမ” “မမသိတယ် မောင်လေး အိမ်ထောင်ပြုတာ အချစ်တစ်ခုနဲ့မလုံလောက်တာ သီရိနားမလည်တာပါ၊ အသွင်တူမှ အိမ်သူဖြစ်နိုင်တယ်လေ၊ အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ မောင်လေးတို့အကြောသ်းလူသိရင် မောင်လေးမိဘတွေ အရှက်ကွဲမယ်၊ မောင်လေးရှေ့ဆက်မတိုးစေချင်ဘူး၊” “ကျနော်သီရိကိုအရမ်းချစ်တယ် မမရယ်” “သိပါတယ်မောင်လေးရယ်၊ မမပြောတာလဲ စဉ်းစားပေါ့” “ဟုတ်ကဲ့ပါမမ” ငျနော်အရမးစိတ်ညစ်သွားတယ်။ အရမ်းစိတ်ညစ်တော့ ဘာမှအလုပ်လုပ်လို့ မရတော့ဘူး၊ ကားကို ဟိုဒီလျောက်မောင်းပြီး အရက်ဆိုင်ဘက် ခြေလှမ်းဦးတည်လိုက်တယ်။ တခွက်ပြီးတခွက် သောက်နေရင်း ဖုန်းကဝင်လာတယ်။
ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်က မကိုင်ဘဲ ထားလိုက်တယ်။ သုံးလေးကြိမ်ခေါ်သေးတယ်။ ညဆယ်နာရီလောက် ဖြစ်လာတယ်။ လူလည်း တော်တော်မူးနေပြီ။ ဖုန်းထပ်ဝင်လာတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုဇော်.. “ဟလို ညီလေးဇော်မိုး” “အင်းအကိုပြော” “မင်းဘယ်မှလဲ..” “အရက်ဆိုင်မှာ.” “ငါလာခဲ့မယ်” “မလာနဲ့” “မဖြစ်ဘူး..အဘခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ” “ဟာဗျာ” “အခုဘယ်အရက်ဆိုင်မှာလဲ” ကျနော်ဆိုင်နာမည်ပြောလိုက်တော့ နာရီဝက်လောက်ကြာပြီး ကိုဇော်ရောက်လာတယ်။ အရက်ဖိုးရှင်းပြီး ကားပေါ်အတင်းတင်ပြီး အိမ်ကိုမောင်းတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ ခြေလှမ်းမမှန်တော့တဲ့ ကျနော့်ကို ကိုဇော်ပဲအိပ်ရာပေါ်တင်ခဲ့တာပဲဗျာ။ မနက်မိုးလင်းတော့ ခေါင်းတွေ မတရားကိုက်ခဲနေတယ်။ ရေလည်း ငတ်တာကြောင့် ထမင်းစားခန်းးဘက်သွားပြီး ရေသောက်မလို့ သွားတယ်ဗျ။ ဟိုရောက်တော့ “ဟေ့ကောင်ဇော်မိုး” ‘”ဗျာ ဖေဖေ” “ငါအာလုံးသိပြီးပြီကွ ”
“ဗျာ” “မင်းနဲ့သီရိကိစ္စလေ” “ဟုတ် ငါလုံးဝသဘောမတူဘူး” “ဟာ ဖေဖေ” အေး ငါပြောမယ်. ငါလည်းမဟုတ်တာ မလုပ်ခဲ့ဘူး၊ မင်းယူမဲ့ငါ့ချွေးမဟာ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင်ဖြစ်ရမယ်” “ကျနော်သူ့ကိုချစ်တယ်ဖေဖေ၊ သီရိကိုယူမှာ” “ဘာကွ ဟေ့ကောင်” “ဒီမှာသားး မင်းသီရိကိုယူချင်ရင် ငါသေပြီးမှယူ” “ဗျာမေမေ” “ငါနှင့်နင့်အဖေတို့ကို အရှက်ရအောင်မလုပ်နဲ့၊ ပြောထားလျက်တဲ့ ကြားက သားကသီရိကိုယူရင် မေမေအဆိပ်သောက်သေပစ်မှာ နားလည်လား” “ရက်စက်လိုက်တာဗျာ” “လောကမှာ ယူစရာမိန်းမတွေပေါလို့ကွာ၊ ငါပေးစားမယ်” “မယူဘူးဗျာ.. သီရိကလွဲရင် ဘယ်သူ့မှမယူဘူး” “အေးနင်သီရိကိုယူရင် ငါလည်းတစ်ခါတည်း အဆိပ်သောက်ပြီးသားပဲ” “အေး..မင်းဘယ်မှမသွားပဲ အိမ်မှာပဲနေကြားလား” ကျနော်သီရိဆီဖုန်းဆက်တယ်။ သီရိမကိုင်ဘူး၊ အကြိမ်ကြိမ်ဆက်တယ်၊ သီရိဖုန်းပါပိတ်တယ်။ ကျနော်ဆောက်တည်ရာမရဘူးဗျာ။
တချိန်လုံး ဖုန်းခေါ်နေတယ်။ ညရောက်မှ သီရိဆီကိုခေါ်လို့ရတယ်။ “သဲ…သီရိ” “ဒီမှာကိုကို နောက်သီရိဆီဖုန်းလုံးဝမဆက်နဲ့၊ မိဘတွေသဘောမတူတဲ့ ရှင်နဲ့ဘယ်တော့မှမယူဘူး” “သီရိရယ် ကိုကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ သီရိကို လက်ထပ်လို့ရတဲ့နေ့အထိ ကိုကိုသစ္စာရှိရှိ ချစ်နေပါ့မယ်” “တော်ပါပြီကိုကိုရယ် သီရိကိုမေ့လိုက်တော့၊ လာလည်းမလာနဲ့တော့၊ သီရိလည်း ကိုကို့ကို မေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်” ကျနော်မျက်ရည်တွေစီးကျလာသလို သီရိလည်း ငိုနေလိမ့်မယ်၊ သီရိဖုန်းချသွားတယ်။ အချိန်တွေသာကြာလာတယ်။ ကျနော်သီရိကို မမေ့နိုင်ဘူး၊ သီရိရဲ့ အကောင့် အစစ် က ကျနော့ကို ဘလော့သွားတယ်။
သီရိက စိတ်ညစ်ပြီး အကောင့်အစစ်ကို မသုံးတော့ပဲ ဖိတ့် အကောင့်မှာ ပျော်နေတယ်လေ။အခုတော့ ကျနော်လည်း ဖိတ် အကောင့်လေးသုံးရင်း စာတွေရေးလာတယ်။ အခုသီရိနှင့် fri ဖြစ်နေပြီ။ ညီမလေးတစ်ယောက်လို သဘောထားတယ်လို့ ပြောရင်း သူ့ကိုပြောကြဆိုကြနဲ့ သူမန့်တာတွေကို ကြည့်နေမိတယ်။ ရင်နာနာနဲ့ သူ့အကောင့်လေး မီးစိမ်းလာတာကိုကြည့်ရင်း လွမ်းနေရတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်သီရိကို အရမ်းချစ်တယ်။ တနေ့နေ့မှာ သူနှင့်လက်ထပ်နိုင်မယ်လို့လဲ မျှော်လင့်တယ်။ ကျနော်ခင်များကို အရမ်းချစ်တယ် သီရိရယ် …… ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ပြျောနလေရေဲ့